ဘာကြောင့်ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲ by kyi nay - issuu
Crystal Clear (mmcybermedia.com) မှ စာရိုက် က်ေပးပါသည်။
ဘာကြောင့် ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲ ( ဖေမြင့် ) မာတိကာ အခန်း(၁)။ ကြီးပွားရေးလမ်းစ အခန်း(၂)။ထူ ။ထူးဆန်းသောဥယျာဉ်မှူး အခန်း(၃)။ အခွင့်အရေးနှင့်စွန့်စားမှု အခန်း(၄)။ မမျှော်လင့်ဘဲအကျဉ်းသားဖြစ်သွားခြင်း အခန်း(၅)။ ယုံကြည်မှု အခန်း(၆)။ တစ်ခုတည်းသောပန်းတိုင်၌အာရုံစူးစိုက်ခြင်း အခန်း(၇)။ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း အခန်း(၈)။ စကားလုံးများ၏စွမ်းအား အခန်း(၉)။ နှင်းဆီနှလုံးသားကိုစတင်တွေ့သိရခြင်း အခန်း(၁၀)။မသိ ။မသိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းစေခြင်း အခန်း(၁၁)။ကိ ။ကိန်းဂဏန်းနှင့်နည်းစဉ်များ အခန်း(၁၂)။ဘဝနှ ။ဘဝနှင့်ချမ်းသာသုခအကြောင်း အခန်း(၁၃)။တစ် စ်သက်တာလိုအင်ဆန္ဒများကိုဖွင့်ဟခြင်း အခန်း(၁၄)။နှ ။နှင်းဆီဥယျာဉ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ အခန်း (၁၅)။ လမ်းခွဲရမည့်အချိန်
Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
အသက်၄၀ဆယ် ဆယ်မှာ ကြံစည်နေတယ်။
“... ဒီအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ မင်းက သုံးသောင်းရပြီး သူတ့ကို သုံးသိန်းရနေတာဟာ သူတို့မှာ မင်းမသိသေးတဲ့
Mark Fisher ၏ The Instant Millionaire စာအုပ်ကို စတွေ့စဉ်အခါက ထူးခြားလှသည် မထင်ခဲ့ပါ။ ကြီးပွားချမ်းသာရေးဆိုင်ရာ
နည်းကောင်း လမ်းကောင်းတစ်ခုခု ရှိနေလို့လို့ မဆိုနိုင်ဘူးလား..”
အနည်းငယ်လှန်လျောကြည့်သည့်အခါ၌မူ ဝတ္ထုဟန်ဖြင့်ရေးသားထားကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် တစ်မျိုးတစ်ဘာ
သာပေပဲဟု သဘောပေါက်မြည်း စမ်းကြည့်ရန်ဝယ်ယူလာခဲ့မိသည်။
တကယ်တမ်းဖတ်ရှုသည့်အခါ၌မူ လက်ကမချနိုင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှကြောင်း အံသြစွာ တွေ့ရှိရသည်။ စာအုပ်ကလည်း ခပ်ပါးပါးဖြစ်နေရာ တောက်လျှောက်ပင်ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ *
လူငယ်တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဉာဏ်ရည်မဆိုးပါ၊ ချမ်းသာချင်စိတ်လည်းရှိသည်။သို့သော် သည်ကနေ့
အထိ အခြေအနေမကောင်း။ ပြန်ပြောင်း စဉ်းစားကြည့်လျှင် မရှည်လျားသေးသည့် သူ့ဘဝခရီးတလျှောက်
စာအုပ်ဖတ်ရင်းက “မာ့ခ်ဖစ်ရှာ”အား ကျွန်တော်မကြာခဏ ချီးကျူးေ ကျူးနေခဲ့မိသည်။
မအောင်မြင်တာတွေ အရေးနိမ့်တာတွေချည်း ပြည့်နှက်နေသယောင်။ သို့သော် တစ်နေ့ကံကြမ္မာ ကောင်းကြုံ
ကြီးပွားချမ်းသာရေး သဘောတရားများကို လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဇာတ်လမ်းတစ်ခုပမာ ဆွဲဆောင်အား
လိမ့်မည်ဟူ၍ကား သူ မျှော်လင့်ယုံကြည်ဆဲ။
ကောင်းလှသော ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲတွင် ထည့်သွင်းပေးထားပုံမှာ သူ့နေရနှင့်သူ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိသလောက်၊
အဲသည်လို မကြုံမီ ယခုလောလောဆယ်ကာလတွင်တော့ ဒုတိယတန်းစား ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ
စာဖတ်သူများအတွက်လည်း ကျမ်းပုံသဏ္ဌာန်စာအုပ်များ ဖတ်ရသည်ထက် ဦးနှောက်ရော နှလုံးသား တွင်ပါ ထိထိခိုက်ခိုက်ရှိစေပါသည်။
သူလက်ထောက် စာရင်းကိုင်ဝင်လုပ်နေရသည်။ လခက သုံးလောက်စွဲလောက် မဟုတ်တော့ သည်အလုပ်ကို
သူ မခင်တွယ်၊ ဆက်လုပ်ချင်စိတ်ပင် မရှိတော့။
မသိစိတ်၏ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း ရေးသားထားပုံများမှာ အထူးသဖြင့် ရှင်းလင်းပီပြင်လှပါသည်။ *
သို့သော် ဒါမလုပ်လျှင်လည်း တခြားဘာသွားလုပ်မည်နည်း။ စာရေးဆရာလုပ်ရကောင်းမလား သူ
စဉ်းစားသည်။ ဝတ္ထုကြီး တစ်ပုဒ်ရေး၊ ထအောင်မြင်သွားလျှင် နေ့ချင်းညချင်းနာမည်ကြီးမည်။ နာမည်နှင့်အတူ
ဖစ်ရှာသည် စာရေးကောင်းသူ သက်သက်မဟုတ် ကိုယတ်တိုင်ကြီးပွားအောင် ကြံဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်
ကနေဒါလူမျိုး သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ ယခုစာအုပ်သည် မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာ လူငယ်လူရွယ်များအနေနှင့်
အောင်မြင် ကြီးပွားအောင် စွမ်းစောင်နိုင်ကြပါစေ။
သို့သော် လက်ရှိအလုပ်ကို မလုပ်ချင်တော့တာလည်းအမှန်ပင်၊ သည်အလုပ်ကို စိတ်ကုန်နေတာ
အင်း၊ ဒါလည်း ပြောတာသာလွယ်သည်။ တကယ်ရေးမည်ဆိုလျှင် ဘယ်မလဲဝတ္ထု။ သူက တစ်ခါမျှ
စိတ်ဓာတ် ထက်သန်နိုးကြားမှု အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ကြလိမ်မည်ဟု အလေးအနက် ယုံကြည်မိပါသည်
Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad
အပြင် အခြားဘာသာ တစ်ဒါဇင်ကျော်မျှဖြင့် ပြန်ဆိုပြီးခဲ့သည့် ကမ္ဘာသိစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူ
တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ သူဌေးဆို သူကိုလည်း သူ ကြည့်မရတော့။ သည်လူက တစ်မနက်လုံး သတင်းစာ -2-
mmcybermedia.com ထိုင်ဖတ်မည်၊ ပြီး နေ့လည်စာဟု ဆိုကာ သုံးလေးနာရီအပြင်ထကွက်မည်။ စိတ်ကလည်း အပြောင်းအလဲ
စဉ်းသာစဉ်းစားနေရသည်။ ပြဿနာ၏ အဖြေမှန်ကို သူရှာမရပါ။တစ်နေ့မှာတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်
အလွန်မြန်သည်။ ခု တစ်ခု ခိုင်းထားခဲ့ပြီး တော်ကြာကျတော့ ဒါမဟုတ်ဘူး၊ ဟိုဟာလုပ်ပါဟု ဆိုပြန်သည်။
အလုပ်တွေက အားလုံးကမောက်ကမ။ သည်ပုံစံနှင့် ကုမ္ပဏီဘယ်မှာ တိုးတက်နိုင်ပါမည်နည်း။
သူဌေးသာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည် မဟုတ်။ ကျန်သည့် ကုမ္ပဏီအမှုထမ်းတွေ ကြည့်လိုက်
သူတွေဖြစ်နေသည်။ သူတို့ကို သွားတိုင်ပင်၍အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်း ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။ ကျွန်တော်
ဒီအလုပ်ကထွက်ပြီး စာရေးဆရာလုပ်တော့မယ်ဗျာဟု ပြောလျှင် သူ့ကို ဒီကောင် "ပေါက်" သွားပြီဆိုပြီး
ရောက်မည်ဟု သူကဆိုသည်။ ဒုက္ခ။
ဘာသာစကားခြားသလို ဖြစ်နေသည်။ လူတွေသာမက သူ့စားပွဲပေါ်က စာရွက်စာတမ်းပုံကြီးနှင့်လည်း သူ လုံးဝမပတ်သက်ချင်တော့။ စီးကရက်ကြော်ငြာ၊ မော်တော်ကားကြော်ငြာ၊ ဘီယာကြော်ငြာ၊ ....ကြော်ငြာ
“ သုံးဆယ့်နှစ်နှစ်ပါ ”
ကြော်ငြာ ကြော်ငြာတွေ၊ သည်ကြော်ငြာတွေဖြင့် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပွားကြသည်မသိ၊ သူကတော့
တကယ်တော့ အလုပ်ထွက်စာ တစ်စောင်ပင် လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လလောက်တုန်းက သူရေးခဲ့
လူငယ်က မပွင်တပွင့်ဖြေသည်။ သူ့ဦးလေး ဘာသဘောနှင့် မေးသလဲ သူရိပ်စားမိ
“ ဟ … မင်းက အသေကြေ အလုပ်လုပ်တိုင်း ချမ်းသာတယ်လို့ မှတ်ထားသလား...”
“ ဒါတော့ ဦးလေးရာ၊ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်၊ ကြိုးစားမှ ချမ်းသာမယ်လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား..”ား “ အေး … ထားပါတော့ ပါတော့ကွာ၊ မင်း အခုတစ်နှစ် ဘယ်လောက်ရသလဲ၊ ဒေါလာ ၃သောင် သောင်းလောက်
စိတ်ဓါတ်ကျသွားတာလား......၊ ဒါမှမဟုတ် သူက လူမအိုသေးခင် စိတ်အိုသွားလေပြီလား။
ရှိမလား … ” “ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီလောက်ဆိုပါတော့… ”
အလုပ် ချိန်ဟာ တစ်ပတ်မှာ နာရီ ငါးဆယ်ကျော်လောက်အထိရှိတယ်၊ ဒီကြားထဲ... ”
အမျိုးမျိုးတွေနှင့် နေ့ရွေ့ ညရွေ့လုပ်တာ အကျင့်ပါသွားပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကြွေးတွေထူလွန်းပူလွန်းလိ့မျုား သူ
“ ပြောချင်လဲ ပြောတော့ဗျာ၊ ကျွန်တော်လည်း အသေအကြေအလုပ်လုပ်တာပဲ။ တခါတလေဆိ ခါတလေဆိုရင်
သားသား။ ခုတော့ ဘာတွေကသူ့ကို တုတ်နှောင်ထားသည်လဲ။ သူဘာကြောင့် ပျော့ညံသွားသည်လဲ။ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ
ချမ်းသာနေပြီကွ၊ မင်းက ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ပိုက်ဆံ လိုက်ချေးနေရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ ”
သေးသည်။ သည်စာကို အိတ်ထဲထည့်ပြီး သူဌေးအခန်းထဲ ဝင်တာ ဆယ်ကြိမ်ထက် မနည်းတော့။ သို့သော် သည်လောက်
“ ပေါလ်ဂက်တီဟာ အသက် ၂၃နှစ်မှာတင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မင်းသိလား၊
ဒါတွေကို လှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင်ပင် လုံးဝစိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေပြီ။
“ မင်းအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ”
သည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူ့အတွက် ပေါင်းသင်းစရာလူပင် မရှိတော့။ သည်လူတွေနှင့် သူ့အကြား
လျှင်လည်း တစ်ယောက်မျှ အခြေအနေမကောင်း။ ဘာရည်မှန်းချက်မျှမရှိ၊ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိသည့်
mmcybermedia.com “ ဒါဖြင့် တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၃သိန်းရအောင်ဆိုရင် မင်း အခုထက် ၁၀ဆ ပို အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား၊
“ ဟင့်အင်း၊ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး ”
“ သူက ဘယ်ကျောင်းကမှထွက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ပိုက်ဆံ သန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာအောင်
အလွန်ဆုံး မင်းလုပ်သလောက်ပဲ ရှိမှာပေါ့ကွ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ ”
သေချာတယ်နော်၊ ” “
“ အေး၊ မင်းမဆိုးဘူး၊ အဲဒီလောက်သဘောပေါက်ဖော်ရတယ်ဆိုရင် မင်းအများကြီး ဟုတ်နေပြီ၊ အဲ့ဒီလောက်ကို
တအား ပြင်းပြနေသည်။ ချမ်းသာရင်ဘာတွေလုပ်မယ်ဟူ၍သာ စိတ်ကူးတွေယဉ်နေသည်။ ချမ်းသာအောင်
“ ကဲ ၊သွားကြည့်စမ်းကွာ၊ သူနဲ့သွားတွေ့၊ သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ကို မင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်၊ သူနေတဲ့
အိမ်က ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲကလို တကယ့်ဆန်းဆန်းပြားပြား တစ်မြို့လုံးမှာ အထူးခြားဆုံး၊ လှလည်းအလှဆုံး၊
ရှာရတာ မခက်ဘူး ”
နေ့ချင်းညချင်း သန်းကြွယ်သူဌေးဘဝ ရောက်သွားအောင် သွန်သင်ညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့ ဓနပညာ ပါမောက္ခကြီး၊
“ မရောက်ဖူးပါဘူး ”
ဦးလေးဖြစ်သူက အတန်ကြာ ငြိမ်သက်နေပြီးမှ သူ့ တူကို ပြုံး၍ကြည့်ကာ စကားတစ်ခွန်းဆိုသည်။ " ချမ်းသာအောင်
“ အဲ့ဒါပါမောက္ခနေတဲ့မြို့ပဲကွ၊ မင်းရောက်ဖူးသလား ”
ဘာကစ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာ တစ်ခါမျှ သေသေချာချာ မစဉ်းစား မကြံစည်ဖူးခဲ့။
ထောက်ပြသည်။ အစွန်အဖျားရှိ မြို့ကလေးတစ်မြို့၊”
သူ့ဦးလေးစကားကို လူငယ်မငြင်းနိုင်။ တကယ်လည်း သူကိုယ်တိုင် ချမ်းသာချင်စိတ်တွေကသာ
“ ဟုတ်တယ် … လူငယ်ကခေါင်းညိတ်သည်။ ”
စဉ်းစားမှ ရနိုင်မှာပေါ့ကွ ”
အဲဒါနဲ့တင် မပြီးဘူး၊ နည်းလမ် မ်းလဲသိဦးမှ၊ ”
ဒီနေ့ထိ ဘာကြောင့် မချမ်းသာသလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ရင် ငါချမ်းသာမလဲ ဆိုတာ နည်းနည်းပါးပါး အချိန်ပေး
ဟုတ်ပြီကွ၊ ဒါက မရှိမဖြစ်တဲ့ အခြေခံအချက်တစ်ရပ်ပဲ၊ အရင်ဆုံး ချမ်းသာချင်စိတ်ရှိရမယ်၊ ဒါပေမယ့်
ဒေါင်ချာစိုင်းနေတယ်၊ နည်းနည်းမှ မအားဘူး၊ ခဏတဖြုတ်လေးတောင် စဉ်းစားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး။ ငါ
နည်းနာတွေ သူထိုးထည့်ပေးလိုတာ၊ ..ဒါနဲ့ နေဦးကွ၊ တစ်ခုတော့ မေးရဦးမယ်၊ မင်း တကယ်ချမ်းသာချင်တာ
“ အဲဒီလိုဆိုရမယ့်သဘောဖြစ်နေတာပါ ”
ဆိုပြီး ပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ သူ့ဘာသာ ငွေတစ်သန်း မကြာမတင် ရသွားနိုင်မယ့်စိတ်ဓါတ်နဲ့
မင်းမသိသေးတဲ့နည်းကောင်း လမ်းကောင်းတစ်ခုခုရှိနေလို့ လို့ မဆိုနိုင်ဘူးလား … ”
တကယ်လည်း လူတစ်ယောက်ကို ချက်ခြင်း ချမ်းသာသွားအောင် သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်၊ ငွေတစ်သန်းရော့ယူ
“ အဲ့ဒီတော့ ဒီအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ မင်းက သုံးသောင်းရပြီး သူတို့က သုံးသိန်းရနေတာဟာ သူတို့မှာ
mmcybermedia.com “ အဲ့ဒီနည်းကို ဦးလေးပဲ တစ်ခါတည်း ပြောလိုက်ပါလား၊ ကျွန်တော်က အလကား ပင်ပန်းခံပြီး
“ မဟုတ်ဘူးကွ၊ ငါမှာက ပြောခွင့်မရှိဘူး၊ ပါမောက္ခကြီးက ငါ့ကို ဒီနည်းစဉ်မပေးခင် ငါ့ဆီက
ရတဲ့အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲမတောင်းကြဘူ၊ အဲဒါမှာတာပဲ"
ကတိတစ်ခုတောင်းတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ၊ ဒါပေမယ့် ငါ ဒီနည်းလမ်းဘယ်ကရသလဲ မေးလာသူရှိရင်တော့ သူ့ဆီကို လမ်းညွှန်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ကွ ” အခန်း (၂)
လူငယ်ခေါင်းထဲ အတော် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်သွားသည်၊ သို့သော် သိချင်စိတ်လည်း သူ့မှာပြင်းပြ
နေသည်။ “ ဦးလေး လုံးဝပြောမပြနိုင်ဘူး ဆိုတာသေချာလား…”
အဲသည့်နေ့ နေ့လည်မှာပင် ဓနပညာ ပါမောက္ခကြီးနေထိုင်ရာမြို့သို့ သူထွက်လာခဲ့သည်။ ခရီးကမနီး။
“ လုံးဝသေချာတယ်၊ ငါက ပါမောက္ခကြီးဆီထောက်ခံစာ ရေးပေးရုံလောက်ပဲ တတ်နိုင်တယ်၊ ”
သည်ခရီးတစ်လျှောက်လုံး သူ တွေးတောပူပန်လာခဲ့သည်။ ပါမောက္ခက သူ့ကိုကြိုဆိုပါ့မလား၊ ဘယ်သူ
သည်နောက် ပြောပြောဆိုဆို သူ့ဝက်သစ်ချစားပွဲကြီးဆီသို့ သွားကာ အံဆွဲထဲက စက္ကူဖြူတစ်ရွက်
ဘယ်ဝါမှန်း မသိသူတစ်ယောက်ကို သူ၏လျှပ်တပြက် ချမ်းသာကြွယ်ဝရေး လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်များ ဖွင့်ဟ
ယူ၍ ကလောင်နှင့် ခက်သွက်သွက် ရေးခြစ်နေသည်။ ပြီးစက္ကူကို ခေါက်ကာ စာအိတ်ထဲ ထည့်ပိတ်သည်။
သည်နောက် ပြုံးကာ သူ့တူဆီ လှမ်းပေးသည်။
ရေးပေးလုက်ိသလဲသူသိချင်လာသည်။
စိတ်ကူးသည်။ မဖတ်ဖြစ်။ သူ့ကိုသူ ထိန်းသည်။ သို့သော် ပါမောက္ခကြီး အိမ်နား နီးကပ်လာသည့်အခါ၌မူ သူ
“ အဲ့ဒါမင်းအတွက် မိတ်ဆက်စာ၊ ရော့ ဒါက ပါမောက္ခ က္ခကြီးလိပ်စာ၊ တစ်ခုပဲမျာလိုက်မယ်၊ မင်း
မထိန်းနိုင်တော့။ စာအိတ်ကို ဖွင့်ပြီး အထဲက စာကို ထုတ်ယူလိုက်မိသည်။ သူ့ဦးလေးဘာတွေရေးလိုက်သလဲ။
ဒီအထဲကစာကို ဖွင့်မဖတ်နဲ့၊ ဖတ်လိုက်ရင်ဒီစာက မင်းအတွက် လုံးဝအသုံးမဝင်တော့သလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊
စာရွက်ကို ဖြန့်လိုက်ချိန်မှာတော့ သူအကြီးအကျယ်အံအားသင့်သွားရသည်။ စာအိတ်ထဲထည့်ရာမှာပဲ
အေး ဒါပေမယ့် ငါတားတဲ့ကြားထဲက ဖွင့်ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်လဲ ဖတ်မကြည့်ရသေးသလို ဟန်ဆောင်ပြီး
နေလိုက်၊ အဲဒါက လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့ကွာ၊”
ဦးလေးက သူ့ကို တမင်နောက်လိုက်တာလား။
မိတ်ဆက်စာက ဘာမှ ရေးမထားသည့် ဗလာစာရွက်သက်သက်ဖြစ်နေသည်။
သူ့ဦးလေး ပြောနေတာတွေ သူ လုံးဝနားမလည်း၊ သို့သော် ကိစ္စမရှိ။ သူ့ဦးလေးက အနေအထိုင်
သူ စိတ်လည်းတို စိတ်လည်းပျက်ကာ သည်စာရွက်ကို ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ရန် ကြံစည်မိသေးသည်။
အပြောအဆိုမှာ သူများနဲ့မတူ၊ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသည်ဆိုတာ သူသိပြီးသား။ပြီး ယခုကိစ္စမှာ သူ့ဦးလေး
သို့သော် သည်အချိန်ပါမောက္ခကြီးအိမ်ကို လှမ်းမြင်နေရပြီ။ ခြံဝမှာ အစောင့်တစ်ယောက် ချထားတာလည်းသူ
သူ့ကို တကယ်ကူညီသည်ဆိုတာ သူ ယုံကြည်လိုက်ပြီးပြီ။
သတိပြုမိသည်။ သည်လူက သူ့ကို မသိမသာ အကဲခတ်ချင် ခတ်နေနိုင်သည်။ သို့နှင့် စာကို အင်္ကျီအိပ်ထဲ အသာပြန်ထည့်ပြီး ဂိတ်ဝဆီသို့သာ လျှောက်လာခဲ့သည်။
ဦးလေးကို ကျေးဇူးတင်စကားဆြို ပီး သူ ထွက်လာခဲ့သည်။
mmcybermedia.com ဂိတ်စောင့်၏ မျက်နှာက တကယ့်ဂိတ်စောင့် ပီသစွာ တင်းတင်းမာမာ။ သူပြုံးပြသည်ကို နည်းနည်း လေးမျှပြန်ပြုံးဖော်မရ။
ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ ဘဏ္ဍာစိုးက သူ့အား မေးသည်။
“ ဓနပညာပါမောက္ခကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ပါ ”
"ချိန်းထားသလား" "မချိန်းပါဘူးခင်ဗျား၊ ဒါပေမယ့်...."
"ချိန်းမထားဘူးဆိုရင် မိတ်ဆက်စာပါသလား" မိတ်ဆက်စာက
ဘဏ္ဍာစိုးတစ်ယောက်က တံခါးကို လာဖွင့်ပေးသည်။
"ဘာကိစ္စရှိလို့လ"ဲ အစောင့်က မေးသည်။
ထည်ဝါလွန်းလှသည်။ အိမ် မ်ေရှ့တံခါးမမှာသူတို့ ရပ်နေသည်။ လုံးဝ သန့်ပြန့်သားနားစွာ ဝတ်ထားသည့်
မကြာခင်ကမှ သူတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။ သူနည်းနည်း တွန့်သွားသည်။ သို့သော် ဟန်ကိုယဖ့်ို့ပဲ။ ဂိတ်စောင့် ပြဿနာ
ဘဏ္ဍာစိုကြီးက လူငယ်အား ပန်းခြံဝသို့ လိုက်ပို့သည်။ ပန်းခြံက သာမန်နေအိမ်ပန်းခြံငယ်မျိုးမဟုတ်၊
လောက်တော့ ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ပေါ့။ ပါပါတယ်ခင်ဗျ ဆိုပြီး အင်္ကျီအိပ်ထဲက စာအိတ်ကို တစ်ဝက်လောက်
ဧရာမဥယျာဉ်ကွက်လပ်ကြီးဖြစ်သည်။ မြက်ခင်းရှိသည်၊ သစ်ပင်ကြီးများရှိသည်၊ ရေကန်ရှိသည်။ ပန်းခင်းများ
ပန်းရုံတောများလည်းရှိသည်။ လူငယ်က ပန်ခြံထဲဟိုဟိုသည်သည် လျှောက်ကြည့်ရင်းဥယျာဉ်မှူး အဘိုးအိုတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့
သို့သော် ဂိတ်စောင့်က သည်မျှနှင့် မကျေနပ်။ ခင်ဗျားကျုပ်ကို
သည်။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးက အသက် ၇၀ ကျော်ခန့်။ သူက နှင်းဆီပန်းရုံတစ်ခုကို ပြုပြင်နေသည်။ လူငယ်
ဘာအကြောင်ရိုက်တာလဲ ဟု ဆိုလိမ့်မည်။ မပေးပြန်လျှင်လည်း သူကဝင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်။ သို့သော်
သူ့အနီးရောက်လာတော့ ခေါင်းမှာဆောင်းထားသည့် မြက်ဦးထုပ်ကြီးကို အသာပင့်ကာ ဆီးကြိုသောအပြံ သာအပြုံးနှင့်
သည်အချိန်မှာပင် သူ့ဦးလေးပြောခဲ့သည် စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်အမှတ်ရသည်။
နှုတ်ဆက်သည်။ လူက အိုမင်းသည့်အသွင် ပေါ်နေသော်လည်း မျက်လုံးများကတော့ နုပျိုဆဲ၊ တောက်ပ
ဖွင့်ဖတ်မိတယ်ဆိုရင်လဲ ဖတ်မကြည့်ရသေးသလို ဟန်ဆောင်ပြီး နေလု နလိုက်.... ဆိုသောစကား။ လောလောဆယ် လုပ်စရာ သည်နည်းပဲရှိတာ့သည်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ စာအိတ်ကိုထုတ်ပြီး ဂိတ်စောင့်
“ ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲ ” အဘိုးအိုက သူ့အား ရင်နှီးဖော်ရွေသောလေသံဖြင့် မေးသည်။
“ ဓနပညာ ပါမောက္ခကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါ ”
ဂိတ်စောင့်က စာအိတ်ကို ဖွင့်သည်၊ စာရွက်ကို ဖြန့်သည်။ ပြီးတော့... အင်း.. ဖတ်သည်ဆိုပါတော့။ စာရွက်ကိုကြည့်ပြီး သူ့မျက်နှာအမူအရာက လုံးဝပြောင်းမသွား။
“ သြော် ဟုတ်လား၊ ဘာအတွက်များပါလိမ့်ဗျာ၊ မေးတာစိတ်မရှိနဲ့နော်။ ”
"ကောင်းပြီ" ဟုဆိုပြီး စာအိတ်ကို လူငယ်အားပြန်ပေးသည်။ ကျုပ်နောက်က လိုက်ခဲ့ပါ တဲ့။ သူက
“ သြော်.. အင်း... ကျွန်တော်သူ့ဆီက ကြံဉာဏ်တောင်းမလို့ပါ။ ”
ခပ်တည်တည်ပင် ပြောပြီး အိမ်ကြီးဆီသို့ ခေါ်သွားသည်။
mmcybermedia.com “ အော် ဟုတ်တာပေါ့ ”
အဘိုးအိုပြောသည့််စားက သူ့အတွက် အကြောင်းအကျိုးပြည့်ဝလှသည်တော့ မဟုတ်၊ သို့သော် သူ့မှာ ပြန်လှန်းချေပ ပြောဆိုဖိုက အင်းအားမရှိသလို ဖြစ်နေသည်။ သို့နှင့် အဘိုးအိုက နောက်တစ်ကြိမ်
အဘိုးအိုက သူ့နှင်းဆီပင်ဘက် ပြန်လှည့်သွားပြီးမှ တစ်စုံစတ်ခုကို သတိရဟန်ဖြင့် လူငယ်အား
တောင်းခံသည့်အခါ၌ သူ့အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံကို ထုတ်၍ ပေးလိုက်မိသည်။
မေးသည်။ “ ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ မောင်ရင့်မှာ ၅ဒေါ်လာတန် တစ်ရွက်လောက် မပါဘူးလား၊ ”
ငါးဒေါ်လာ ဆိုပြီး လူငယ်နည်းနည်း မျက်နှာပျက်သွားသည်။ “ ပါပါတယ်... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ
“ လူတွေက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဟာကို တောင်းရမှာဝန်လေးကြတယ်၊ တောင်းမိရင်လဲ ကိုယ်တောင်းတာ
အဲဒီ ငါးဒေါ်လာ တန်တစ်ရွက်ပဲပါတယ်ဗျ၊ ” လူငယ်က ခပ်ရှက်ရှက်နှင့် ပြောလိုက်သည်။
ရတဲ့အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ မတောင်းကြဘူး၊ အဲဒါမှားတာပဲ … ”
“ ကိစ္စမရှိဘူး၊ ကျုပ်က အဲဒီ ငါးဒေါ်လာရရင်ဖြစ်ပါတယ် ”
သည်အခိုက် ပန်းခြံထဲသို့ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးရောက်လာပြိး အဘိုးအိုအား ရိုသေလေးစားစွာ စကား ပြောသည်။
သူများဆီက ပိုက်ဆံကိုတောင်းနေတာ မှန်သော်လည်း အဘိုးအိုအမူအရာက တောင်းပန်တိုးလျှိုမှု အလျဉ်းမပါ။
“ ကျွန်တော်ကို ပိုက်ဆံ ၅ ဒေါ်လာလောက်ပေးပါခင်မျာ။ စဖိုမှူးက ဒီနေ့ခွင့်ယူပြီး ပြန်မလို့၊ သူ့အတွက်
လုပ်ခရှင်းပေးဖို့ တောင်းနေပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ငွေမပြည့်ဘူး။ ငါးဒေါ်လာလိုနေတယ်ခင်ဗျ။”
တစ်ယောက်အနေနှင့် ဥပဓိရုပ်က ကောင်းလွန်းသည်။ လေးစားခင်မင်ချင်စရာ သွင်ပြင်အပြည့်နှင့်။ သူပြော သမျှကို တစ်ဖက်သား လက်ခံသွားစေမည့် သြဇာဓါတ်အား ဆွဲဆောင်မှု စွမ်းအားတွေ သူ့ဆီက ဖြာထွက်
အဘိုးအိုက ပြုံးသည်။ သူ့ အင်္ကျီအိတ်ထဲ နှိုက်လိုက်တော့ ငွေစက္ကူ တစ်ထပ်ကြီးပါလာသည်။ ငွေက
အတော့်ကိုများသည်။ ၂၀တန် တန် ၅၀တန် ၁၀၀တန်တွေ။ အဲသည်ဘေးမှ လူငယ်ဆီက မရအရတောင်းယူ ထားသော
“ ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ” လူငယ်က တောင်းပန် တိုးလျှိုသောလေသံဖြင့် ပြောသည်။
လိုက်သည်။ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးက ငွေစက္ကူကို ယူပြီးနောက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်။ ထို့နောက် ကျိုးနွံသော
ဒါပေးလိုက်ရင် ကျွန်တော် အိမ်ပြန်စရိတ်မရှိမှာ စိုလို့ပါ၊
အမူအရာဖြင့် အရိုအသေပြုကာ အိမ်ဆီသို့ ပြန်သွားသည်။
“ ခင်ဗျား ဒီနေ့အိမ်ပြန်မှာမို့လို့လား… ”
လူငယ် အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်သွားသည်။ ဘယ်လို အဘိုးကြီးလဲ၊ အိတ်ထဲမှာ ငွေတွေ
“ အာ... အင်း.. ဒီလိုပါ၊ ကျွန်တော် မပြောတတ်သေးပါဘူး၊ ကျွန်တော်ပါမောက္ခကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးမှပဲ
တစ်ထပ်ကြီး ရှိပါလျှက် မိမိထံက ရှိစုမဲ့စု ငါးဒေါ်လာကို လှည့်ပတ်ရယူသည်။
“ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ဆီက ပိုက်ဆံကိုဘာလို့ တောင်းတာလဲ သူက ဒေါသကို တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား
“ ဒါဆို ခင်ဗျားဒီပိုက်ဆံ ဒီနေ့မလိုသေးပါဘူး၊ ကျွန်တော်ကို ချေးရမှာ ဘာကြောင့် တွန့်တိုနေရတာလဲ၊ မနက်ဖြန်လည်း
ထိန်းကာ မေးသည်။ ခင်ဗျားမှာလိုနေတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့၊”
ပြောနိုင်မလဲ၊ မဟုတ်ဘူးလား။” Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com “ ဟ ဘာလို့ မလိုရမှာလဲကွ၊ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း ငါ့မှာ
မရှိတာ၊ ” သူက
“ သေသေချာချာတော့ သသေချာချာတော့ မသုံးသပ်မိပါဘူးခင်ဗျာ ”
“ ဒါဆို မောင်ရင် အဲဒါအရင်ဆုံး လုပ်သင့်တယ်၊ ကဲ ငါ့ရှေ့မှာပဲ အသံထွက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာ၊
“ ငါးဆယ်တန်ကြီး ပေးလိုက်လို့ဖြစ်မလား၊”
မင်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သလဲ အကဲခတ်ကြည့်ရအောင် ”
“ ခင်ဗျား ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ဘာလို့အိတ်ထဲထည့်ထားတာလဲ .. ” သူ မနေနိုင်၍ မေးမိသည်။
လူငယ်က စမ်းတဝါးဝါး ထော့တီးထော့နဲ ဖြစ်နေသည်။ နောက်တော့မှ ဆက်မပြောနိုင်ဘဲ ရပ်လိုက် ရသည်။
“ ဒါက အိတ်ဆောင်လေကွာ၊ အသေးသုံးပေါ့၊ အကြောင်းကိစ္စ ပေါ်လာရင် အလွယ်တကူ ကောက်သုံး
“ ကဲ ၊ ဟုတ်ပါပြီကွာ၊ မင်းမှာ အသံထွက်ပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိသေးဘူး၊ ဒါနဲ့
လို့ ရအောင် အိတ်ထဲ ငွေတစ်သောင်းလောက်တော့ အမြဲဆောင်ထားတယ်။”
တစ်သောင်း လူငယ် ပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်။
တစ်သန်းနီးပါး ချမ်းသာနေပြီ၊ အဲဒီအချိန် သူ့အသက် ၂၆နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် ”
“ ဒါဆို အဘက ဓနပညာပါမောက္ခကြီးပေါ့ ”
“ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီထက် ငယ်သေးတဲ့အချိန် သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစလုပ်တော့ ဒေါ်လာ ၅၀၀ကျော် ကျော် လောက်ရှိတာ၊
“ မှန်ပါသဗျာ ” ဥယျာဉ်မှူးအဘိုးကြီးက ဆိုသည်။
ရရမရှိဘူး...၊ ကဲနောက်မှ ဆက်ပြောကြတာပေါ၊ ညစာစားချိန်ရောက်နေပြီ၊ မင်းလဲ ငါနဲ့ အတူတူ စားပါလား၊” စားပါလား၊
“ မောင်ရင် ရောက်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြောစမ်းပါဦး၊ ဘယ်သူ လွှတ်လိုက်
“ ဟုတ်ကဲ့၊ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ”
သလဲဆိုတာ .. ”
ပါမောက္ခကြီးနောက်က သူ လိုက်ပါသွားသည်။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ စာပွဲက နှစ်ယောက်တွက်
“ ကျွန်တော့်ဦးလေးပါခင်ဗျာ။ ဦးလေးက သူဟာပါမောက္ခကြီးရဲ့ မထမဆုံးတပည့်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ”
“ သြော် …. အေး၊ သူလား၊ ငါ့ဆီ ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာက ရောက်လဲတဲ့သူပေ့ါ၊ တော်တယ်၊
“ ထိုင်ပါကွ ”
ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ရှိတယ်၊ အမှန်တော့ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ကြီးပွားချမ်းသာလာသူမှန်သမျှ ကိုယ်ပိုင်
အတွေးအခေါ်ရှိသူချည်းပါပဲ၊ ဒါနဲ့ ပြောစမ်းပါဦး၊ မောင်ရင်က ဘာကြောင့်ခုထိ မချမ်းသာရသေးတာတုန်း၊
သည်နေရာက အိမ်ရှင်ထိုင်လေ့ရှိသည့်နေရာ။ သို့သော် ပါမောက္ခကြီးက လူငယ်အား နေရာပေးကာ သူက
ကိုယ်တိုင်ကော ဒီကိစ္စ သေသေချာချာစဉ်းစားရဲ့လား …”
သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ ဖြစ်နတော၊ အိုနာစစ်ဆိုရင် တောင်အမေရိက က အင်္ဂလန်ထွက်လာတော့ ဒေါ်လာ
အဲ့သည်တော့မှပင် သူသဘောပေါက်သည်။ ဘဏ္ဍာစိုးကြီး၏ ရိုကျိုးသော အမူအရာ၊ များပြားလွန်း
mmcybermedia.com ဧည့်သည်၏ လက်ျာဘက်ထိပ် ကုလားထိုင်မှာ ဝင်ထိုင်သည်။သူ့ရှေ့တည့်တည့်တွင် သဲနာရီတစ်လုံးရှိသည်။ နာရီပေါ်၌ ရိုးလှပြီဖြစ်သည့်
“ ဟုတ်ကဲ့၊ ယုံကြည်ပါတယ် ”
စကားဟောင်းတစ်လုံး ရေထွင်းထားသည်။ အချိန်သည်ငွေဖြစ်၏ တဲ့။
စားပွဲထိုးလုပ်သူက ဝိုင်ပုလင်း ယူလာပြီး သူတို့ ခွက်များထဲ ဖြည့်ပေးသည်။ မင်းရဲ့ ပထမဆုံး
မယုံကြည်တာမှာမှ အဲဒီနည်းလမ်း ရှိတယ်ဆိုတာကို မယုံကြည်ရုံကြည်ရုံတင်မကဘူး၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း
ဒေါ်လာတစ်သန်းကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သောက်ကြရအောင် သည်လိုပြောပြီး ပါမောက္ခကြီးက သူ့ခွက်ကို
ချမ်းသာနိုင်တယ်လို့ မယုံကြည်ကြဘူး၊ တကယ်တော့ အဲဒါလည်းမှန်တာပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချမ်းသာမယ်လို့
ပြီးတော့ တစ်ငုံလေးပဲ သောက်ကာ ပြန်ချထားလိုက်သည်။ သည့်နောက် သူဆက်မသောက်တော့။
အစားကိုလည်း ထိုနည်း၎င်း။ တစ်လုပ်စာ နှစ်လုပ်စာလောက်ပဲ သူစားသည်။ “
အလုပ်လုပ်နေရတာကို ပျော်တဲ့သူတွေ၊ ထမင်းစားဖို့ သက်သက်
လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ပျော်မွေ့လို့
ဘယ်သူမျှ သည်ပုံစံမျိုးမပြောဆိုဖူးခဲ့။ ပါမောက္ခကြီးက သူ့သိချင်စိတ်တွေကို နှိုးဆွပေးနေသည်။ ကြီးပွား ချမ်းသာရေးအတွက် လျှိုဝှက်ချက်ဟာ ဘာလဲ။ သူ အငမ်းမရ သိချင်လှပြီ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောလော ဆယ်မှာပင်
လုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်ရဘဲ အလကား ထိုင်နေရမယ်ဆိုရင် စ်ိတ်တောင်ညစ်ကြမယ့်လူတွေ၊ ဒါကြောင့် ဆက်လုပ်နေကြတာ၊
လူငယ်က ပါမောက္ခကြီးပြောသမျှကို ထက်သန်စိတ်ပြည့်ဝစွာ စူးစိုက်နားထောင်နေသည်။ သူ့ကို
တူတူလိုပဲ၊ ဒါကြောင့်မို့ တချို့များဆိုရင် အားလပ်ရက်ဆိုတာမျိုးတောင် ယူလေ့မရှိကြဘူ၊ ဒီလူတွေက သူတို့ အလုပ်တော့
လုံးဝတွေ့ရနိုင်စရာ မရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။ ”
လုပ်နေတာ၊ ဝါသာနာပါလို့လုပ်နေတာ၊ သူတို့အတွက် အလုပ်လုပ်နေရတာနဲက အပန်းဖြခရီးထွက်တာနဲ့ဟာ
တကယ်သိထားသလား မသိထားဘူလား အပြတ်မပြောနိုင်သော်လည်း မိမိလိုရာရောက်အောင် စည်းရုံး
စီစဉ်ပြောဆိုသည့် နေရာတွင်တော့ ပါရဂူမြောက်သော သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီး၊ သူ့စကား
တစ်လက်စတည်း ပြောရမယ်၊ ချမ်းသာမယ့်လူများဟာ မိမိအလုပ်မှာ မလွှဲမသွေပျော်မွေ့ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ
တွေသည် တဖက်သားအား လှည့်စားရန်အကွက် ဆင်ထားသလား ဘာလားတော့ မသေချာ၊ သို့သော်
လုံးဝဥဿုံ မှန်ကန်ပေမယ်လို့၊ သူတစ်ခုတည်နဲ့ကတော့ မပြီးသေးဘူ၊ ချမ်းသာဖို့အတွက် အဲဒီစိတ်ဓါတ်အပြင်
သူသည် မိမိပြောလိုသည့်အချက်ကို အလွယ်ကူဆုံး အဖြောင့်စင်ဆုံးရှင်းလင်း ပြောဆိုတတ်သူ တစ်ယောက် ယာ
ချမ်သာအောင် လုပ်မယ့်နည်းလမ်းကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်။ ဒါနဲ့ချမ်းသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတကာ မသိတဲ့
ဆိုတာတော့ လုံးဝ သေချာနေပြီး။
လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကော မင်းယုံကြည်သလား..”
ထဲကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ချမ်းသာရေး နည်းလမ်းတွေ ဆိုင်းဘုတ်ရေး
“ အဲဒါသေချာဖို့ လိုတယ်၊ ငါတွေ့ဖူးသမျှ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေကတော့ သူတို့ အလုပ်ကို သူတို့
ထားမှု မှန်သမျှထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို ကန်ကသတ်ဟန့်တားမှုဟာ အင်အားအကြီးမားဆုံးပဲ၊ ချမ်းသာမှုနယ်ပယ် သလို
မရောက်တာ ဘယ်သူမှကန့်သတ်ထားလို့ မဟုတ်ဘူး၊သူတို့ဘာသာ သူတို့ကန့်သတ်ထားတာ။ ကန့်သတ်
မျှော်လင့်ရမယ်၊ ချမ်သာချင်စိတ်ပြင်းပြထက်သန်နေရမယ်။ လူအမျာစုကြီးက အဲဒီအဆင့်ထိမရောက်ကြဘူ။
ပါမောက္ခကြီးက မေးသည်။ ”
mmcybermedia.com ".... ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သို့လောသို့လော အနေအထားမျိုးမှာ မထားနဲ့၊
လူငယ်အကျိတ်အနယ် စဉ်းစားသည်။ ပါမောက္ခဆီက နောက်တစ်ကြိမ်ရယ်သံမကြားရဖို့
ချိတုံချတုံ တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်နဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားဘူး..."
အရေးကြီးနေပြီ၊ သို့သော် ကိန်းဂဏန်း သိပ်ကြီးကြီးမားမားသွား မပြောမိအောင်လည်း သတိရသေးသည်။ စကားကျွံ၍ မဖြစ်။
ပြားစေ့တစ်စေ့မှ မရှိတာ…” “ ဒါက အရေးကကြီးပါဘူး ”
“ ကဲ မင်းလဲ အများကြီးကြားရပြီးပြီဆိုတော့ ငါပြောမယ်၊ ကြီးပွားချမ်းသာရေးနည်းစဉ်ကို မင်းပိုက်ဆံ
“ ဘာလို့ အရေးမကြီးရမှာလဲခင်ဗျာ၊ ပိုက်ဆံမရှိဘဲနဲ့တော့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်လို့ ရနိုင်မှာလဲ
ပါမောက္ခကြီးစကားက လူငယ်အား အလစ်အငိုက်မှာ ရိုက်လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ “
“ ဒုက္ခပါပဲ၊ ဒီမှာ ငါပြောမယ် ဟိုးရှေးဘဝေသဏီကတည်းကပဲ ချမ်းသားတဲ့သူတွေဟာ သူများ
ဒါတော့ ပြောရခက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာက ဝယ်ချင်ရင်တောင် ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမှ မရှိတာ
ပိုက်ဆံတွေ လှည့်သုံးပြီး ကိုယ့်အတွက် ဓနဥစ္စာတွေ စုစည်းလာခဲ့ကြတာ၊ ငွေရှာဖို့အတွက် လက်ထဲ ငွေရှိစရာ
လူငယ်က ကမန်းကတန်း ပြန်ဖြေသည်။ ” “
မလိုဘူးကွ၊ ငါပြောတာကိုယ်ပိုင်ငွေကို ပြောတာ၊ ကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာ မင်းမှာ ချက်စာအုပ်ပါလာတယ်
မင်းကြိုက်တဲ့ ဂဏန်းပြော၊ မင်းခေါင်းထဲ ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းကို ပြောချလိုက်၊” လူငယ်
လူငယ်နည်းနည်းလန့်သွားသည်။ ပြဿနာ။ သည်မနက်ကျမှ သူက ဘာစိတ်ရူးပေါက်သည်မသိ။
ချက်လက်မှတ်စာအုပ်ကို အိတ်ထဲ ထိုးထည့်လာခဲ့မိသည်။ ဘဏ်မှာ သူ့လက်ကျန်ငွေကသူများကို ပြောလို့
အခြေအနေ။ ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူးဗျာ ဆိုပြီးမှ သူ့ပါစပ်က လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားသည်။
ကောင်းသည့် ကိန်းဂဏန်းမျိုးမဟုတ်၊ ဒေါ်လာအစိတ်လောက်ပဲ ရှိသည်။
“ ဒေါ်လာ ၁၀၀...အဲ...”
ပါမောက္ခကြီးအား သူ လိမ်ပြောရန်ကြံသေးသည်။ သို့သော် မလိမ်ရဲ။ အဘိုးကြီး၏ စူရှသော
ပါမောက္ခကြီးက တဟားဟား ရယ်သည်။ သူနှင့် စတွေ့ကတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ကြားရသည့်
မျက်လုံးများက သူ့တစ်ကိုယ်လုံးရော သူ့ဦခေါင်းထဲပါ ဖောက်ထွင်မြင်နေလိုထင်ရသည်။
ရယ်သံပင် တကယ် သဘောကျစွာ အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်သည့်အသံမျိုး။ “ တစ်ရာတည်းလားကွာ၊ ချမ်းသာရေးနည်းစဉ်ဆိုတာမျိုး ရှိတယ်လို့မင်း မယုံကြည်တဲ့သဘောလား
“ ဟုတ်ကဲ့၊ ပါပါတယ်ခင်ဗျ ”
တကယ် ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် မင်း ဒီထက်မက အများကြီးပေးနိုင်ရမှာပေါ့ကွ၊ ကဲ မင်းကို ဒုတိယအကြိမ်
အမှန်အတိုင်းပဲ သူနှုတ်မှထွက်သွားသည်။ ပြီး သံပတ်ပေးထားသည့် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပမာ အိတ်ထဲက
အခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်၊ ထပ်ပြောစမ်းကွာ၊ နောက်ထပ် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု၊ ဒါနောက်နေတာ မဟုတ်
ဘူးနော်၊ တကယ် အလေးအနက်ပြောနေတာ..”
အသွင်အပြင်က ကြောက်စရာနည်းနည်းလေးမှ မရှိ။ လူပုံကသဘောကောင်းသည့် ပုံစံမျိုး အမူအရာကလည်း Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com တစ်ခါတစ်ရံ နောက်သလို ပြောင်သလို၊ သို့သော် သည်ကြားထဲကပင် သူက အိပ်မွှေ့ချ ခံထားရသည့် ကလေး
အဲ့ဒီတစ်သိန်းရအောင် အသည်းအသန် လိုက်ရှာရတာ၊ အကယ်၍ ငွေမရှိဘူးဆိုပြီးအဲဒီ ချက်လက်မှတ်သာ
တစ်ယောက်လို ပါမောက္ခကြီးခိုင်းစေသမျှကို မငြင်းဆန်နိုင် ဖြစ်နေသည်။
အရင်ထိုးမပေးလိုက်ရင် ဧရာမအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခု ငါဆုံးရှုံးမှာ”
“ ကဲ ၊ ငါပြောတယ် မဟုတ်လား၊ အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံမရှိလဲ အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ”
ပြောပြောဆိုဆို ပါမောက္ခကြီးက သူ့ဖောင်တိန်အကောင်းစားကို အဖုံးဖွင့်ပြီး လူငယ်ထံ ကမ်းပေး
“ အဲဒါ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ငါပထမဆုံးရဖူးတဲ့ အကြီးစား သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲ။ လိုအပ်တဲ့
အခြေအနေတွေ အားလုံးပြည့်ဆုံမှ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထိုင်စောင့်နေတဲ့လူတွေဟာ အလကား အချိန် “ မင်းစိတ်ထဲ ရှိသလောက်ချရေး၊ ပြီးလက်မှတ်ထိုး ”
ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်၊ ဘာအလုပ်မှ မဖြစ်ဘူး။ အလုပ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာ အခုလက်ငင်း အချိန်ပဲ၊
“ ဘယ်လောက် ရေးရမလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး ”
ဖောက်ထွက်ရုံပဲ၊ ငါရှေ့ပဲသွားရမယ်လို့ လုံးဝပြတ်သားသွားပြီဆိုရင် အင်အားတွေ ပေါ်လာမယ်၊ ရှေ့မှာ
“ မနောက်ပါနဲ့ဗျာ ငွေတစ်သောင်းကြီးများတောင် ”
အဲဒီချက်လက်မှတ်မှာ တစ်သောင်းရေးလိုက် ၊ ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးပြီး င့ါကိုပေးခဲ့ ”
“ တစ်သောင်းမကြိုက်ရင် နှစ်သောင်းရေးလိုက်ကွာ ”
လူငယ်က ချက်စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း စတင်ရေးသားသည်။ ပထမ ဂဏန်း၊ အဲ့သည်နောက်
စာဖြင့်၊ သို့သော် လက်မှတ်ထိုးရမည့်အချိန်မှာတော့ သူ ဆိုင်းသွားသည်။ သူရေး၍မရ။
“ တစ်သောင်တောင်များလွန်းလှပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ရေးရေး ဒီငွေက ထုတ်လို့
“ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ဒီလောက်ငွေ အများကြီးချက်မရေးဖူးဘူးဗျာ”
ရမှာမှမဟုတ်တာ။ ဘဏ်မန်နေဂျာက ကျွန်တော့ကို ရူးသွားပြီလား အောက်မေ့မှာ ”
သူက တိုးလျှိုသည့် လေသံနှင့်ဆိုသည်။
“ မရူးပါဘူးကွ၊ ငါကိုယ်တိုင်လဲ ဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့ဖူးတာပဲ၊ ငါ့ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံး အလုပ်ကြီးတစ်ခု
အောင်သွား၊ နောက်မှာနံရံပဲရှိတယ်၊ ဆုတ်လို့မရဘူး၊ ဘေးမှာလည်း လမ်းမရှိဘူးဆိရုင် ရှေ့တည့်တည့်ကို
တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားဘူး၊ ဘယ်ကိစ္စမဆို စွန့်စားရတာကြီးပဲ၊ ဒါကိုကြောက်
လူငယ်ခေါင်းနားပမ်းကြီးသွားသည်။ ဒီလူကြီးငါ့ကိုနောက်နေတာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် သေသေချာချာ
အောင်မြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိုလောသိုလောအနေအထားမျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ မထားနဲ၊ ချီတုံချတျုန်
“ မသိရင် ငါပြောမယ်၊ ကဲ 10000 လို့ရေးလိုက် ”
“ မင်း သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကစ္စမျိုးကို နှောင့်နှေးနေလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီထက်မက
ကိန်းဂဏန်းများတဲ့ ချက်တွေ မင်းလက်မှတ်ထိုးရမှာပဲ၊ ဒါအစပဲ ရှိသေးတယ် ” - 11 -
mmcybermedia.com သို့တိုင်အောင်ပင် လူငယ်က လက်မှတ်ထိုးရမှာ မဝံ့မရဲသေး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါ။ အဖြစ်အပျက်က
“ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုးမှာပေ့ါ၊ အဲဒါဆို ကျွန်တော် ၄၀၀၀၀ မြတ်မယ်လေ ”
သိပ်ကိုလျင်မြန်နေသည်။ ယခုမှ စတွေ့ဖူးသည့် လူတစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာတစ်သောင်းတန် ချက်တစ်စောင် လက်မှတ်ထိုးပေးရမည့်
“ ကဲဒါဖြင့်ထိုး၊ မင်းဒီတစ်နှစ်အတွင် ၅၀၀၀၀ ရဖို့ ငါအာမခံတယ် ”
“ အဲ့ဒီလိုအာမခံတဲ့အကြောင်း စာနဲ့ရေးပေးနိုင်မလား ”
မိမိရရှိမည့်ကြီးပွာရေး လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ဆိုတာက တကယ်လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုနေမလဲ မရေရာ။
သူသည်လိုမေးလိုက်တော ပါမောက္ခကြီးက ယခင်တစ်ကြိမ်လိုပင် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ပြန်သည်။
“ မင်းဘာတွေ ဒီလောက်စဉ်းစားနေတာလဲ ”
“ မင်းကိုတော့ သဘောကျသွားပြီး ချာတိတ်၊ မင်းက နောက်ကျောသိပ်လုံချင်တဲ့ လူပဲကိုး၊ ဒါလည်း
တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ကောင်းပါတယ်၊ လူတွေဆိုတာ အရမ်း ယုံကြည်လို့ဖြစ်တာမှ မဟုတ်ဘ”ဲ
“ လောကကြီးမှာ အရာရာဟာ နှိုင်းယှဉ်ချက်သဘောပါပဲကွ၊ မင်း အခု သိပ်ကြီးကျယ်တယ်ထင်တဲ့
ထို့နောက် အံဆွဲတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး အထဲရှိ စာရွက်စာတမ်းတွေလျှောက်လှန်ရှာဖွေကာ အသင့်ရိုက်
ကိန်းဂဏန်းက နောင်တစ်နေ့ အသေးအမွှားဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ”
ပြီးသား ကတိပြုချက်ပုံစံ စာရွက်တစ်ရွက် ထုတ်လာသည်။ သည်ဟာမြင်တော့ လူငယ်စိတ်ထဲ စနိုးစနောင့်
“ ကိန်းဂဏန်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ”
ဖြစ်သွားပြန်သည်။ သည်အဘိုးကြီးက သူ့ထံရောက်လာ သူမှန်သမျှသူ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာကို ရောင်းစားနေ
“ ဒါဖြင့် ဘာကြောင့်လဲကွာ ”
အဘိုးအိုက စာရွက်မှာ ဖြည့်စွက်ရေးသားပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးသည်။ လူငယ်က စာရွက်မှာ ရေးသား ထားသည်များကို လျင်မြန်စွာ ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျေနပ်သွားသည်။ သည်အချိန်မှာပင် အဘိုးအိုက စိတ်ပြောင်း
သည်လိုမေးပြီး လူငယ် ပြန်မဖြေနိုင်မီမှာ သူပဲ ဆက်ပြောသည်။
“ မင်း ဘာကြောင့် လက်မှတ်မထိုးနိုင်တာ ငါသိပါတယ်ကွ၊ ငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို တကယ်မယုံလို့
“ ငါစိတ်ကူတစ်ခု ရတယ်ကွာ၊ မင်းနဲ့ ငါ အလောင်းအစား လုပ်ကြရအောင်”
မဟုတ်ဘူးလား၊ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရရင် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်မယ်လို့ မင်းမယုံဘူး၊ တကယ်တမ်းသာ
သူ့အိတ်ထဲက ဒင်္ဂါးတစ်ပြားကို ထုတ်ယူပြီး လေထဲတောက်ထည့်လိုက်သည်၊ ပြီး လက်နှင့် ပြန်ဖမ်းသည်။
ယုံကြည်ရင် မင်းချက်ချင်း ကောက်ထိုးလိုက်မှာပေါ့ ”
သည်နောက် သူက ဆက်မေးသည်။
ထက်ပို မလုပ်ရပဲနဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ တကယ်ရမယ် ဆိုပါတော့၊ မင်းလက်မှတ်ထိုးမလား ”
ပန်းလှန်မယ်၊ အကယ်၍ ငါရှုံးရင်အခုငါ့အိတ်ထဲမှာ
မင်းကိုပေးမယ်၊ ငါနိုင်ရင်တော့ မင်းအဲဒီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ် စောစောကငါ ကတိပြုချက်ဆိုတာကို
“ အကယ်၍ကွာ ငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသုံးပြီး တစ်နှစ်မပြည့်ခင်အတွင်းမှာ အလုပ်လည်း အရင်က
mmcybermedia.com လူငယ်တစ်ခဏမျှ စဉ်းစားသည်။ အလောင်းအစားကတော့ တကယ့်ကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အလောင်း
“ အကယ်၍ မင်းရှုံးခဲ့သည်ရှိသော် ဒီချက်လက်မှတ်မှာ ရေးထေားတဲ့ငွေတွေကို အမှန်တကယ်
အစားမျိုးပဲ အတော်ကိုနိပ်သည်။ နိပ်လွန်းသဖြင့် သည်အဘိုးကြီး ဘာအကြံအစည်နဲ့ သည်လိုလောင်းသလဲ စဉ်းစားစရာပင်ဖြစ်နေသည်။
ထုတ်ယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ့်လို့ မင်းကတိသစ္စာပြုရမယ်”
သေချာအောင် သူစကားနည်းနည်း တောက် ကြည့်သည်။ “
“ ကျွန်တော် အဲဒီ ဒင်္ဂါးပြားကို ခဏကြည့်ပါရစေ ”
“ ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီအတိုင်ဆို ကျွန်တော်လက်ခံတယ် ”
“ ဟာ တကယ့်လူပဲ၊ ငါတော့ မင်းကို တကယ်သဘောကျတယ်၊ မင်းက အင်မတန်သတိရှိတာပဲ၊
တစ်နှစ်အတွင်း ငွေစာရင်းပိတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဘဏ်ပြောင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းချက်လက်မှတ်
အဲဒီတော့ အလွယ်တကူ အမှားအယွင်းတွေ မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာ၊ ဒါပေမယ့် သတိထားလွန်းလို့ အခွင့်အရေးတွေ
ကိုပင် ကြိုတင်ပယ်ဖျက်လိုက်နိုင်သည်။ သည်အလောင်းအစားကြောင့် သူဆုံးရှုံးစရာမရှိ။ ကံကောင်းလျှင် အဘိုးကြီးထံက
ဆုံးရှုံးသွာတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေဖို့ လိုတယ်ကွ ”
ထိန်းနေသည့်ကြားမှ အပြုံးရိပ်ကလေးတစ်ခု သူ့နှုတ်ခမ်မှာ ယှက်သန်းသွားသည်။ ဒါကို ပါမောက္ခကြီးက မြင်မသွားပါစေနဲ့ဟု
“ ကဲ၊ မင်းပြောကွာ၊ ခေါင်းလား ပန်းလား ”
မှန်သည်။ သူစိုးရိမ်သည့်အတိုင်း တကယ်ဖြစ်သွားသည်။
“ ပန်း ”
“ တစ်ခုတော့ကြိုပြောထားချင်တယ်ကွ ”
ပါမောက္ခကြီး ငွေဒင်္ဂါးကိုတောက်ထည့်လိုက်သည်။ လူငယ့်ရင်ဘတ်ထဲ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်။ သူ့တစ်သက်တာမှာ ခေါင်းပန်းတစ်ကြိမ်လှန်ရုံဖြင့် ငွေတစ်သောင်း ရနိုင်သည့်အခွင့်အရေးမျိုး ဘယ်တုန်းကမျှ
သည်ဖက်လှန်ကြည့်သည်။ ဒင်္ဂါးပြားက အစစ်အမှန်၊ တစ်ဖက်က ခေါင်း၊ တစ်ဖက်က ပန်း။
ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ နေ့စွဲကို တစ်နှစ်ခွာပြီးရေးထားလိုက်၊ နောက်နှစ် ဒီအချိန်လောက် ”
အဲသည်နောက် ပါမောက္ခကြီး ခေါင်းပန်းလှန်တော့မည်ပြုသည်။ သည်အခိုက် လူငယ် တစ်စုံတစ်ခုကို
“ ရပါတယ်၊ ငါအရင်မလိုပါဘူး၊ မင်းနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့တဲ့အထိ စောင့်လို့ရတယ် ဒါမှမဟုတ်
ဒီချက်လက်မှတ်ကြီးရေးပေးလိုက်ရင်လဲ ထုတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး ”
mmcybermedia.com မကြုံဖူးခဲ့။ ဒင်္ဂါးပြားက လေထဲမှာ လည်သွားသည်။ စားပွဲပေါ် ဒေါက်ကနဲ ကျသည်။ လိမ့်နေသည်၊ ထို့နောက်
လူငယ့်အိတ်ထဲမှာ အဲ့သည်မိတ်ဆက်စာ ဆိုတာက ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအဘိုးကြီးက ဘာတစ်ခုမှ
အလွတ်မပေးပါလား ဟု တွေးတောရင် အိတ်ထဲမှ စာရွကက်ို သူ ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ဘာမှ ရေးမထားသည့် မိတ်ဆက်စာကိုကြည့်ပြီး
ပါမောက္ခကြီးက အော်လိုက်သည်။ ထို့နောက် “မင် မင်းအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ”
မော့ကြည့်ပြီး “ ဘဏ္ဍာစိုးကြီး တစ်စိတ်လောက်သွားခေါ်စမ်းပါကွာ” ဟု ဆိုသည်။
နောက်ဆုံးတော့ လူငယ် မလွှဲမရှောင်သာပင်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးရတော့ သည်။ လက်ကတော့
ရှိလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီကော်ရစ်ဒါ အတိုင်းလျှောက်သွားလိုက”် လူငယ်အား သူ လမ်းညွှန်သည်။
ခပ်တုန်တုန်၊ နောင် တစ်ချိန်ကျလျှင် သည်ထက်မက ကိန်းဂဏန်း များသောချက်တွေ ခပ်သွက်သွက်
ဘဏ္ဍာစိုးကြီးခေါ်ပြီး လူငယ် ပြန်ဝင်လာသည့်အချိန်၌ ပါမောက္ခကြီးက စာအိတ်ကို ပိတ်နေပြီ။
ထိုးပေးနိုင်မည်လား မပြောတတ်။ ယခုတော့ သည်ကိစ္စသည် သူနှင့်အများကြီးစိမ်းနေသေးသည်။ လက်မှတ်
သူ့မျက်နှာက ပြုံးနေသည်။ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ကျေနပ်နေသည့်ပုံမျိုး။
ထိုးပြီး သူ ပေးလိုက်တော့ ပါမောက္ခကြီးက တစ်ချက်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး အိတ်ထဲ အသာခေါက်ထည့်ထား
“ တို့ဧည့်သည်လေးက ဒီည ဒီမှာအိပ်လိမ့်မယ်၊ သူ့ကိုသူ့အခန်းလိုက်ပို့လိုက်ပါ” ဘဏ္ဍာစိုးကြီးအား
ညွှန်ကြားသည်။ ထိုနောက် လူငယ်ဘက်ကိုလှည့်ကာ “ ဟောဒီမှာ လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်” ဆိုပြီး စာအိတ်ကို
“ကဲ ပါမောက္ခကြီးရဲ့ လျှို့ဝှက်နည်းစဉ် ကျွန်တော့်ကိုပေးတော့”
ရအောင်၊ အဲ့ဒါဆိုတော့ မောင်ရင် မေ့မသွားဘူးပေါ့”
ကတိပေးရလိမ့်ဦးမယ်၊ ဒီလျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ကို မင်းလောက်ကုသိုလ်ကံ မကောင်းတဲ့ တခြားသူမျာကိုလည်း
ဆိုရင်တော့ အခုကတည်းက နောက်ဆုတ်နိုင်တယ်၊ ဒီစာအိတ် မင်းမဖွင့်နဲ့တော့၊ မင်း ချက်လက်မှတ်ကိုလည်း
“ မင်းဒီလာတော့ မိတ်ဆက်စာတစ်စောင့် ပါလာတယ်မဟုတ်လား၊ မင်းဦးလေး လွှတ်လိုက်တဲ့
ငါပြန်ပေးလိုက်မယ်၊ မင်းအိမ် မင်းပြန်၊ အရင် နေလက်စပုံစံအတိုင်း မင်းဆက်နေပေါ”
လူတိုင်းမှာ မိတ်ဆက်စာ တစ်စောင်စီ ပါလာတာ ထုံးစံလေကွာ”
သို့သော်လက်ထဲမှာ သည်မဟာလျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ကြီး ရောက်နေပြီးသည့် နောက်မှာတော့ သူဘယ်မှာ နောက်ဆုတ်နိုင်ပါတော့မည်နည်း။ သည်ဟာကိုဖောက်မဖတ်ဘဲ သူမပြန်နိုင်တော့။
ပင်တွေနဲ့ပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေတော့မယ်၊ …ဒါပေမယ့် အကယ်၍ အဲဒီလိုဖြန့်ဖြူးတဲ့ကိစ္စ မလုပ်နိုင်ဘူး
“ ဟာ၊ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကွ၊ ငါရေးပေးထားတာတွေ မဖတ်သေးခင် ငါ့ကို တစ်ခုတော့
လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ကြီးတစ်ရပ်လုံးကို စာတစ်ရွက်တည်းနဲ့ ရေးလို့ပြီး သတဲ့လား။ ကျွန်တော့မှာ
သေသေချာချာဖတ်ပါ ” ပါမောက္ခကြီးက မှာသည်၊ ပြီးတော့မှ
လူငယ်စိတ်ထဲအနှောက်အယှက် ဖြစ်သွားသည်။ ဒေါ်လာ တစ်သောင်းတိတိ ပေးဝယ်ထားရသည့်
အောင်မြင်ခဲ့သည့်နှယ် လူငယ့်လက်ကို အလေးအနက် ဆုပ်ကိုင်နှုတ်ဆက်သည်။
“အော်၊ ဒါပေါ့၊ ပေးရမှာပေါ့၊ ဒါနဲ့ မောင်ရင့်မှာ စက္ကူတစ်ရွက်လောက်မပါဘူးလား၊ စာနဲ့ရေးပေးလို့
mmcybermedia.com “ကျွန်တော် ကတိပြုပါတယ်” ဟူ၍ပဲ သူဆိုလိုက်ရတော့သည်။
ဝေဖန်သည်။ စီးပွားရေးမှာ သူလာဘ်မမြင်တတ်တာတော့သေချာနေပြီး။ ဒါကြောင့်လည်း အဘိုးကြီးဆင်သည့်
မမျှော်လင့်ဘဲ အကျဉ်းသားဖြစ်သွားခြင်း ပြင်ဆင်ထားသည့်
အကွက်ထဲ သူကျရောက်သွ သွားတာပဲ။ ရုတ်တရက် မခံချိမခံသာ ဖြစ်လာသည်။ ဒေါသတွေဆူဝေလာသည်။
သို့သော် ဘယ်သူ့ကို ဘာလုပ်ပစ်ရမှန်းသူမသိ။
ဒါတွေ လိုက်ကြည့်ကာ သူ့အိတ်ထဲက တန်ဖိုးကြီး ပေးဝယ်ထားရသည့် စာရွက်ကိုပင် သူမေ့နေသည်။
ကိုင်းကွာ၊ နောက်ချင်သလောက်နောက်စမ်း၊ လှောင်ရယ်ချင်သလောက် ရယ်စမ်း၊ လှောင်ပြောင်လို့
သူ့အခန်းက အတော်ကြီး မြင့်နေတာ သူတွေ့ရသည်။ အပြင်ဘက်တွင် စောစောကသူရောက်ခဲ့သည့်ပန်းခြံ။
ညရောက်နေပြီမို့ ရှုခင်းက တစ်မျိုး။ သို့သော် လပြည့်ဝန်းအလင်းရောင်ကြောင့် အရာရာကိုကား အတော်
မဟုတ်တာ ဟူ၍ သူတွေးသည်။
ဖြေတွေးနေရင် နရင်ကပင်ရုတ်တရက် စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဝင်လာပြန်သည်။
အနေအထားက တစ်မျိုးကြီး။ သည်အိမ်ရော သည်အိမ်က လူတွေ၏ အပြုအမူတွေပါ ထူးခြားလွန်း
သည်တုန်းခဏ ရုတ်တရက် သူ့ကိစ္စသူ ပြန်သတိရသည်။ လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ကို လျှို့ဝှက်သောနည်းစဉ်။
ကော်ဇောပေါ် အသာအယာ ကျသွားသည်။
အခန်းက ကျုယ်သော်လည်း ပြတင်းပေါက်တော့ တစ်ပေါက်တည်းရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ ငုံကြည့်လိုက်တော့
နောက်တော့ ဒေါသက ဗလာစာရွက်ပေါ် ကျရောက်
သွားသည်။ စက္ကူဖြူပေါ်တွင် မင်ဖြူနှင့် ရေးထားသည့် အဲသည် လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ဆိုသောစာရွက်ကိုယူ၍
တကယ့်ကို ကျယ်ပြန့်သားနားသည့်အခန်း။ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေက အားလုံး အကောင်းစားတွေချဉ်း။
ရှောင်ဖယ်ခဲ့သော ဥစ္စာရတနာတွေ လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်
မချမ်းသာနိုင်ဘူးဟု လူအများ ပြောတတ်ကြတာ သူသတိရသည်။ ငါသည်လိုဖြစ်နေပြီလား သူ့ကိုယ်သူ
သိပ်ရိုးသားလွန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ မချမ်းသာနိုင်ဘူး၊ …ငါသည်လိုဖြစ်နေပြီလား…
အလျှင်စလိုဖွင့်ကာ အထဲကစာရွက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် စာရွက်ခေါက်ကို ဖြန့်ကာဖတ်….။ ဟာ
ရောက်လာခဲ့သလိုဖြစ်နေပြီ။ ခုချိန် သူ လုပ်စရာတစ်ခုပဲ ရှိတော့သည်။ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးသည် နေရာက
ဖတ်မည်ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ စာရွက်ပေါ်မှာ ဘာစာတစ်လုံးမျှ မတွေရ။ ကျော်ဘက် ကမန်းကတန်း
လှန်ကြည့်သည်၊ ဗလာ။ “တောက်ဒီအဘိုးကြီး င့ါကို နှပ်သွားပြန်ပြီ” ဟု တွေးလိုက်မိသည်။ “သည်လောက် တောင်ညံရသလား”ဟု
ငွေတစ်သောင်းတန်ချက်လက်မှတ်နှင့် သူ အလဲအလှယ် ပေးလိုကသ်ည့်အချိန်က
တံခါးလက်ကိုင်ဘုကို ကိုင်ကာ အသာကျိတ်ပြီး လှည့်လိုက်တော့ မရ။ တံခါးက အပြင်မှာ သော့ခတ်သွားခဲ့ပြီး။
စေတနာထားပြီး ဆက်ဆံနေသည့်ပုံမျိုး။ စိတ်သဘောကောင်းသူတစ်ဦး၏ အမူအရာမျိုး။ စင်စစ် ယခုလို
ညအိပ်နေ၍မဖြစ်တော့။ မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်မှ ဖြစ်မည်။ ဘယ်သူမှ မသိအောင် အသာလစ်ထွက်
သို့သော် မိမိကို သည်စာအိတ်
ဟာ ငါ့ကို ဖမ်းထားပြီပဲ။
ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်သည်။ ပြတင်းပေါက်က အလွယ် တကူပင် ပွင်သွားသည်။ သို့သော် ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့
တစ်ဘဝလုံးနှင့်ချီ၍ အရေးကြီးသည့် စာချပ်တစ်ခု။ အိမ်မက်အထဲမှာ သူ အသည်းအသန်ငြင်းဆန်နေရသည်။
အဝေးကြီး။ ပြတင်းပေါက်က မြေကြီး အထက်ပေ ၃၀လောက်မှာ ရှိနေသည်။ ခုန်ချလျှင် ကျိုးကြေပြီး
စာချုပ်က လုပ်ထားတာ မှားနေသည်။ စာရွက်တွေ ပေါ်မှာ ဘာတွေရေးထားသလဲကြည့်တော့ ဘာမှမပါ၊
တခြားနည်လမ်း ဘာရှိသေးသလဲ။ သူ အပြေးအလွားစဉ်းစားသည်။ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးကို ဘဲလ်တီးခေါ် ကြည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ အင်း၊ ဒါကလွဲလို့ တခြား ဘာနည်းလမ်းမှ မရှိတော့ပဲ။
*** “ငါက…..၊ ငွေရှာရာမှာ ကျွမ်းတယ်၊ ခေါင်းပန်းလှန်ရာမှာကျွမ်းတယ်၊ ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အားလုံးကျွမ်းတယ်၊
လူခေါ် ခေါင်းလောင်းခလုပ်ကို သူနှိပ်ပြီး စောင့်ကြည့်သည်။ ဘယ်သူမျှ ပေါ်မလာ။ ထပ်နှိပ်သည်။
အခန်း (၅) ယုံကြည်မှု
အဲသည်တော့ဘာလုပ်နိုင်သေးသလဲ။ အော်ဖို့ပဲ ရှိတော့သည်။ သို့သော် ဒါတော့ အရမ်းသွားလုပ်လို့မဖြစ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဘယ်လောက် ရှိနေသော်လည်း
နောက်တစ်နေ့မနက် အိပ်ရာက နိုးလာတော့ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံး တောင့်တင်းနေသည်။ ဦးနှောက်က
မကြည်မလင်။ အိပ်ရာက ထသည့်အခါ ကုတင်ခြေရင်မှာ မနေ့က စာရွကက်ို သွားတွေ့သည်။ ပြတင်းပေါက်မှ
မျက်နှာပူစရာ ဖြစ်မည်။ ညကြီးမင်းကြီးမှာ သူ လန့်အော်လို့ တစ်အိမ်လုံး အိပ်ရာမှ ထလာရသည်ဆိုလျှင်
မကောင်း။ သူပဲ အရူးဖြစ်မည်။ အိပ်မပျော်နိုင်။ သည် တစ်နေ့လုံး၏ အဖြစ်အပျက်တွေ ထပ်တလဲလဲ ပေါ်လာနေသည်။ သည်ဟာတွေကို ရယူခဲ့ရသည့်
အောက်မဆင်းမိ မှန်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဆံပင်က ဖရိုဖရဲ၊ အဝတ်အစားတွေက တွန့်တွန့်ကြေကြေ။
နောက်ဆုံး မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတော့မှပင် နိုးလျှက် ထမင်းလုံး တစ္ဆေချောက်ခံနေရသော အဖြစ်မှ သို့သော်
ရှာပြီး သူ့စက္ကူစုတ်ကို ပြန်ပေးရမည် ပးရမ ၊ ပြီး မိမိချက်ကိုလည်း ပြန်တောင်းရမည်။
သည်ဟာမြင်တော့သူ ချက်ချင်းဒေါသထွက်လာပြန်သည်။ သည်အဘိုးကြီးကို အမြန်ဆုံးတွေ့အောင်
အဓိပ္ပာယ် ကျိုးကြောင်း ဆက်စမ်ကြည့်ဖို့သူ ကြိုးစားသည်။ မရ။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်လာတစ်သောင်းတန် ရေးပေးပြီး
ကဲ ကြိုးစားပြီး အိပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်ဟု သူဆုံးဖြတ်ပြီး အိပ်ရာပေါ်လှဲကြည့်သည်။ တော်တော်နှင့်
လူစိမ်းတစ်ယောက် - 16 -
mmcybermedia.com ခေါင်းကိုလက်နှင့် မြန်မြန်သပ်ကာ တံခါးဝဆီသို့လှမ်းလိုက်ပြီးမှ သတိရသည်။ ညကတည်းက သူ့ကို
ပိတ်လှောင်ထားသည်ပဲ။ သူက သည်အိမ်မှာ အကျဉ်းသားဖြစ်နေပြီး။
ဒင်္ဂါးကြည့်ရတာ အကြံအဖန်တော့ ဟုတ်ပုံမရ၊ သို့သော် အလွယ်တကူ မရိပ်စားမိနိုင်သည့် လျှို့ဝှက် တစ်ယောက်တည်း
အစီအမံ တစ်ခုခုများ ရှိလေမလား လူငယ် တွေးသည်။
“မနေ့က ခေါင်းပန်းလှန်တာမှာ ဘာမှ မရိုးမသားလုပ်တာ မပါဘူက”ွ ပါမောက္ခကြီးက သူသံသယ
အကြိမ်အရေအတွက်ကို ရေသည်။ ခုနှစ်…ရှစ်.. “ကိုး...” သူက ဒင်္ဂါးပြားကို မမှိတ်မသုံစိုက်ကြည့်ရင်ဆိုသည်။
ဆင်းလာခဲ့သလဲသတိရသည်။ စက္ကူစုတ်ကို ထုတ်ပြီး စားပွဲပေါ်ပစ်ချလိုက်သည်။
“ တစ်ဆယ်ပဲကွ။ တစ်ဆယ်ထက်တော့ တစ်ခါမှ ပိုမရသေးဘူး” သူက အနီးရောက်လာသည့်
“ဆရာကြီး ကျွန်တော့်ကို မနေ့က နှပ်တာပဲဗျ၊ ဟောဒီ ဗလာစက္ကူနဲ့ငွေတစ်သောင်း ညာယူသွားတာပဲ”
လူငယ်အား ပြောလိုက်သည်။ “ဆယ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ပန်းရပြီးရင် ဆယ့်တစ်ကြိမ်ကျတော့ မရတော့ဘူး၊
“ဗလာစက္ကူ မဟုတ်ပါဘူးကွ၊ ကြီးပွားချမ်းသာရေးလျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ပါ၊” ပါမောက္ခကြီးက ပြန်ပြင်၍
လူငယ့်ခေါင်းထဲ အတွေးတစ်ခု လက်ကနဲ ဝင်သွားပြန် န်သည်။ မနေ့က သူအနှပ်ခံရတာ ဗလာ အပေးခံရတာတင်
ကျွမ်းကျင်မှုကို မရိုးသားမှုလို့ အထင်များကြတယ်၊ လျှင်တာကို လိမ်တာလို့ ယူဆတတ်ကြတယ်”
ထို့နောက် ခေါင်း။ ထို့နောက် ပန်း။
ဒေါသတကြီး ထွက်လာခဲ့သည်။၏။ စားပွဲမှာ
တောက်တင်လိုက်သည်။ ဒင်္ဂါးကလည်ပြီး ကျသွားသည်။ ခေါင်း၊ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လှန်သည်။ ပန်း။
သို့သော် တံခါးကို အမှတ်မဲ့ ဖွင့်ကြည့်မိတော့ တံခါးက ပွင့်သွားသည်။ သူထမင်းစားခန်းဆီသို့
“မရဘူးဗျာ၊ ခင်ဗျားအဲဒီကိစ္စ ရှင်းပါ၊ ကျွန်တော်နလပိန်းတုံးမဟုတ်ဘူး”
“ဟာသိတာပေါ၊ နလပိန်းတုန်း ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ၊ ဉာဏ်သိပ်မစူးသေတဲ့သဘောပါ၊ ဒါကလည်း
ခေါင်းပန်းလှန်၍ သူဘယ်တော့မှ နိုင်နိုင်စရာမရှိဟူ၍။
သဘာဝပါ၊ မင်းက ငယ်သေးတာကိုး၊ အတွေ့အကြုံနည်းသေးတာကိုး” “ဒါလည် ဒါလည်းမှန်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗလာကိုတော့ ဗလာမှန်း သိတာပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်ကို အဲဒီလို
“င့ါအဖေက မျက်လှည့်ဆရာကွ၊ သူကျတော့ ၁၅ကြိမ် ဆက်တိုက်ရတယ်၊ ငါက အဖေ့ဆီက ပါရမီ
ပါမလာ ဘူး” ပါမောက္ခကြီးက ခပ်အေးအေးပင် ရှင်းပြနေသည်။
“မဟုတ်တာကွာ၊ ဘယ်မှာ နှပ်ရပါ့မလဲ၊ မင်း ဒါထက်မက
ထပ်လိုချင်လိမ့်အုံးမယ်လို့ ငါ လုံးဝ
မထင်တာ၊ အမှန်က အဲဒီဗလာစက္ကူနဲ့တင်ပဲ မင်းချမ်းသာနိုင်နေပြီ၊ ငါ့တုန်းက ဒီလိုပဲ ဗလာစက္ကူတစ်ရွက် ရရုံနဲ့တင် ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်းကို ငါတွေ့ခဲ့တာပဲ၊ အေးလေ ငါ့မှာလည်း အချိန်သိပ်မရှိပါဘူး၊ နှင်းဆီပင်တွေ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com သွားကြည့်ရအုံးမယ်၊ မင်းကို ငါကူပါမယ်၊ ငါပြောတာတွေ သေသေချာချာနားထောင်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်နဲ့ မင်းချမ်းသာ သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီနည်းစဉ်ကို မင်းတခြားလူတွေ ပြန်ပြောရဦးမှာ၊
ရရမယ့်ရက်ကာလကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူတို့ စပြီးချမ်းသာ
တစ်ခုတည်းသော ပန်းတိုင်၌ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း
အကြီးအကျယ် ဆဲဆိုပစ်လိုက်သည်အထိ ဒေါသထွက်နေသော လူငယ်သည် ယခုတော့ အဘိုးကြီးရှေ့မှာ အမြီးကုပ်၍
သူတစ်ကြိမ် ထပ်၍ဆိုလိုက်သည်။ ပါမောက္ခကြီးမျက်နှာ ပြုံးသွားသည်။ ကြိုပြောထားရဦးမယ်၊
“ဟုတ်ပါတယ်” “ကောင်းပြီး၊ မင်းပိုက်ဆံဘယ်လောက်လိုချင်သလဲ၊”
“အေး၊ ကောင်းတယ်၊ နားလည်ပြီ သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့ ယုံကြည်စိတ်က ထပ်ကြပ်မကွာ ခက်ပြန်တယ်ကွ၊
အဲ့ဒါကိုဘယ်အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ရချင်သလဲ၊ စာရွက်ပေါ်ချရေးကွာ၊ ဒါ ချမ်းသာကြွယ်ဝရေး
နေ့စွဲတွေချရေးလိုက်ရင် ပိုက်ဆံက အဲဒီအတိုင်း အတိအကျကောင်းကင်က ကျလာမှာမို့လား”
သဘောထားပြီး ယာယီ ယုံကြည်စိတ်ကလေး မွေးထားစမ်းပါ”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် သဘောပေါက်နိုင်အောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ့မယ်“ မုချပါပဲ၊
မင်းသဘောပေါက်လာမယ်၊ တကယ် ဟုတ်ပါလားလို့ ယုံကြည်လာမယ်”
လိုရင်းကို လုပ်ကြရအောင်၊ ဟောဒီမှာ ဖောင်တိန်၊ မင်းမှာ စာရွက်ရှိတယ်မဟုတ်လား”
မယုံမကြည်မဖြစ်နဲ့။ ကမ္ဘာမှာ အကြီးအကျယ်ဆုံးဆိုတဲ့ ပါရမီရှင်ကြီးတွေရဲ့ အတွေးအကြံမှန်သမျှဟာ အရိုးဆုံး အစင်းဆုံး
တွေရတဲ့အချိန်က သိပ်ကြာရှည်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ဒီတော့ အရေးမကြီးတာတွေ ငြင်းခုန်ရင် အချိန်ကုန်မခံ မခံဘဲ
“လျှို့ဝှက်နည်းစဉ်ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ၊ မင်းက မပြောမချင်း သိမှမသိပဲကိုး၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့
အားမနာပါးမနာပင် သူမေးလိုက်သည်။ - 18 -
mmcybermedia.com ပါမောက္ခကြီးက ခပ်အေးအေးပင်၊ “မှန်တာပေါ့” ဟုဆိုသည်။ “မင်းဒီလိုမေးတာ ငါ မအံ့သြပါဘူး၊ ဒါကြောင့်
တူချင်မှတူမှာ၊ လခက ဘယ်လောက်လဲ၊ တခြား အကျိုးခံစားခွင့်တွေက ဘယ်လိုရှိသလဲ တိတိကျကျ
လွယ်လွန်းလို့ မင်းယုံကြည်မှာတောင် မဟုတ်ဘူးလို့၊ ဒါပေမယ့် ဒါအမှန်ပဲကွ၊ ဒီအတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာ၊ ငါတွေ့ဖူးသမျှသန်းကြွယ်
“ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမေးတဲ့ကြားက အဖြေက ရေရေရာရာ ရမလာဘူးဆိုရင် မင်းအဲ့ဒီလူ့အလုပ်ကို
မျှော်နေဦးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားအလုပ် လိုက်ရှာမလား”
ဆန်လွန်းတယ်၊ မန်လိုက်မှုတ်လိုက်ရုံနဲ့ ဖြစ်သွားမယ့်ပုံမျိုး” “မှန်တယ်၊
ကိန်းဂဏန်းမျိုးဖြစ်နေမလား၊ မင်းသံသယ ဝင်လာမယ်၊ ထိုနည်း၎င်း အလုပ်ဘယ်နေ့စဝင်ရမလဲ မေးတော့လဲ
ဒီကိန်းဂဏန်းနဲ့ ရက်စွဲတွေရေးထားရုံနဲ့ တကယ် ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူး”
မင်းစိတ်ထဲမှာ စနိုးစနောင့် ဖြစ်လာမှာပေါ့၊ ဒီလူ တိတိကျကျမေးတော့ အဖြေဘူး၊ ဒါဘာသဘောလဲ မရိုးမသား
“ပြောရတာ ကျွန်တော်အားနာပါတယ်ခင်ဗျား၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခုထိမရှင်းသေးတာတော့ အမှန်ပဲ၊
“ဒါပေါ့၊ သူ့ဆက်မျှော်နေလို့ ဘယ်အကျိုးထူးတော့မလဲ၊ ဒီလူက ကျွန်တော့်ကို ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့
လှန်ထားတဲ့ သဘောမျိုး ဒါမှမဟုတ် သက်သက်လိမ်နေတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတာကိုး”
တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ရှိတယ်ကွ၊ နေဦးကွာ၊ ငါ ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်၊ မင်းအလုပ်တစ်ခုရဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဆိုပါစို့။
“ပါမောက္ခကြီး ကျေနပ်သွားသည်။ သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးရိပ်ထင်လာသည်။
အလုပ်လျှောက်တယ်ဘာညာ စသဖြင့် လိုအပ်တာတွေလုပ်တော့ အင်တာဗျူးခေါ်ခံရတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲ
“သိ သိပ်ဟုတ်တာပေါကွာ၊ တိတိကျကျသိရဖို့သိပ်အရေးကြီးတာပေ့ါ၊ အများကြီးလို့ပြောရုံနဲ့ မပြီးဘူး။
မင်းကို ပဏာမရွေထားပြီးဆိုတာသိရတယ်၊ နောက်ကျတော့ မင်းအလုပ်ရပြီတဲ့၊ လခကလည်းအများကြီး
ခန့်လိုက်တယ်၊ ဒီလိုလာရမယ်၊ ပါးစပ်ပြောနဲ့ စိတ်ချနေလို့မရဘူး၊ နှုတ်ကတိဆိုတာလည်း သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ
လူဆယ်ယောက်ထဲက ရွေးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ရာ တစ်ထောင်ထဲက ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းရွေးလိုက်တာ၊
ရှိတာတော့ အမှန်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် စကားဆိုတာ ပြောပြီး လေထဲပျောက်ရင် ပျောက်သွားမယ်၊ စာနဲ့ပေနဲ့
တိတိကျကျ ရေးထားတဲ့ ခန့်စာကြတော့ ပိုခိုင်မာတယ်၊ ဟုတ်တယ် မလား၊ အဲဒါသူများဆီက အလုပ်၊
ထိုနည်း၎င်းပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်မယ့်ကိစ္စ ကိုယ့်ဘဝရှေ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း ဒီအတိုင်း
“အင်း၊ ထိုင်ကျေနပ်နေလို့ဘယ်ပြီးမလဲ၊ အလုပ်ဘယ်တော့ စဝင်ရမလဲ မေးရမှာပေါ့၊ ပြီးတော့ လခ အများကြီးဆိုတာ
တိတိကျကျရှိဖို့လိုတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝိုးတိုးဝါးတား မရေမရာ ကတိပေးထားရင် နောင်တစ်နေ့ ဝိုးတိုးဝါးတား
ကိုယ့်အများကြီး - 19 -
“ကျွ ကျွန်တော့်ချို့ယွင်းချက်ကို ကျွန်တော် အခုမှပဲ မြင်ပါတယ်၊ အရေးကြီးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးအပိုင်းမှာ
ကိန်းဂဏန်းကို ရေးချလိ ချလိုက်စမ်း”
“ခေါင် ခေါင်းထဲဘာကိန်းဂဏန်းမှကို တိတိကျကျမရှိသေးဘူး ဆရာကြီး”
ဘယ်တော့လဲ။ ဒါမသေချာမချင်း ဘယ်တော့မှ မချမ်းသာဘူး၊ လူတွေ မေးလိုက်ရင် မချမ်းသာချင်တဲ့
“ဒါဆိုလဲ မခက်ပါဘူးကွာ၊ အခု တစ်ခါတည်း စဉ်းစားပေါ့၊ ခုချိန်ကနေ နောက်တစ်နှစ်အတွင်း
လူမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် မရေရာဘူး၊ မယုံရင် မင်းမေးကြည့်၊ နောက်နှစ်မှာ ငွေဘယ်လောက်ရဖို့ မျှော်မှန်းထား
မင်းငွေဘယ်လောက်ရချင်သလဲ၊ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ် လိုက်၊ ပြီးရင်ချရးကွာ၊ အချိန်သတ်မှတ်ချက်
သလဲ မေးလိုက်ရင် တစ်ခါတည်း တန်းပြောနိုင်တဲ့လူ သိပ်ရှားတယ်၊ တကယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်
အတွက်တော့ မင်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး၊ တစ်နှစ်လို့ ပြောပြီးပြီး၊ ကဲ ကဲ မြန်မြန်စဉ်းစား၊ အချိန်တွေ
အဲ့ဒီလဟူာ ချမ်းသာဘို့ လမ်းစနင်းမိနေတဲ့လူပဲ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ရည်မှန် ထားတာ ရှိပေမယ့် သူများကို
မပြောချင်လို့ ဖွင့်မပြောတာမျိုးတော့ ရှိမှာပေါ့၊ ငါက သဘောကို ပြောရတာ၊ လူဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်
သူ သည်လိုပြောဆဲမှာပင် သဲနာရီက သဲတွေအားလုံးအောက်ခွက်ထဲ ကျသွားသည်။ ပါမောက္ခကြီးက
သူများကို ပြောတာ မပြောတာထား သူတို့ခေါင်းထဲမှာကို အဖြေမရှိကြဘူး၊ လူတွေမှာ မှားနေကြတာ အဲ့ဒါပဲ၊
နာရီကို ကောက်ကိုင်ကာ ပြောင်းပြန်လှန်ထားလိုက် သည်။
လူဟာ ဒီဘဝမှာ ငါဘာရချင်သလဲ၊ ကိုယ့်ခေါင်းထဲ တိကျ သေချာထားဖို့လိုတယ်၊ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့
ကိန်းဂဏန်းမျိုးစုံတွေဝင်လာသည်။ မဖြစ်နိုင်တာတွေ မောင်း ထုတ်လိုက် အသစ်စဉ်းစာလိုက်။ အချိန်က
လူငယ် ဘာမှမပြော၊ ငြိမ်သက်စွာပင် နားထောင်နေသည်။ “ကဲ။
တဖြည်းဖြည်းကုန်နေသည်၊ ဖွင့်ပြောလောက်စရာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းကို ရွေးမရ။ နာရီထဲက မင်းငွေဘယ်လောက်
သဲတွေသာ နောက်တစ်ကြိမ် ကုန်စင်အောင်ကျသွားသည်။ သူ့မှာ ဂဏန်းတစ်ခုတိတိကျကျ၊ မရနိုင်သေး။
လူငယ် ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ဂဏန်းတစ်လုံးကို မဝံ့မရဲ ရွေချယ်ကာ စာရွက်ပေါ် ဖြည်းဖြည်းချင်း
လူငယ်အတော်ခက်ခဲသွားသည်။ သူဘာပြန်ဖြေရမှန်ပင် မသိ။ စောစောက ပါမောက္ခကြီး ပြောသွား
ချရေးသည်။ လက်တွေက ခပ်တုန်တနု။
ခဲ့သည့် စကားတွေအားလုံး သူ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ခဲ့သည်။ သဘောလည်းကောင်းကောင်းပေါက်သည်။
“ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀” သူ ရေးချသည့် ကိန်းဂဏန်းကို ပါမောက္ခကြီး အသံထွက်ဖတ်လိုက်သည်။ “ဟာ “
တကယ့်ကို ကျိုးကြောင်းသင့်မြတ်သည့်စကားတွေ။ သူလုံးဝလက်ခံရမည့်စကားတွေ။ နောက်ဆုံးတော့ ငါ
သိပ်နည်းတာပေါ့ကွာ၊ အေးလေ ဒါနဲ့စလဲ ရပါတယ်၊ ငါကတော့ ၃သိန်းလောက်ရေးစေချင်တာ၊ သန်းကြွယ်
သူဌေးဖြစ်တဲ့ အထိဆိုရင် မနည်းလုပ်ယူရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအလုပ်က လူတွေထင်
ရေရေရာရာမသိတဲ့ လူတွေထဲတစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်နေပြီးကိုဟု တွေးမိပြီး သူအတော်ရှက်သွားသည်။
သလောက် အခက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဒါက မင်းတစ်သက်တာ လုပ်သမျှထဲမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ် ဖြစ်မှာ”
“ကျွန်တော် မပြောတတ်ပါဘူးဆရာကြီး” သူက မျက်နှာနီနီနှင့်ပင် တောင်းပန်တိုးလျှိုးလိုက်ရသည်။ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com “တကယ်ချမ်းသာမယ့်လူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချမ်းသာမယ်လို့ ယုံကြည်ရတယ်ကွ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်နေ့
အခုလက်ရှိအတိုင်း ဖြစ်နေအောင် ဖန်တီးထားတာ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို တကယ်တမ်း အဆုံးအဖြတ်
မင်းသဘောထားတွေရဲ့ ထင်ဟပ်ချက်တွေပဲ၊ ဘဝဆိုတာ ကိုယ်ပုံဖော်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတာ၊ ဒါကြောင့်မို့ မင်း အခန်း (၇)
မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း စားပွဲထိုးက ကော်ဖီနှင့် မုန့်များ သယ်ဆောင်၍ ဝင်လာသည်။ လူငယ်က နံနက်စာ မစားရသေး။
ပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်လာဖို့အတွက်ပဲ၊ မင်း စောစောက ကသောကမျော စဉ်းစားခဲ့ရတာ” “ဟုတ်ပါတယ်”
လည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘဏ်မှာလည်း ပိုက်ဆံက သုညနီးပါးပဲ”
ခလုတ်ကန်သင်းတွေကို စွဲမြဲခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်မှုစိတ်ဓာတ်နဲ့သာ ရှင်းလင်ဖယ်ရှားကျော်လွှားသွား နိုင်တယ်...၊
“မှန်ပါတယ်။ မင်းစဉ်းစားတာ အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အရေးကြီး
တကယ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ကြည့်လိုက်ရင် သူတို့မှာ အဲဒီယုံကြည်မှုစိတ်ဓာတ် သိပ်ကို ကြီးမား
နေတာက သဘောထား ပြဿနာ၊ မင်း စောစောက ပြောလိုက်တဲ့ မင်းရဲ့သဘောထားက မင်းဘဝကို
ခိုင်စေရမယ်၊ အသုံးချရမယ်၊ ဘဝမှာ တကယ်အောင်မြင်မှု ပေးမှာက ဒါတွေထက် ကြီးကျယ်တဲ့အရာ
ချင့်ချိန်းပြီး ရွေးတာ၊ ဒီထက်မက ဂဏန်းကြီးကြီးရေးရင် အလကားလျှောက်ရေးတာ၊ ကျွန်တော်က ဘွဲ့ရတဲ့လူ
ဒါနဲ့တင် မလုံလောက်ဘူး၊ လူဟာ ဒါတွေရဲ့ အစေအပါးလည်း အဖြစ်မခံရဘူး၊ ကိုယ်ကသာ ဒါတွေကို
ပြားမှ ပိုမတန်ဘူး၊ တစ်ပြားမှလည်း လျော့မတန်ဘူး၊ ဒါမင်း ကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မင်းရဲ့ သတ်မှန်ချက်” ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာက
ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် စဉ်းစားတတ်ခြင်းဟာလည်း လိုအပ်ချက် တစ်ခုပဲပေါ့၊ ဒါပေမယ့်
မင်းကိုယ်မင်း တန်ဖိုးဖြတ်လိုက်တာ၊ မင်းဟာ တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၃သောင် သောင်းတန်တယ်၊ ဒါပဲ၊ ဒီထက် တစ်
ဆန့်ကျင်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူး၊ သိပ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူ၊ လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်စေ၊ ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေ အောင်မြင်အောင်
ကိန်းဂဏန်းသည် မင်းထင်ထားတာထက် အများကြီး အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ၊ တကယ်တော့ ဒါဟာ
ဒါပေမယ့် ဒီလို ပြောတဲ့အတွက် ငါ့ကို ပညာတတ် ဆန့်ကျင်ရေးသမားလို့ မထင်နဲ့၊ ငါက အသိဉာဏ်ပညာကို
“အခုကိစ္စမှာ မင်းပထမဆုံး အလေးအနက်ထားရမှာက ဒီစက္ကူစလေးပေါ်မှာ မင်း အခုချရေးလိုက်တဲ့
“ဒါပေမယ့် ဘယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာဖြစ် ဖြ စေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူမှန်သမျှဟာ
“ငါ မင်းကို မေးခွန်းတွေမေးမယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်က မင်းစောစောက စဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
လူငယ် နားစိုက်ထောင်နေမှန်း သိသဖြင့် ပါမောက္ခကြီးက ဆက်ပြောသည်။
ကော်ဖီနှင့် မုန့်ကို စားသောက်ရင်းပင် ပါမောက္ခကြီးထံမှ သင်ခန်းစာကို သူ ဆက်နာယူရသည်။
ညကလည်း ယောက်ယက်ခတ်ပြီး ကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ ဗိုက်အလွန် ဆာနေပြီ။
ခိုင်မာတယ် ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေဆိုတာတွေကြောင့် သူတို့နောက်တွန့်မသွားဘူး၊ - 21 -
အများသူငါ အမြင်မှာ ဓနဥစ္စာ တွေဟာ သူတို့ဆီကိုပဲ တမင်တကာ ရွှေ့လျားသွားနေကြသလား ထင်ရတယ်၊
အဲဒီတာ့ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်၊ ဒီလူတွေနဲ့ သူတို့အနီးအနားက တခြား လူတွေ။ ကျင်လည်ရတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းဟာ အတူတူပဲ၊ အခက်အခဲလည်း တူမယ်၊ အခွင့်အရေးလည်းတူမယ်၊ အနေအထားချင်း
“ အဲ ငါးသောင်း....”
အတူတူမှာ တို့ဘာကြောင့် ကြီးပွားသလဲ၊ စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပေါ့၊ သူတို့က ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားရဲ့
“ ဘာလို့ အဲဒါမရေးသလဲ”
အဆီးအတားမခံဘူး၊ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ မရှိဘူး၊ အနေအထား အဆိုးအကောင်းဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ တိုင်းပြည်စီးပွား အတက်အကျ နိုင်ငံတကာ စိးပွားအတက်အကျပေါ်
“မပြောတတ်ဘူး၊ ဘယ်လိုမှ အလှမ်းမမီနိုင်ဘူးဆိုပြီးပယ်ခဲ့တာ ဖြစ်မယ်”
မူတည်ပြီး ချမ်းသာဖို့လွယ်တဲ့အချိန် ခက်တဲ့အချိန်ဆိုတာတော့ ရှိတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ယေဘုယျပြောတာ၊ မဟုတ်လို့
“ အလှမ်းမမီဘူးထင်နေသရွေ့တော့ တကယ်လည်း အလှမ်းမီလာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းက အခု
အဲဒီအတွက် တွေးပူမနေဘူး၊ နောက်တွန့်မနေဘူး၊ အခြေအနေ ခက်ခဲရင်ပိုကြိုးစားးစား၊ ပိုအားထတ်၊ ဒါပဲ၊
၃သောင်းလေးနဲ့ စတာဆိုတော့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်တဲ့အထိကို အဝေးကြီးသွားရမယ်၊ ဒီထက်နည်းနည်း
တကယ် အောင်မြင်ခဲ့ကြသူတွေဟာ ဘာတွေ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ပြောကြပြောကြ ငါကတော့ လုပ်ရင်
လူငယ် အတန်ကြာ စဉ်းစားနေသည်။ ထို့နောက် စာရွက်ပေါ်တွင် ဂဏန်းသစ်တစ်လုံးရေးသည်။
အောင်မြင်ရမှာပဲလို့ ယုံကြည်ကြသူတွေချည်းပဲ၊ ဒီကနေ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ မေးကြည့် ၊ အမွေရလို့
ချမ်းသာတဲ့လူတော့ ထားပေါ့၊ ကိုယ်ဘာသာ ရှာဖွေပြီး ချမ်းသာတဲ့ လူမှန်သမျှ ငါတစ်နေ့ ချမ်းသာမယ်ဆိုတာ
“ကောင်တယ်ကွာ၊ ငါဝမ်းသာတယ်” ပါမောက္ခကြီးက မဆိုင်မတွပင် အားပေးစကား ဆိုလိုက်သည်။
အစောကြီးကတည်းက ယုံကြည်ထားတဲ့ လူချည်းပဲ၊ အဲဒါကြောင့်လည်း တစ်ကယ်ချမ်းသာတာ သာတာ”
“စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒေါ်လာတစ်သောင်းရသွားပြီ။ မင်းတော်တယ်”
ပါမောက္ခကြီးက သဘောတရားတွေ အားတက်သရော ပြောနေရာက လူငယ်ရှေ့ဘက်ရှိ စာရွက်ဆီ
“တကယ် တကယ်ရောက်တာနဲ သဘောချင်းအတူတူပဲကွ၊ မင်းအနေနဲ့ ဧရာမခြေလှမ်းတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်
နိုင်တာပဲ၊ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ ရှာနိုင်သူလို့ သတ်မှန်ယုံကြည်ထားရာကနေ ဒေါ်လာ ၄ သောင်းရှာနိုင်သူလို့
“ကဲ၊ တို့ အလုပ် ပြန်စရအောင်၊ ငါမေးတာ ဖြေစမ်းပါ မင်း အခုရေးထားတဲ့ ၃ သောင်းဆိုတဲ့
တစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ယုံကြည်လိုက်တာ၊ အကြီးကျယ် ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုပဲကွ၊ ရောမမြို့ကြီးကို တစ်နေ့တည်း
ဂဏန်းဟာ မင်းခေါင်းထဲ ပထမဆုံး ပေါ်လာတဲ့ဂဏန်း မဟုတ်ဘူး မလား””
ဆောက်ပြီးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ၊ ဖြည်းဖြည်းပေါ့၊ မှန်မှန်တိုးတက်နေဖို့သာ အဓိက၊ ဒီလိုကွ၊ စောစောက ဥပမာ အတိုင်း ပြောရရင် လူတိုင်းရင်ထဲမှာ
မင်းရင်ထဲမှာလည်းရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ အနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့မြို့၊ တစ်နည်းပြောရရင် မင်းဘာသာ မြင်ယောင်
“ဒါဖြင့် မင်း ပထမဆုံး စဉ်းစားမိတာ ဘာလဲ”
မြို့တစ်မြို့စီရှိတယ်၊ အမှတ်မထင် ရှိနေတာ၊
ထားတဲ့ မင်းရဲ့ အနာဂတ်ရုပ်သွင်။
အဲဒီရုပ်သွင်ဟာ သို့မဟုတ် အဲဒီအနာဂတ်ဘဝမြို့ဟာ မင်းရည်မှန်း
mmcybermedia.com ထားတဲ့ အတိုင်းအတာလောက်ပဲ ကြီးလည်း ကြီးနိုင်တယ်၊ သေးလည်းသေးနိုင်တယ်၊ စတုရန်းမိုင်တစ်ရာလား၊
သဘောမပေါက်ကြဘူး၊ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ နိမ့်လွန်းတဲ့ အကန့်အသတ်ကြောင့် ငါတို့ဘဝတွေနိမ့်ပါး နေရပါ
စတုရန်းပေ တစ်ရာလား။ မင်းသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်ဖြစ်တယ်။
ကလားလို့ သဘောမပေါက်ကြဘူး၊ ဖောက်ထွက်ပစ်ဖို့ ဆိုတာဝေးရောပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေ
အတိုင်းအတာပဲ။ အဲဒီကိန်းဂဏန်းကို တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ရေးသွားနိုင်ရင် မင်းဘဝမြို့ကြီးတိုး တက်စည်ပင် လာမှာပဲ၊
အကြီးမားဆုံးပဲလို့ ပညာရှိတွေပြောဆိုလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲက စွဲမှတ်ယုံကြည်ထားတဲ့ အကန့်အသတ် အရင်ဆုံး
အနာဂတ်ဘဝပုံရိပ်ဟာ စောစောကထက်နှစ်ဆကြီးထွားသွားပြီ ငါလိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာလောက်အထိတော့ မရောက်သေးဘူးပေါ့ကွား၊ ဒါပေမယ့်ရပါတယ်၊ ငါအတင်းတွန်းမတင်ပါဘူး၊ ဒီလိုကွာ၊ မင်းမှာ ပထမဆုံး
လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ သိပ်မြင့်လွန်းရင် မင်းဘယ်ယုံကြည်မလဲ၊ ဒါပေမယ့် သိပ်နိမ့်နေရင်ကော
မင်းရဲ့အကန့်အသတ်တွေ၊ မင်းဟာ သုံးသောင်းတန်အောက်မှာရှိမယ်၊ လေးသောင်းတန်အောက်မှာရှိမယ်၊ အဲသလို၊
မင်းတိုး တက်သွားပြီ၊ မင်းရဲ့ စိတ်တွင် အကန့်အသတ်ကို အများကြီး တိုးချဲ့လိုက်နိုင်ပြီ၊ အခုဆိုရင်မင်းရဲ့
ပိပိသသရှိမထားတဲ့ မင်းရဲ့အနာဂတ် ဘဝပုံရိပ်ဟာ တိတိကျကျ ဆုပ်ဆုပ်ကိုင်ကိုင်ပေါ်လာတာပဲ။ မင်းဟာ မင်းဟာ
ဆက်တိုက်ရနေတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်၊ ဘာပဲပြောပြော မင်းကို ချီးကျူးပါတယ်။ အံသြလောက်အောင်ကို
မင်းအဲ့ဒါကိုရေးချလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် မင်းဘာသာ မစဉ်းစား မမြင်ယောင်ဖူးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မင်းခေါင်းထဲမှာ သုံးသောင်းရမယ့်လူ၊
ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုရှာမလဲ ” ငါအခုလုပ်ပေးနေတာ
မင်းတကယ်ရနိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတော့ လုံးဝမဟုတ်ဘူးကွ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကိန်းဂဏန်းက
“ ဖောက်ထွက်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆရာကြီး ပြောတာတွေက သိပ်ရှင်းသလိုနဲ့ ကျွန်တော်
“ မင်းရဖို့ မျှော်လင့်တဲ့ အမြင့်မားဆုံးကိန်းဂဏန်းဆိုတာတော့ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်
စေရမယ်လို့ ငါအလေးအနက် အာမခံတယ် ”
ရေးချလိုက်သည်။ အဲသည်နောက်၊ “ အဲဒါ ကျွန်တော်ရဖို့ မျှော်လင့်နိုင်တဲ့ အမြင့်မားဆုံး ကိန်းဂဏန်းပဲ ”
မင်းဘဝဟာ မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို ချက်ခြင်းလက်ငင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်၊ လုပ်ကြည့်ပါ၊ မုချပြောင်းလဲ
ကိန်းဂဏန်းတွေတွကရ်ဲချက်ရဲ
ဘောက်တွေကို ချိုးဖျက်၊ ဒီအကန့်အသတ်ထကဲဖောက်ထွက်၊ အဲသလိုလုပ်ရတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်
အလွယ်ကဆူုံးနည်းက
တို့လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်စရအောင်၊ ဒီတစ်ခါစောစောကထက် ပိုကြီးတဲ့ ဂဏန်းရေးကွာ ”
ဘောင်ကို ဘယ်သူမှ မကျော်လွှားနိုင်ကြဘူး၊ အဲဒီတော့ အောင်မြင်ချင်တဲ့လူ ကိုယ့်ဘဝမြို့ကြီး ကြီးကျယ် အကန့်အသတ်ဘောင်ကို
ယုံကြည်ရ တယ်ကွ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်နေ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ့်လူအဖြစ် ပိပိပြင်ပြင် မြင်ယောင်ထား
အောက်မှာပဲ ရှိနေမယ်၊ လူမှာရှိတဲ့ အကန့်အသတ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကန့်သတ်မှုဟာ အင်အား
တဖြည်းဖြည်း တိုးတိုးပြီး ရေးချတဲ့နည်းပဲ၊ တကယ် ချမ်းသာမယ့်လူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချမ်းသာမယ်လို့
ပြောလို့ရတယ်။ စတုရန်းပေတစ်ရာလို့ သတ်မှတ်ရည်မှန်းထားရင် တစ်ရာ့တစ်ပေဖြစ်မလာနိုင်ဘူး၊ တစ်ရာ
ကြီးကျယ်ရှာပေ့ါ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အစွမ်းကုန်အားထုတ်ရင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်တဲ့ - 23 -
mmcybermedia.com အတိုင်းအတာအတွင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲက
ရည်မှန်ချက်လောက်နဲ့ ငါ့ဆီရောက်လာတာမှ မဟုတ်တာ၊ အဲဒီတော့ ငါအခု နှင်းဆီပင်တွေသွာကြည့်မယ်၊
အကန့်အသတ်ဘောင်ကို ဖောက်ထွက်ပြီး ပန်းတိုင်တစ်ခုချတယ်၊ အဲဒီနောက် နောက်တစ်ဆင့် ဆက်ဆက်ပြီး
ဘောင်တွေကိုဖောက်သွားချဲ့သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှ ဒီကနေ့ ဒီထက် ပိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကန့်အသတ်
သူဌေးဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့စာသားကိုချရေး၊ ပြီးတော့ နေ့စွဲပါတိတိကျကျရေး၊ ပြီးရင် အဲဒီစာသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဘောင်ထက် အဆမတန် ကျော်လွှားအောင်မြင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်မှာပေါ့၊ ....စိတ်ထဲက ဘောင်တွေကို
အလေးအနက်ဆင်ခြင်၊ မင်းခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်မှန်သမျှကိုလည်း စာရွက်ပေါ်မှာ
စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဖောက်ကြည့်ရင် တစ်နာရီလောက်အတွင်းမှာပဲ အံအားသင့်
စရာတွေ မင်းတွေ့လာရလိမ့်မယ်၊ ဒီကပြီးရင် မင်းအခန်ထဲသွားပြီး တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး
သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရမယ့်၊ ခြောက်နှစ်အကြာမှာ ငါသန်းကြွယ် သူဌေး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက် စွဲမြဲနေဖို့ပဲ၊
စဉ်းစား၊ မင်းရဲ့ဓနပန်းတိုင်ကိုဘယ်လို သွားမလဲဆိုတာ လမ်းကြောင်းချ ချကြည့်၊ ပထမဆုံး နောက်ခြောက်နှစ်
အဲဒီစိတ်အစွဲကို ခေါင်းထဲမြဲနေအောင်ထားပြီး စဉ်းစားပေတော့”
အံဆထွဲမှာ
အကြာမှာ ငါ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကို စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချရေး၊ ဒါဟာ နေ့ချင်းညချင်း
ကြွယ်ဝချမ်းသာရေး အစီအစဉ်အတွက အရေးကြီးဆုံးလက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ပဲ၊ မင်စိတ်ထဲမှာ
ဝိုးတိုးဝါးတား တစ်ခါတစ်ရံရှိလို့မရဘူး၊ ........ ဘဝမှာ လူတွေ လိုလားတဲ့ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် တကယ်
သေချာပေါက်ချမ်းသာရမယ်တိုတာ မင်းမြင်သွားပြီ ယုံကြည်သွားပြီဆိုရင် စိတ်မရှည်နိုင်စရာ မရှိတာ့ဘူး၊ ငါဆိုရင်
အခန်း (၈) စကားလုံးများ၏ စွမ်းအား တစ်နာရီခန့်
ပြောသမျှက ငြင်းရမှာ ခက်သလို လက်ခံဖို့လည်း မလွယ်ကူဖြစ်နေသည်။ ပါမောက္ခကြီးက ဆက်ပြောသည်။
ပန်ခြံသို့ သူနှင့်အတူ လိုက် ကပ်ါလာသည်။
ပါမောက္ခကြီးက ခုံတန်းလျားတစ်ခုတွင် ထိုင်ကာ လောလောလတ်လတ်ဖြတ်ယူလာခဲ့သည့် နှင့်ဆီပန်း တစ်ပွင့်ကိုကြည့်ရှုနေသည်။
အသုံးချလို့ရတယ်၊ ဆိုပါတော့ ဒီနှစ်အပိုဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ လိုချင်တယ်၊ နောက်နှစ်ကျတော့ ၁၀၀၀၀
ဘဏ္ဍာစိုးကြီးက ပန်ခြံထဲတွင် ပါမောက္ခကြီးစောင့်နေကြောင်း သူ့ကို ခေါ်လွှတ်လိုက်ကြောင်း၊ ပြောပြီး
သန်းကြွယ်ဖို့အထိမဟုတ် တစ်နှစ်မှာ အခုထက်ဘယ်လောက်ပဲ တိုးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးအတွက်လည်း
ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းတွေနှင့် နပန်းလုံးနေရသဖြင့် အချိန်ကုန်၍ကုန်မှန်း မသိလိုက်။
“ ဒီနည်းလမ်းက သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ချည်း အသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူး၊ လူတိုင်းက ဒီနည်းဟာ
လူငယ်ဘာမှ စကားမဆိုနိုင်။ သူ့မှာ မယုံတစ်ဝက်ယုံတစ်ဝက် အခက်ကြုံနေသည်။ ပါမောက္ခကြီး
ရယ်စရာပေ့ါကွာ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီရယ်တဲ့လူတွေ တစ်ယောက်မှ မချမ်းသာကြဘူးကွ”
ထက်ထက် သန်သန် လိုချင်တမ်းတမှု ရှိမှ တကယ်ရတာ ထုံးစံပဲ”
ငါ့ငွေတွေ ဆက်ဆက်ပြီး တိုးပွားအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒီပုံသေနည်းက လူအတော် များများအဖို့တော့
mmcybermedia.com လူငယ် အနားရောက်လာတော့ သူမော့ကြည့်သည် သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးရိပ်သန်းနေသည်။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အစွဲကို နေ့ချင်းညချင်းတော့ ဘယ်ဖျောက်လို့ ရနိုင်ပါ့မလဲ၊ သို့သော် အကြာကြီးလဲ
“ ကဲ ဘယ်လိုလဲ၊ ဦနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား”
“ ဟုတ်ကဲ့ခင့်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန န်တော်မေးစရာအများကြီးရှိလာတယ်”
စကားလုံးတွေ အာရုံပုံရိပ်တွေနဲ့ အစားထိုးပေးတဲ့နည်း။
“ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဒါကြောင့်လဲ ငါဒီမှာ အဆင်သင့်စောင့်နေတာ နတာ” ဆိုပြီး လူငယ်အား သူ့နဘေးတွင်
အဲဒါကို ဆီမန်မန်းသလို အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်ရုံ စိတ်ထဲက ထပ်တလဲလဲပွားများရုံနဲ့ ခြောက်နှစ်အကြာမှာ
ကိုယ်ကျွန်တော် ယုံခိုင်းလို့မရဖြစ်နေတယ်၊ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ကျွန်တော် ဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမလဲ ပြီးတော့
ရတာ ထုံးစံပဲ ”
“ ကျွန်တော်လဲ ချမ်းသာဖို့ကိုတော့ တကယ်ထက်ထက်သန်သန် လိုချင်တမ်းတတာပါ၊ ဒီအတွက်
ကြိုးလည်း ကြိုးစားခဲ့တာပဲ၊ ဘာမှသာ ဖြစ်မလာတာ ”
ဖြစ်နိုင်တယ်.... ဖြစ်နိုင်တယ်.....၊ ဖြစ်ရမယ်... ဖြစ်ရမယ်...ဖြစ်ရယ်၊ အဲသလို။ နှစ်ပေါင်းမှားစွာ စွဲလာတဲ့
ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် တကယ်ရိုရိုးသားသား စွဲစွဲ လန်းလန်းထက်ထက်သန်သန် လိုချင်တမ်းတမှုရှိမှ တကယ်
နောက်ရက်တွေ နောက်အပတ်တွေအတွင်းမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အကြိမ်ကြိမ် ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြော၊ ဖြစ်နိုင်တယ်..
ဖြစ်လေပဲ၊ ချမ်းသာချင်တဲ့လူမှာ ချမ်းသာချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာ အမြဲထက်ထက်သန်သန်ပြင်းပြင်းပြပြရှိနေရမယ်၊
“ ဒီအတွက် လုပ်ဖို့နည်းလမ်းက တစ်ခုပဲ ရှိတယ်၊ မင်းကိုယ်မင်း သန်းကြွယ်သူဌေး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်လိုယုံကြည်ခိုင်းလာခဲ့သလဲ
ခေါင်းထဲမှာ အတွေးပုံရိပ်တွေထင်ရှားပီပြင်လေ လက်တွေ့ဘဝမှာ အဲဒီအရာတွေ ပိုပြီး လျင်လျင်မြန်မြန်
စောစောက ပြောတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ခိုင်းလို့မရဖြစ်နေတာ ”
ကိုယ့်ကိုကယို
အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာ တစ်ခုကတော့ ထက်သန်ပြင်းပြသော အလိုဆန္ဒပဲ၊ အလိုဆန္ဒထက်သန်ပြင်းပြလေ
“ ကျွန်တော်ကတော့ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ ဝန်လေးတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက
လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ အတွေးပုံရိပ်တွေစွဲမြဲဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ချောင်းတည်းသော စိတ်ဆိုတာမျိုးရှိဖို့
မသိတာရယ်၊ သိပြီးတဲ့နောက်လက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖော်တာရယ်သာ အတားအဆီပါ”
ဟေရာကလိက်ုတပ်စ်က
“ အဲဒါတော့ ထည့်မတွက်နဲ့လေကွာ၊ မင်းထက်အများကြီး ငယ်တဲ့အရွယ်မှာတောင် သန်းကြွယ်သူဌေး အများကြီးရှိတာပဲ၊
အသက်ငယ်သေးတယ်လို့လည်း ထင်နေတယ် ”
အတွေးတွေက ဝိုးတိုးဝါးတား ပုံရိပ်တွေက မပြတ်မသား ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်ဟာ မရေရာဘူးပေ့ါ၊ အဲ့ဒါ
မယ့် လူလို့ ကြည်ရမယ်တဲ့၊ ဆရာကြီးကဆိုတယ်၊ ကျွန်တော်ဒေါ်လာ တစ်သန်းချမ်းသာမယ်လို့ ကျွန်တော့် သေးဘူး၊
ကျွန်တော် ချမ်းသာလာမယ်ဆိုတာ လက်ခံလို့မရနိုင်တာပဲ၊ ချမ်းသာချင်တဲ့လူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချမ်းသာ
အာရုံပုံရိပ် ဆိုတာလဲဒါပဲ။ ငါသန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ရမယ်လို့ စကာလုံးအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောနေတဲ့
“ ကျွန်တော်အတွက် အခက်ဆုံးအချက်က စာရွက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ချမ်းသာရမယ်လို့ ချရေးပြီး
လူငယ် ထသွားသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ တံခါးပိတ်သည်။ စားပွဲအံဆွဲထဲမှာ စာအုပ် လိုက်ရှာ
ဖြစ်တာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့ချည်းပဲ မလုံလောက်သေးဘူး၊ မင်းမှာ ချို့တဲ့နေတာက `ယုံကြည်စိတ်´၊ မင်း
သည်။ ဘာစာအုပ်မှ မတွေ့ရ။ သို့သော် စာတစ်စောင်တော့ တွေ့သည်။ စာအိတ်ပေါ်မှာ သူ့နာမည်ရေး
တစ်နေ့ သန်ကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ မင်းစိတ်ထဲ တကယ်စွဲလန်းယုံကြည်နေဖို့လိုတယ် ”
မထားသော်လည်း သူ့အတွက်လို့ပဲ ယူဆစရာ စာတန်းတစ်ခု ထင်ထင်ရှားရှား ရေးထိုးထားသည်။
“ အဲဒီယုံကြည်စိတ် ကျွန်တော် ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ”
“ လူငယ်သန်းကြွယ် ယသ်ူဌေး တစ်ဦးသို့ ” တဲ့။
“ အဲဒီယုံကြည်စိတ်ရနိုင်တဲ့နည်းက ငါစောစောက နည်းနည်းပြောခဲ့ပြီ၊ စကားလုံးတွေကို အကြိမ်ကြိမ်
စာအိတ်ကို သူဖွင့်လိုက်သည်။ အထဲမှာ စာတစ်ရွက်။ စာရွက်ပေါ်မှာ ….
“ အပြီးအပိုင် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ”
ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်းပြခဲ့တဲ့ ငါ့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း သွန်သင်ခဲ့တာ၊ စကားလုံးတွေ အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်
၎င်းအောက်တွင်တော့ ရေးသူ၏ အမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ “ ဓနပညာပါမောက္ခ ” တဲ့။
ရွတ်ပါ၊ စကားလုံးတွေဟာ ငါတို့ရဲ့ အတွင်းဘဝ အပြင်ဘဝ နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာ အလွန်ထူးခြား ဆန်းကြယ်တဲ့
လူငယ်ရင်ထဲ တဒိန် န်း ဒိန်းခုန်သွားသည်။ ဘာသဘောလဲ၊ သူလန့်လာသည်။ အဲ့သည့်ချိန် အသံတစ်ခု
သြဇာသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်၊ စကားလုံးတွေဟာ တကယ့်ကို စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေ”
ကြားရသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အခန်းထဲမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဘယ်အချိန်ကမှန်းမသိ ရောက်နေတာ
“ ကျွန်တော်ဆရာကြီးစကားကို မငြင်းချင်ပါဘူး ” လူငယ်ကဆိုသည်။ “ ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်နိုင်တာ ထက် သိပ်များလွန်ကဲနေသလားလို့
သွားတွေ့ရသည်။ သူအပြင်ထွက်နေတုန်း တစ်ယောက်ယောက် လာထည့်ထားတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ပရင်တာမှ
ကျွန်တော်တွေးမိတယ်၊ ကျွန်တော့်ကို သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်အောင်
စကားလုံးတွေက ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲ ကျွန်တော် လုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူး၊ စကားလုံးတွေမှာ
“ မင်းအခန်းထဲက စားပွဲအံဆွဲမှာ ငါ ရှေးစာအုပ်ကလေးတစ် လးတစ်အုပ် ထည့်ထားတာရှိတယ်၊ ငါပြောနေတဲ့ သဘောတရားကို စိတ်ဝင်စားစရာ ရှင်းလင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ကလေး၊ မင်းအဲ့ဒါသွားရှာကွာ၊ ဖွင့်ဖတ်ကြည့်၊ တို့ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေ့ါ၊
ငေးမောနေသည်။ သည် နောက်မှ သူ စကားတစ်ခွန်းဆိုသည်။ ”
“ လူငယ် ငြင်းဆိုချက်ကို ပါမောက္ခကြီး မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်မှုမပြု။ သူ့အတွေထဲသူ နစ်မြုပ်နေဟန်
သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိတာ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အသင့်အတင့်ပဲရှိမှာပေါ့ ”
နောက်ထပ် ထပ်တစ်နာရီပဲ မင်းနေရတော့မယ်၊
လွတ်လွတ်လပ်လပ် သေသေချာချာဖတ် ”
ဖြစ်စရာရှိသည်။ ပါမောက္ခကြီးက ဘာကြောင့် သူ့ကို သေစေချင်ရမှာလဲ။ သူ့ကိုလည်း ကိုယ်က ဘာပြဿနာမှ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com မဟုတ်တာ မလုပ်မိပဲ။ ဒါပေမယ့် မပြောနိုင်။ သည်နေရာက တခြားနေရာနှင့်မတူ၊ သဘာဝမကျ၊ ထူးခြား
ဆန်းကြယ်လွန်နေသည်။ ပါမောက္ခကြီး ကြည့်ရတာ အပေါ်ယံက နူးညံ့သိပ်မွေ့သလောက် အတွင်စိတ်က
များကြားကို သူ့ဘာသာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာခဲ့ခြင်းပဲ။
ဖောက်ပြန်ရူးသွပ်နေသလား။ သည်သူဌေးကြီးသည် စိတ်ရောဂါသည်ကြီးလား။
လူငယ့်ရင်ထဲ အကြီးအကျယ် ယောက်ယက်ခတ်လာသည်။ နောက်တာလား ဘာလား၊ မသေချာ။
အရင်တစ်ကြိမ်အတိုင်းပင် သူလက်လျှော့လိုက်သည်။ ခုန်ချလျှင် ချက်ချင်း လက်ငင်းသေမှာ မုချ။ ရုတ်တရက်
သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိယု့်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့တော့ အရေးကြီးသည်။ ခပ်ပေ့ါပေ့ါ သဘောထားလျှင်
အခန်းထဲမှာ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံး ရှိနေတာ သူ သွားတွေ့သည်။ မိုက်လိုက်တဲ့အကောင်၊ စောစောက
ကိုယ် ဒုက္ခများသွားနိုင်သည်။ သည်နေရာက အမြန်ဆုံး ထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲဟု သူတွေးသည်။
ဘာကြောင့် မမြင်ရသလဲ။ တယ်လီဖုန်းကို သူကောက်ကိုင်သည်။ ဘယ်ဖက်ရမလဲ၊ အနီးဆုံးရဲစခန်းပေါ့၊
ချက်လက်မှတ်တွေ လျှို့ဝှက်နည်းစဉ် ဆိုတာတွေ စဉ်းစားမနေနှင့်....။
သို့သော် နံပါတ်မသိ။ အော်ပရေတာကို သူခေါ်သည်။ အော်ပရေတာက ချက်ချင်းတုံပြန်သည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးအသံက တမျိုး၊ ကြားနေကျ အော်ပရေတာအသံမျိုးမဟုတ်။ သို့သော် စဉ်းစားမနေနိုင်၊ အနီးဆုံး
သူ စာရွက်ကိုပစ်ချကာ တံခါးဆီသို့ ပြေသည်။ သို့သော် တံခါးက အပြင်မှ အကျအန ပိတ်သွားပြီ။
ရဲစခန်းနံပါတ်တောင်းလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးက နံပါတ်တစ်ခု ပေးသည်။ အဲသည်နံပါတ် သူ ချက်ချင်း
သူအကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားသည်။ လက်ကိုင်ဘုကို တအားလှည့်သည်၊ အတင်းတွန်ဖွင့်ရန်
ကောက်လှည့်သည်။ မရ။ အင်ဂေ့ခ်ျဖြစ်နေသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ဆက်လှည့်သည်။ အင့်ဂေ့ခ်ျ။ ပြဿနာ။
သူကြိုးစားသည်။ မရ။ ဟာငါ့ကို တကယ်အပြတ်လုပ်ပြီဟု သူ တွေးကာ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်သွားသည်။
သည်နေ့ကတော့ သူ့အတွက် အကယ့်ကို ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့နေ့ပဲ။ သူ နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်လှည့်သည်။
ပြတင်းပေါက်ဆီ ဂမူရှူးတိုးပြေးသွားကာ အပြင်လှမ်းကြည့်တော့ ပါမောက္ခကြီးကို ပန်ခြံထဲမှာမြင်ရသည်။ သူ
အကျိုးအကြောင်းတွေ စဉ်းစားမနေနိုင်ဘဲ သံကုန်ဟစ်အော်သည်။ အဘီုးကြီးလှည့်မကြည့်။ ပို၍ကျယ်ကျယ် အော်သည်။
တံခါးကို ဆောင့ကန် က်န်ပြီးထွက်ရန်သူ ကြိုးစားသည်။ သို့သော် တံခါးက လုံးဝမဖြုံ။ ပြတင်းပေါက်ဆီသို့
ပြန်ပြေးသွားသည်။ အဲသည်မှာ လူတစ်ယေက်ကို သွားမြင်သည်။ အိမ်ဆီသို့ လာနေသူ တစ်ယောက်။
ကိုယ်လှည့်နေမိတာပဲ။ သူ အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်သွားသည်။ ငါ့ကို ရေရေလည်လည် နှပ်နေတာပဲ။
သည်အခိုက် ဘဏ္ဍာစိုးကြီး အိမ်ထဲမှထွက်ကာ ပန်းခြံထဲ လျှောက်သွားတာ သူမြင်ရသည်။ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးကို သူလှမ်းခေါ်သည်။
သူရေးခဲ့ခြင်း မဟုတ်၊ သူ လှည့်နေသည့် တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာပင် ရေးထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဖုန်း
အကောင်ပဲ၊ နားလေတာတော့ဘယ်နည်းနှင့် မဖြစ်နိုင်၊ တမင် မကြားချင်ယောင်ဆာင်နေတာ သေချာသည်။ အသည်းအသန်
ဝတ်ရုံအနက်ကြီးတစ်ထည်ဝတ်ထားသည်။ ဦးထုပ်ပြားကြီးတစ်လုံး ငိုက်၍ဆောင်ထားသည်။ လူသတ်သမား၊ အိမ်မက်များမက်နေသလား
ကြေးစားလူသတ်သမားပဲ။ သူ့နှလုံးက လည်ချောင်းထဲ လာဆို့သည်။ သူ သေတာ့မည်။ ထောင်ချောက်ထဲ
မိထားသည့်ကြွက်တစ်ကောင်းလို သူ့တို့စီရင်သမျှ ခံရတော့မည်။ ထွက်ပေါက်မရှိတော့။ ခဏကြာလျှင် သူ့
သို့သော်အိမ်မက် မဟုတ်၊ တကယ်ဖြစ်နေတာသေချာသည်။
သူ ထပ်ခေါ်သည်။ သို့သော် ဘယ်သူမျှမကြား၊ သည်နှစ်ယောက်လုံး နားပင်းနေတာတော့ မဖြစ်နိုင်။
နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ခုခံရုန်းကန်ရန်သူ ကြံစည်မိသည်။ တံခါးမှ အသာနောက်ဆုတ်၍
ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ သူထပ်အော်သည်။ နောက်ထပ် အိမ်စေတစ်ယောက်ပန် ခြံထဲ ထွက်လာသည်။ သိ့ေုသာ်
ခွာသည်။ ဘေးဘီမှာ ခုခံစရာ ဘာလက်နက်ရှိသလဲ လိုက်ကြည့်သည်။ မည်မည်ရရမတွေ့။ သော့ပေါက်ထဲ
သည်လူလည်း သူ သည်လောက် ကယ်ပါ ယူပါ တစာစာ အော်နေတာကို လုံးဝမကြား။ သူ အကြီးအကျယ်
mmcybermedia.com အနက်ရောင်ဝတ်ရုံကို ရိပ်ကနဲ မြင်ရသည်။ ပြီး လူတစ်ကိုယ်လုံး ပေါ်လာသည်။ စကားတစ်ခွန်းမျှ မပြောဘဲ
လက်ထိုးနှိုက်သည်။ ဘာလက်နက်လဲ၊ သေနတ်လား။ ဓားလား။ လူငယ် ကြက်သေသေလျက် ကြည့်နေ
သည်အခိုက်မှာပင် လူစိမ်းက သူ့ဦးထုပ်ကြီးကို အပေါ်နည်းနည်း ပင့်တင်လိုက်သည်။ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုး
ကျူးလွန်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ပြားသားမှတောင်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး”
မြင်ရမလဲဟု တုန်ရီစိုးရွံ့စွာ လှမ်းကြည့်သည့်အခါ၌မူ လှောင်သလို ပြုံးသလိုနှင့် သူ့ကို ကြည့်နေသည့်
“ ဒါတော့ ကျွန် န်ေတာ်ဘယ်သိနိုင်မလဲဗျ ” လူငယ်က အတော်တည်ငြိမ်အေးဆေးသွားပြီဖြစ်သည့်
ပါမောက္ခအဘိုးအို၏ မျက်နှာကို မြင်ရလေသည်။
လေသံမျိုးဖြင့် ပြောသည်။ “ ဟာ မင်းကလည်း ခေါင်းနဲ့ စဉ်းစားပေ့ါကွ၊ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါလား၊ မင်းကို
“ ပန်းခြံထဲမှာ မင်းစာမေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ ရော့ ” အဘိုးအိုက ပေးပြီး၊ “ ငါပြောတဲ့ စာအုပ်ကလေးတွေ့
“ ဟင့်အင်း၊ မတွေ့ဘူး၊ ဟောဒါပဲ တွေ့တယ်” လူငယ်က ပြန်ဖြေသည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ သူက
မြင်ယောင်ထားတာ ပန်းပေါင်း ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ဧရာမ နှင့်ဆီခြံကြီး၊ အခုရှိတာက ငါ့စိတ်ကူးရဲ့ အစွန်အဖျား
တုန်လှုပ်ချောက်ချားတာတွေ ပျောက်သွားပြီ။ သူက ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ချထားခဲ့သည့် စာအိတ်ကို ကောက်ယူ
အရိပ်အယာင်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ ငါ ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်၊ မင်းက ကြောင်းကျိုး ဆက်စပ်စဉ်းစားတတ်တဲ့
ဉာဏ်ကလေးတော့ သုံးဦးမှာပေ့ါကွ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ မင်းလဲ အခုတော့မြင်ပြီ၊ ဒီအချိန်အခါမျိုးမှာ
အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်စဉ်းစားတဲ့ ဉာဏ်ဆိုတာမျိုးက မစွမ်းတော့ဘူး၊ အဲဒီအချိန်မင်းမှာ အဲဒီဉာဏ်
မရှိတော့ဘူး၊ ပြတင်းပေါက်ကနေ မင်းငါတို့ကို လှမ်းခေါ်တဲ့အချိန်၊ တုိ့က မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေတော့
“ ဟ စကားလုံးလေး တစ်လုံးနှစ်လုံးကိစ္စကို မင်းက ဒီလာက် ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ရသလား၊
မင်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်လာတယ်၊ အဲဒီနေရာမှာ မင်းအမှားက ခြိမ်းခြောက်စာကို သွားဖတ်မိတဲ့
စားလေးငါးလုံးရေးထားတဲ့ စက္ကူစုတ်ကလေးကိုင်ပြီး မင်းငါ့ကို တရားရုံးခေါ်သွားမလို့လား၊ ငါက စကားလုံး
ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊ ဘာအဓိပ္ပာယ် အကျိုးအကြောင်းမှ မရှိတဲ့ဟာကို သွားယုံနေတာ၊ ဒါကလည်း မြင်အောင်ပြ
တွေမှာ တန်ခိုးစွမ်အားရှိတယ်ဆိုတော့ မင်း လက်မခံဘူးမဟုတ်လား၊ အခု မင်းဘယ်လို ဖြစ်သွားတာလဲ...”
ဆိုတာ သဘောတရားထက် အများကြီး ပိုထိရောက်တဲ့ နည်းပြဆရာပဲကွ၊ သဘောတရားရဲ့အရောင်က
ခန္ဓာကိုယ်ထဲပါ တကယ်စွဲမြဲတာ၊ တကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ သည်ပင် အတွေ့အကြုံတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်း
ပြောပြောဆိုဆို ပါမောက္ခကြီးက ပရင်တာဆီသို့သွားပြီး ခလုပ်ပိတ်ကာ စက္ကူကို ဖြဲယူလိုက်သည်။ ပြီး
ထားတာပဲ မဟုတ်လား” Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad
အစွဲအလမ်းနဲ့ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် စဉ်းစားမှုယှဉ်လာရင် အစွဲအလမ်းက အမြဲအသာစီးရတယ်ဆိုတဲ့
“ ငါက မင်းကို သင်ခန်းစာတစ်ခု မြန်မြန်သဘောပေါက်သွားအောင် စီစဉ်ပေးတာပါကွာ၊ အတွေ့အကြုံ မှိန်တိန်တိန်ပရှဲိတယ်၊
ဖြစ်လာမယ်၊ စောစောက စာကိုဖတ်ပြီး ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့တာဟာ မင်းစိတ်က ဟာ ကြောက်စရာလို့
“ နောက်တစ်နာရီပဲ မင်းနေရတော့မယ်.... ” ဟူသော စာကြောင့်တွေ အထပ်ထပ်ရိုက်ထားသည့်
အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်လိုက်မိလို့ကိုး၊ အကယ်၍ အဲဒီစာဟာ မင်းနားမလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာတစ်ခုခုနဲ့သာ ရေးထား
စာရွက်ထိပ်ဆုံးတွင် လူနာမည်တစ်ခု ရေးသားထားတာ သူတွေ့ရသည်။ မိမိ နာမည်နှင့် လုံးဝတခြားစီ။
သည်ဟာကို ကြည့်ပြီး သူရှက်သွားသည်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးက ကိုယ့်ကိုပြန်ချောက်လှန့်တာ သူခံလိုက်ရခြင်းပဲဟု သဘောပေါက်သွားရလေးသည်။
ပါမောက္ခကြီးက လူငယ် သူ့စကားတွေကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်စေဖို့ အချိန်ပေးထား သည့် အလား အတန်ကြာ ရပ်နားနေသည်။ ထို့နောက်မှ စကားဆက်ပြန်သည်။ *****
“ ဘဝဆိုတာ နှင်းဆီပန်းဥယျာဉ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သလို လောက ငရဲလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာ
“ မင်း ဒီတစ်နေ့အတွင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး တို့အလိုဆန္ဒ
ရောက်တဲ့အထိ မင်းအများကြီး အရှည်ကြီး ကြိုးစားအားထုတ်ရလိမ့်ဦးမယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်မလျှော့နဲ့၊ ကြိုးစားပါ၊ အင်မတန်ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးရလာဒ် ခံစားရပါလိမ့်မယ်၊ နောင်တစ်နေ့ကျတော့ အဲဒီစိတ်ဓာတ် အနေအထားမျိုး ရရှိရေးသည်ပင်လျှင် ဘဝအတွက် အမြင့်ဆုံး ပန်းတိုင်ဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်လာ နိုင်တယ်၊ ဒါကလွဲရင် ကျန်တာတွေဟာ အရေးမကြီးပါဘူး"
သဲသဲကွဲကွဲ သိလာပြီဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဒါကို တို့ဘယ်လောက် တန်ဖိုးပေးမိတယ်ဆိုတာ ပိုင်းခြားဝေဖန်
မင်းစိတ်ကူး အိပ်မက်မှန်သမျှ ပြည့်စုံပြီးမြောက်တော့မှာပဲ၊ တစ်ခုတော့ သတိပေးမယ်၊ အဲဒီအနေအထား
ယုံကြည်နေရင် အဲဒီအတွေးစာ တို့အပေါ် ရိုက်ခတ်လွှမ်းမိုးမှုရှိတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အတွေးတစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးကို အလွယ်တကူ
ရသွားပြီဆိုရင်တော့ မင်းဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာတစ်ခု တတ်မြောက်သွားပြီလို့သာ အောက်မေ့ပေတော့၊
သင်ခန်းစာတစ်ခု ရခဲ့တာကိုး၊ ခေါင်းထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အတွေးတစ်ခုဟာ မှာနေစေဦးတော့ တို့က အမှန်လို့
တိ့စိုတ်တွေဟာ
ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့ဆိုတာက တကယ်တမ်း သိပ်မလွယ်ဘူး၊ မှန်တယ်၊ ဒါပေယ့်အဲ့ဒီစိတ် အနေအထားမျိုး
ကြောက်ခံတာလည်း အချဉ်းအနှီး အကျိုးမဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ၊ အဲဒီကနေမင်း အင်မတန် အဖိုးတန်တဲ့
သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ မင်းအခုသိသွားပြီ၊ ပရင်တာက ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာဟာ မင်းကို နာမည်တပ်ထားတာ
မင်းစိတ်ထဲမှာ ဟာ ဒါတော့ လွန်သွားပြီးလို့ ထင်လိမ့်မယ်၊ ဘာပဲ ပြောပြော ပြဿနာကို မင်းပဲ ဖြေရှင်းရမှာကိုး၊
အဲဒီစာဟာ မင်းနဲ့မဆိုင်သလို အခုပြဿနာဟာလည်း မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ သဘောထား၊ ဒီလိုပြောလိုက်တော့
အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးတွေ အလွန်များတယ်၊ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်ကာလမှာ ပြဿနာ အခက်အခဲ
မင်းစိတ်ဓာတ် ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်....”
တစ်ကိုယ်တည်း နစ်မြောနေသည့် အသွင်မျိုး။ မျက်လုံးများကတော့ ဆွေးရိပ်သန်းနေသယောင်။ သည်နောက်
`သိ သိစိတ´်
တော့ သူ့စကားတွေကို ပြန်ချုပ်သည့်ဟန် စကားအနည်းငယ် ဆက်ပြောသည်။
“ ကျွန်တော့် အခုပြဿနာကတော့ ခက်နေတာအမှန်ပဲခင့်ဗျ၊ နောက်ငါးနှစ်မှာ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ
မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံး လမ်းညွှန်ပဲ့ကိုင်မယ့် သစ္စာတရားနဲ့ ထိုးထွင်းသိမြင်စိတ်တွေ မင်းရလာလိမ်မယ်၊
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှားပါဆုံး ပစ္စည်းနှစ်ခု မင်းပိုင်ဆိုင်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒါတွေကတော့
“ နည်းစဉ်ကို မင်းမယုံကြည်နိုင်သေးရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူ့အာနိသင်ကတော့ မင်းအပေါ်
စိတ်သဘောထားနှစ်ရပ်ပဲ၊ ဒီနှစ်ရပ်ဟာ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဓနဥစ္စာ ရရှိရေးအတွက် သော့ချက်တွေလို့လဲ
တစ်ဖြည်းဖြည်း သက်ရောက်လာမှာပဲ၊ ဒီဟာကို မင်းကိုယ်ထဲ စိတ်ထဲရောက်အောင်သာ တစ်ဖြည်းဖြည်း
ငါလုပ်နိုင်ရမယ်လို့သာ စွဲစွဲမြဲမြဲယုံကြည်ပါ၊ ဖြစ်ရမှာ မုချပဲ”
စွဲမြဲယုံကြည်ထား၊ သာယာချမ်းမြေ့မှုတွေ ပြည့်လျှံတဲ့ နှင်းဆီပန်း နှလုံးသားထဲမှာ အရုံကိုစူးစိုက်ထား။ အဲဒီခါ
အဲဒါကို အမှန်တရားအဖြစ် ယုံကြည်လိုက်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယုံကြည်မှုဆိုတာဟာ ထမြောက်
မင်းကို မခြိမ်းခြောက်နိုင်ဘူး၊ အဲဒီတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ အဖျက်အဆီးတွေဆိုတာ မရှိဘူးလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ
နည်းစဉ်ကိုယုံကြည်ဖို့၊ ပရင်တာထဲက ထွက်လာတဲ့စာကို ယုံကြည်သလိုယုံကြည်ဖို့ပဲ၊ နည်းစဉ်ကဘာဆိုသလဲ၊
တွေချည်း မြင်မနေဘူးဆိုရင် အဆိုးအပျက်တွေ မင်းအပေါ် မကျရောက်နိုင်ဘူး၊ ဒုက္ခတွေ အန္တရာယ်တွေ
ဖြစ်ပေါ်တယ်၊ မင်းမှာ ပျော့ညံ့တဲစိတ်တွေမရှိဘူး၊ ပြဿနာတွေချည်းတွေးမနေဘူး၊ အဆိုးတွေ အပျက်
လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေတွေဆိုတာ မင်းရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ စွဲထင်နေတာတွေ အတိုင်းပဲ တစ်ထေရာတည်း
တစ်လုံးချင်းစီကို အလေးအနက်ထားကာ သူဆက်၍ ပြောပြသည်။
သဘောသဘာဝတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်၊ ငါပြောမယ်၊ မကောင်းဆိုးဝါးကို မမြင်တဲ့လူအတွက် လောကမှာ မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ
မဟုတ်ဘူး တခြားလူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုတာ သတိရ၊ ပြဿနာဆိုတာလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ၊ မင်းလက်ခံ မင်းပြဿနာ။
ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်လာတိုင်း နှင်းဆီပန်းပွင့်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ခိုဝင်ဖို့ကြိုးစား၊ ခြိမ်းခြောက်စာဟာ ငါ့အတွက် လိုက်ရင်
mmcybermedia.com သွင်းပေးပါ၊ ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူက တန်ခိုးစွမ်းအားတွေပြလာမှာပဲ၊ ဒီနေရာမှာ အဆင်ပြေတဲ့အချက်က
မှတ်သားထားတယ်၊ အဲဒီမှတ်သားမှုတွေ စုပေါင်းပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ သူ့ကိုသူမြင်တဲ့အတ္တပုံရိပ် (self(self
မင်းဒီဟာကို မင်းရဲ့သိစိတ်က လက်ခံအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူး၊ ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်က ဟာ ဟုတ်တယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့မသိစိတ် အဲဒိမှတ်သားမှုတွေထဲမှာ သူ့ကိုယ်သူ လူတော်လို့ ကြေးဆိုင်ဘုတ်နဲ့ အခိုင်အမာ
ရှိသလဲ၊ အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိတာ၊ ဒါပေမယ့်မင်းကြောက်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင်ကို
လူရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာလည်း သူ့ကိုယ်သူ လူရှော်လို့ ရေးသွင်းထားမီပြီးသား ဖြစ်နေတတ်တယ်၊ အခုတင်း
မှာလည်းပဲ မင်းကိုယ်တိုင် ဂရုမမူမိခဲ့ပေမယ့် မင်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝခရီး တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ်
အင်အားကြီးတဲ့အရာက မင်းကိုချုပ်ကိုင်လိုက်တာကိုး၊ ဘယ်ဟာလဲ မင်းစိတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ၊
ကြွယ်ဝချမ်းသာမယ့်လူလို့ တွေးလေ့မရှိခဲ့ဘူး၊ သန်းကြွယ်သူဌေးဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေအကြောင်း ကြုံတဲ့အခါ
ဖြစ်လေတော့ အခုမှ ရုတ်တရက်ထပြီး ငါချမ်းသာရမယ်ကွလို့ ယုံကြည်ဟစ်ကြွေးဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်သလောက်
မသိစိတ်ဟာ လျှို့ဝှက်နက်နဲတယ်၊ နက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်းတယ်၊ အပေါ်ယံမှာမြင်နေရတဲ့ တို့အကဲခတ်လို့ရတဲ့
ခက်ခဲသွားတယ်၊ တကယ်တမ်းသာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် စဉ်စားကြည့်မယ်ဆိုရင် သူများတွေတောင်
`သိစိတ´်အပိုင်းထက် အများကြီးစွမ်းအားကြီးမားတယ်၊ တို့တတွေကို အဓိက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နေတာသူပဲ၊
သူ့စေစားရာအတိုင်း တို့သွားနေကြတာ၊ မသိစိတ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ပြောလို့မကုန်ဘူး၊ အဲ့ဒီတော့
ငါကဘာမချမ်းသာနိုင်စရာရှိသလဲလို့ တွေးတောလို့ ရနိုင်သားပဲ၊ ဒါပေမယ့် မရဘူး၊ မသိစိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့
မင်းအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်တာကိုပဲ ပြောမယ်၊ အဲဒီစွမ်းအားကြီးမားလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မသိစိတ်ဟာ
မချမ်းသာနီုင်ဘာဘူဆိုတဲ့ အစွဲကြီးက သိပ်ပြတ်သားထင်ရှားလာနေတာကိုး၊ မသိစိတ်မှာ ရေးထိုးမိထားတဲ့
အတ္တပုံရိပ်ရဲ့သြဇာကို လူတွေလွန်ဆန်နိုင်လေ့ မရှိဘူး၊ နောင်တစ်နေ့ကျတော့ လူတွေဟာ သူတို့မသိစိတ်ထဲ
မင်းသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လုံးဝမယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိတဲ့ကိစ္စကြီးကို မင်းအခုလို
စွဲနေတဲ့ အတ္တပုံရိပ်အတိုင်းပဲ အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်လာတတ်ကြတယ်၊ အဲဒါကြောင့် မင်းဘဝအနာဂတ်ကို
ယုံကြည်လို့ မရဖြစ်နေရတာ အဲဒီမသိစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်က”ွ
မင်းခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့ ကိစ္စကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်။ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါလား၊ ဘာကြောက်စရာ ဘာကြောင့်လဲ
လူချမ်းသာ အတ္တပုံရိပ်တစ်ခု စွဲမြဲလာအောင် ထည့်သွင်းမွေးမြူပေးဘို့လိုတယ်" နှစ်ပေါင်းများစွာသော
“ သဘောတော့ ပေါက်လာပါပြီခင့်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီပုံရိပ်ကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမွေးမြူနိုင်မလဲ၊"
ဖော်ဆောင်တဲ့အတွေးတွေဟာ မင်းရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်ရေးခြစ်လာခဲ့သလို ရှိနေခဲ့တယ်၊
ဒါတွေဟာ သိပ်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ ကျောက်သားမှာ ရေးထွင်းတဲ့စားများလို ထင်ထင်ရှားရှား ခိုင်ခိုင် မာမာကြီးဖြစ်လာတယ်၊
ပေါ်လာတဲ့ အတွေးတွေ ကြားမိနာမိတဲ့စကားတွေ စတဲ့အရာတွေကို ပေါ်ယံစိတ်ပိုင်းကသာ မေ့တာမေ့
ပျောက်တာဖြစ်ပေမယ့် သူ့မှာရှိတဲ့ မသိစိတ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းကတော့ ဒါတွေအားလုံးကို မပျောက်မပျက်ရအောင်
လှည့်လ့မို ရပေမယ့်
အများကြီးရှိမှာပေါ့၊ အဲဒီအထဲမှာ မမှန်တာတွေအများကြီးပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် မသိစိတ်ကမသိဘူး၊ မင်းက ဟာ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com အဲဒါက အဲဒီလိုဆိုတဲ့ ဆိုရင်သူက စွတ်ရွတ်ပြီး ယုံထားလိုက်တာပဲ၊ အဲဒါမင်းက မသိစိတ်ကို အမှတ်မဲ့
အယုံသွင်းခဲ့မိတာ၊ အခုအမှတ်မဲ့မဟုတ်ဘူး၊ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အယုံသွင်းရမယ့်။ မသိစိတ်က
ထည့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်၊ မသိစိတ်ဟာလွှာမ်းမိုးခံလွယ်ပါတယ်၊ သူ့ကို ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်"
ယုံသွားရင်အဲဒီယုံကြည်ချက်ဟာ လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုသိပ်ကြီးတယ် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ စွမ်းအားနဲ့ လူကို
နားလည်းနေပြီ၊ ပါမောက္ခကြီး၏ သဘောတရားတွေကို သူပိုမိုသိနားလည်း လိုစိတ်ပြင်းပြနေပြီ။
မင်းသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နိုင်တယ်၊ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး မသိစိတ်ကို ဝင်းပြောရင် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ
သေးပါ၊ သို့သော် အဘိုးကြီးက သူ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနေသည်ဆိုတာကတော့
တွေပြော အယုံသွင်းပေ့ါ၊ မင်းကို မင်းသန်းကြွယ်သူဌေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အရင်ကယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ကစပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရမယ်
ပါမောက္ခကြီပြောသမျှ စကားတို့၏အနက်အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အစုံကိုကား လူငယ်သဘော မပေါက်
လှုပ်ရှားစေ တတ်တယ်ဆိုတာ မင်းသိပြီးပြီ၊ အဲဒီတော့ မသိစိတ်ကို ဘာတွေယုံကြည်စေချင်သလဲ၊ အဲဒါ
နှစ်ရက်လောက်တော့စမ်းကြည့် အဲဒီလောက်ဆိုရင် အာနိသင်စတွေ့လာမှာ၊ စကားလုံးတွေဟာ တကယ်
တန်ခိုးကြီးပါတယ်ကွ၊ စကားလုံးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ စွမ်းအားဟာလည်း
"အဲ့ဒါအတွက် ဖြေးရှင်းဖို့နည်းလမ်းရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ ထပ်တလဲလဲရွတ်ဆိုတဲ့နည်း (repetition)
အပြင်ညွှန်းဆိုမှုတွေရဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေဟာ အမြဲပြောတယ်၊
အနေအထားမှာ စီစဉ်ပေးထားတာ၊ ဟောဒီမှာကြည့်၊ .....ခြောက်နှစ်လဲပြည့်ရော မင်း သန်းကြွယ်သူဌေး
မအောင်မြင်ဘူးလို့စွဲတဲ့ အတွက် တကယ်မအောင်မြင်တဲ့ ဘဝရလာသလို ဒီနဲ့ ပြောင်းပြန် အောင်မြင်မယ်လို့ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad
“...... အခုမင်းကို ငါပေးထားတာ ခြောက်နှစ်အတွင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ့် ဖော်မြူလာ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့
အဲဒီအခြေအနေတွေမှ မပြည့်စုံတာ စသဖြင့်ပြောရင်းပြောရင်း အရှုံးတစ်ခုက နောက်အရှုံးတစ်ခု အဲဒီနောက် အရှုံး
သိပ်လွယ်လွယ်လေးလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့.် ......."
"ဟုတ်တယ်၊ ဒါကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုက်တွန်းညွှန်းဆိတဲု့နည်း (self (self-suggestion) လို့လည်းခေါ်တယ်၊ အတွင်းညွှန်းဆိုမှု
"မှန်တာပေ့ါ၊ အဲဒီအတွက် မင်းဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြမယ်၊ ဒါလည်းပဲ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်
တကယ်လိပ်ပတ်လည်အောင်တော့ အတော်ကြိုးစားရ လိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်၊"
ပဲ၊ ဒီနည်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်း၊ အလျင်မြန်ဆုံး အကျိုးသက်ရောက်တဲ့နည်း"
မသိစိတ်ထဲက ကြေးဆိုင်ဘုတ်မှာ "သန်းကြွယ်သူဌေး" ဆိုတဲ့ စကားထင်ရှားသွားပြီဆိုရင် နောင်တစ်နေ့
mmcybermedia.com အခန်း (၁၁)
ရှစ်နှစ်ကြာမယ့်နည်း။ "(၁) ၇၈၁၂.၅၀ ဒေါ်လာ (၂) ၁၅၆၂၅ ဒေါ်လာ (၃) ၃၁၂၅၀ (၄) ၆၂၅၀ (၅) ၁၂၅၀၀ (၆) ၂၅၀၀၀၀
ပါမောက္ခကြီးက စားပွဲမှာထိုင်သည်။ လူငယ်ကိုလည်း ထုငိင်စေသည်။ ပြီးစက္ကူအချို့နှင့် ဖောင်တိန်
(၇) ၅၀၀၀၀၀ (၈) ၁၀၀၀၀၀၀၊ ရှစ်နှစ်ပြည့်ရင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပြီ၊ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စဉ်းစား၊
တစ်ချောင်းယူကာ စက္ကူပေါ်တွင် ကိန်းဂဏန်းတွေ စာတွေရေးချသည်။
“ မင်းလုပ်ရမယ့် ဖော်မြူလာ (နည်းစဉ်)က ဟောဒီအတိုင်းပဲကွ” သူကပြသည်။ စက္ကူပေါ်တွင် သူရေးထားသည်က-
စာရွက်တစ်ရွကမ်ှာ
ရှားရှားပီပီသသချရး၊ သက္ကရာဇ် နှစ်ထောင့် ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ဘယ်လမှာ ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရမည်
ဆိုတာ စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေး၊ ပြီးတော့ဒီနှစ်အကုန်မှာ ရှိရမယ့်ငွေကြေးပမာဏကစပြီး၊ တစ်နှစ်ချင်းအလိုက်
သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကို နှစ်စဉ်နှစ်ဆတိုးအောင် ငါးနှစ်ဆက်တိုက် ကျွန်တော်ကြိုးစားမည်။ အဲသည်နောက်တွင်
တက်လာရမယ့် ကိန်ဂဏန်းတွေရေး၊ အလကားရူးတယ်မအောက်မေ့နဲ့၊ ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်၊ ခေါင်းထဲ
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်မည်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။
“ ဝင်ငွေ (income) နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု (assets) ကိုတာ့ မရောထွေးစေနဲ့ကွ” ပါမောက္ခကြီးကဆိုသည်။
ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တွေရေးရမှာ မကြောက်နဲ့၊ လက်မတွန့်နဲ့၊ သူတို့က မင်းကိုဘာမှ အန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူး၊
“ဝင်ငွေက ဝင်လာတာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာက ပေးစရာရှိတာတွေပေးပြီး အခွန်အတုပ်တွေ နှုတ်ပြီးတဲ့နောက်
ရေးရင်းရေးရင်း ဒီကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ မင်းနဲ့ရင်နှီးယဉ်ပါးလာမယ်၊ လူတွေမေးကြည့်လိုက်ရင် ချမ်းသာချင်တဲ့
ကိုယ့်လက်ထဲကျန်တဲ့ဟာ၊ ဒီအထဲမှာ ဘဏ်စုငွေတို့ ကုမ္ပဏီတွေထဲထည့်ထားတဲ့ အစုရှယ်ယာ တန်ဖိုးတို့
လူချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဘယ်လိုချမ်းသာရမယ် ဘယ်လောက်ချမ်းသာရမယ် စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချတဲ့
စသဖြင့်ပါမယ်၊ အခုမင်ကိုငါပေးထားတာ ခြောက်နှစ်အတွင်း သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ့် ဖော်မြူလာ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့
အနေအထားမှာ စီစဉ်ပေထားတာ၊ ဟောဒီမှာကြည့် ဒီနှစ်အကုန်မှာ မင်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအစုစုဟာ ဒေါ်လာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ လူတစ်ယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်
ခြောက်နှစ်လဲပြည့်ရော မင်းသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရောပဲ၊ ...ဘာလိ ဘာလို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုနှစ်ဆ တိုးခိုင်းသလဲဆိုတော့
ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်က ချမ်းသာချင်စိတ် ပြင်ပြနေရမယ်၊ ချမ်းသာဖို့ အကြောင်းပဲ စိတ်ကူးထဲမြဲနေရမယ်၊
အယုံသွင်းရလွယ်မယ်၊ ပြီးတော့ မှတ်သားရလည်း လွယ်တယ်၊ တစ်နှစ်မှာနှစ်ဆ၊ မဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူး၊
ငွေကြေးအရေအတွက်တွေ၊ နှစ်လရက်စွဲတွေ သတ်မှတ်ရမယ်၊ အဲဒါတွေကို စောစောက ပြောတဲ့အတိုင်း
ဒါပေမယ့် မင်းက အခုအစပိုင်းမှာ နောက်တွန့်ချင်တွန့်နေဦးမယ်၊ ဒီနှစ်ကုန်မှာ ၃၁၂၅၀ မှ ရနိုင်ပါ့မလား
တွေးပူချင်ပူမယ်၊ အဲဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲဒီလောက် မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း ဒီနှစ်အကုန်မှာ
၅နှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ၁၀နှ နှစ်အတွင်း သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဖို့ဆိုပြီး ရည်မှန်ချက်ထားတဲ့ လူတွေစဉ်းစားရမယ့်
စမယ်ဆိုရင်လဲဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါဆိုရင် ခြောက်နှစ်နဲ့တော့ မရတော့ဘူး၊ ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်သွားမယ်။ ကဲ
အချက်၊ အကယ်၍ အဲဒီချမ်းသာချင်သူတစ်ယောက်သည် အခုလက်ရှိအလုပ်နဲ့ တစ်နှစ်မှာ ငွေနှစ်သောင်း
ရတယ်၊ ဒီအလုပ်မှာ ဆက်နေရင် တစ်နှစ်ကို ၁၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်စီပဲ နောက်ထပ်တိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုပါတော့၊
mmcybermedia.com ဒီလူဟာ ဒီအလုပ်မှာ ဆက်ထိုင်နေလို့တော့ ဒီတစ်သက် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး၊
မင်း မသိစိတ်ထဲမှာ မင်းရဲ့ အဲဒီအလိုဆန္ဒ အဲဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်စွဲမြဲသွားအောင် ထပ်တလဲလဲရိုက် ကထ်ည့်
အဲဒီတော့ သူကြံစည်ရမယ်၊ နှစ်ဆတိုးဘို့ နည်းလမ်းကို ရှာကြံရမယ်။
ပေးနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်၊ ငွေကြေး ဘယ်ရွှေ့ဘယ်မျှကို ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်နောက်ဆုံး ထားပြီး ရရမယ်ဆိုတာ
သို့သော် သူ့တစ်နည်းတည်း ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု တိုးတက်ဖို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေ
အရေးမြင်ရင် လှမ်းစွဲဖို့ ခြေဖျားထောက်နေမိလိမ့်မယ်၊ သေသေချာချာ အံ့အားသင့်စရာ ကိစ္စကြီးတွေတောင် အဓိကအနှစ်သာရက
ခိုင်မြဲအောင် နေ့စဉ် ထပ်လောင်းနှိုးဆော် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပြီးတော့ မသိစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ ထကြွ
ဥပမာ ဆိုပါတော့ ကိန်းဂဏန်းအသေးလေးပါပဲ၊ မောင်ရင်က အခုလက်ရှိထက် တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ပဲ
ပိုရချင်တယ်ဆိုပါတော့၊ လောလောဆယ် မင်းရနေတာက ၂၅၀၀၀၊ အဲဒါမှာ ၅၀၀၀ တိုးပြီး ၃၀၀၀၀
မသိစိတ်ဟာ အဝေးထိန်းခလုပ်နဲ့ ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်တစ်ခုလို ခရီး မိုင်ပေါင်းများစွာ အတားအဆီး
ရချင်တယ်၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းလေးတချို့ဝယ်ချင်လို့ဆိုပါတော့၊ မင်းသုံးရမယ့် ဖော်မြူလာက ငါ
တစ်ခုသတိပေးချင်တာက ပစ်မှတ်ပန်းတိုင်ချတဲအ့ခါ သိပ်နိမ့်နိမ့်ကျကျ မချမိစေဖို့ပဲ၊ အောင်မြင်ကြီးပွားချင်တဲ့
ကိန်းဂဏန်းဖြစ်စေ၊ တိတိကျကျရှိဖို့ဟာ အဓိက အရေးကြီးတယ်၊ ဝိုးတိုးဝါးတားနဲ့က ဘာမှလုပ် လို့မရဘူး၊
သူအသာလေး လုပ်သွားမှာပဲ၊ ကိုယ်လုပ်ရမှာက မသိစိတ်ထဲက ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်အစွဲပိုပြီး ကြီးထွား
ကိုယက့်ိုကိုယ်
ဒါမှမဟုတ် ငါဒီနှစ်အတွင်း ၀င်ငွေ ၃၀၀၀၀ ရရမယ်ဆိုပြီး
ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ အတ္တပုံရိပ်က သေးမွှားနေတတ်တယ်၊ အဲဒီတော့ ပန်းတိုင်နိမ့်နိမ့် ချမိတတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကကိုယ်နှိမ့်လွန်းရင် တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒီနှိမ့်ထားသလောက်တောင် မရတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်။”
ကျွတ်လွတ်ချင်စိတ် သိပ်ထက်ထက်သန်သန်မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်လို့ ဆိုရမလိုပဲ၊
ပြောရအုံးမယ်၊ အရင်လေးငါးနှစ်လောက်ကပါ၊ ငါတွက်ထားတာက ဒီလုပ်ငန်းကို တကယ့်ကြီးကြပ်နိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၄ သောင်းခွဲ လောက်အထိ ပေးနိုင်တယ်၊ အဲသလောက်ထိုက်တန်တယ်လို့
လက်ရှိအနေအထားကို မကျေနပ်ဘူးလို့တော့ဆိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းကျတော့ အဲဒီအခြေအနေက
ထက်သန်ရင် ကျွတ်လွတ်ဘို့ လမ်းစမုချပေါ်လာရမှာပဲ၊ ဆိုပါတော့ကွာ၊ မင်းဒီနှစ်မှာ အရင်နှစ်တွေကထက်
ဒါနဲ့ သင့်တော်တယ် ထင်ရတဲ့ ငါသဘောကျတယ်၊
စိတ်လှုပ်လှုပ် ရှားရှားပုံစံမျိ မျိုးနဲ့ပြောတယ်၊ “ သုံးသောင်းထက်နည်းရင်တော့ ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး ” တဲ့
ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပိုလိုချင်တယ်၊ ဒါမှဟုတ် တစ်သောင်းပိုလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပိုရလာနိုင်မလဲ
လေသံကခပ်တင်းတင်း ခပ်ပြတ်ပြတ်၊ ဒါနဲ့ငါလည်း အတော်ကြာကြား စဉ်းစားနေတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ ငြိမ်နေပြီးမှ
လမ်းစမမြင်ဘူးဆို ပါတော့၊ ဒါပူစရာမလိုဘူး၊ ဒါ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အခက်အခဲကြီး မဟုတ်ဘူး၊ အရေးကြီးတာက
ချမ်းသာပြည့်စုံချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက် ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားတဲ့လူ သိပ်မရှိဘူး၊ ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ၊
ဆန္ဒ ရှိလာပြီဆိုပေမယ့်လဲ လူတွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထင်အမြင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်
ထင်စရာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ကျတော့ အဲဒါကို ကိုယ်သတိ မမူမိကြတာ။ လူအတော် တစေ့တစောင်း
လုံလောက်တယ်၊ ဒါလည်းပဲ ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ ဟာ ဒါလောက်တော့ သိတာပေ့ါ၊ အရှင်းကြီးပဲလို့ များများကို
ကျွန်တော်ပေးရမှာပေါ့ ” လို့ ကိုယ့်ဘက်က အတော်ကြီး လျှော့လိုက်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြန်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်၊ တကယ့်တော့
ဟုတ်နိုင်ပါမလား တွေးပူနေတယ်၊ ” “ အေး ယုံရတာခက်ချင်ခက်မယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီအင်မတန်ရိုးစင်း လွယ်ကူတဲ့နည်းကလေးကပဲ င့ါကို
သူက ငါးသောင်းတောင်းရင်တောင် ပေးလိုက်မှာ၊ အခုတော့ ဒီလူက မတောင်းတတ်တဲ့အတွက် အဲဒီမိနစ်ပိုင်း နစ်နာသွားတယ်၊
“ ကြားရသမျှတော့ ကျွန်တော် သိပ်သဘောကျပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သိပ်ကောင်းလွန်းနေလို့ တကယ်မှ
ခန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင် လေးသောင်းထိ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားထားပြီးသားပဲ၊ ပြီးတော့
မင်းဘာတွေ ဘယ်လောက်သဘောပေါက်သလဲ မသိဘူး” ပါမောက္ခကြီးကမေးလိုက်သည်။
အင်တာဗျူးမှာ အစပိုင်းပြောလာတာတွေ အားလုံးကောင်းတယ်၊ ကိုယ်က သူ့ကို အတော်သဘောကျနေပြီ၊ အတွင်းမှာ
အဲဒါဘာကြောင့် ဒီလူရမသွားလဲ၊ စဉ်းစားကြည့်၊ သူ့ကိုယ်သူ တစ်နှစ်ငါသောင်း ရသင့်သူလို့မှ မယူဆတာ၊ ငါ
ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ဒီနည်းနဲပဲ ကြွယ်ဝခဲ့ကြတယ်၊ အရေးကြီးတာ စကားလုံးတွေပဲ၊ စကားလုံးတွေဟာသိပ်ကို
သူတောင်းတဲ့လစာကြားတော့ စိတ်တောင်ပျက်သွားတယ်၊ ဒီလူကို ခန့်မလို့စဉ်းစားထားတာ ပြန်ပယ်ဖျက်
တန်ခိုးစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာတွေ၊ မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုပြီးကြံ့ခိုင်တည်ကြည်လာလေ မင်းနှုတ်က ထွက်တဲ့
စကားလုံး တွေဟာ တကယ့် အမိန့်ဒီကရီများလို့ တန်ခိုးအာနိသင်ထက်မြက်လာလေပဲ၊ မင်းတစ်ကိုယ်တည်း
“ နားထောင်ရတာတော့ သိပ်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့လုပ်ရမှာ တမျိုးကြီးပဲ”
၃သောင်းတန်ပါတယ်လို့ တန်ဖိုးဖြတ်လိုက်ပြီ၊ ငါလိုချင်လို့ လိုက်ရှာနေတဲ့လူက လေးသောင်းခွဲတန်တဲ့လူ ဟုတ်တယ်မလား၊
“ လုပ်ရမှာပဲ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှာ၊ ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကြီးပွားမယ့် အစီအစဉ်ပဲ၊
ကိုယ်အထင်သေးတယ်၊ ယုံကြည်မှုနည်းတယ်၊ အဲဒီတော့ ရှိတဲ့တန်ဖိုးထက်လျှော့တွက်တယ်၊ နောက်ကျတော့
မှာ သူ့တန်ဖိုးသူ တဖြည်းဖြည်းသိလာပြီး တိုးတိုးတောင်းတယ်၊ အဲဒီတော့မှ ငါကလည်း တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
ချမ်းသာရမယ်၊ ဒီနှစ်အကုန်မှာ ဘယ်လောက်၊ နောက်နှစ်မှာ ဘယ်လောက် အသံထွက်ပြီးတော့ကိုဆိုရမယ်၊
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်နေ့ အကြိမ်လေးငါးဆယ်ဆို၊ အကြိမ်တစ်ရာဆို၊ ငါဆိုရင် လက်ချိုးရေပြီး တော့ကိုဆိုတယ်”
ငါတို့ဆက်ဆံပုံဟာ ငါနဲ့ အဲဒီမန်နေဂျာဆက်ဆံခဲတဲ့ ပုံစံအတိုင်ပဲဆိုတာ မင်းမှတ်ထား၊ လောကဟာ သူ့ဆီက မင်းဘယ်လောက်
သူ့ဘာသာအလိလိုများ
ငါးဆယ်တော့ ဆိုဖြစ်အောင်ဆို၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပုံစံချ စည်းကမ်းချတဲ့နေရာမှာ ဒါအခြေခံလေးပဲရှိသေးတယ်၊ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com အဲဒီလောက်မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မနိုင်ဘူး၊ မခိုင်းစေနိုင်ဘူးဆိုရင် ချမ်းသာဖို့ကိစ္စကို မတွေးနဲ့တော့၊ လက်လျော့
ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား၊ ငါ့တကယ်ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလားလို့ ကိယု့်ကိုကိုယ် သံသယ ဝင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ
လိုက်တော့၊ မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာ မှတ်လိုက်တော့၊ ကြီးပွားချင်တဲ့လူဟာ ဇွဲရှိရတယ်က´ွ
ငါ့စကားကို သတိရ၊ မင်းမုချအောင်မြင်ရမယ်လို့ ငါကတိပေးလိုက်တယ်။”
“ ကြီးပွားရေးနည်းစဉ်ကို ဘာကြောင့် ရွတ်ဖို့လိုအပ်ရသလဲခင်ဗျ ”
“ ဆရာကြီးက ဘာကြောင့် ဒါလောက်အာမခံနိုင်ရတာလဲ။”
“ မင်းမှာ ရှိပြီးသား ကြီးပွားချမ်းသားရေး စိတ်ဓာတ်ကို ပိုပြီး ကြီးထွားရှင်သန်အောင် အမြဲသွက်လက်
“ဘာကြောင့် အာမမခံနိုင်ရမှာလဲကွ၊ မင်းကသေချာနေပြီပဲဟာ၊ မင်းဟာ ငါ့လိုပဲ သန်းကြွယ်သူဌေး
နိုးကြားနေအောင် လုပ်ပေးဘို့အတွက်ပဲ၊ အသံထွက်ပြီး ရွတ်တဲ့ အခါကျတော့ အမိန့်က ကိုယ်ဘာသာ
တစ်ယောက်မကြာခင်ဖြစ် စ်လာတော့မယ်၊ အခုတောင်မှပဲ ဖြစ်စပြုနေပြီ၊ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ့်နည်းလမ်းကို
သိနေပြီ တကယ်လက်ခံယုံကြည်ပြီဆိုရင် တကယ်ဖြစ်မယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်စပြီး ခြေချမိပြီပဲ၊ အချိန်လေးပဲ
သြဇာပိုကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်တယ်၊ ရွတ်တဲ့အခါမှာ ဂါထာမန္တာန်တွေ ရွတ်သလို သေသေ ချာချာ
နည်းနည်းစောင့်ရတော့မယ်၊ အရေးကြီးတာ မင်းစိတ်ထဲမှာ တကယ်ပီပီပြင်ပြင်မြင်နေဖို့...”
ပီပီသသ ဌာန်ကရိုဏ်ကျကျ ရွတ်ဖို့လိုတယ်၊ အဲဒီလိုရွတ်တော့မှ သူက တကယ်အသက်ဝင်လာမှာ” ပါမောက္ခကြီးစကားကို
“ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်ကျွန်တော့်လက်ထဲ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရှိတာခက်တယ်” “ မပူနဲ့လေ၊ ကြီးပွားရေးဂါထာကိုသာရွတ်ပါ၊ တဖြည်းဖြည်း မင်းကိုယ်တွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ
ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ တဖြည်းဖြည်းပိုပြီး သဘာဝကျတဲ့ ပန်းတိုင်ဖြစ်လာမယ် ၊
ပါမောက္ခကြီးက ဆက်၍ ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ဖြစ်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင် ဖြစ်ရမယ့် ပန်တိုင်ဖြစ်လာမယ်၊ ကြီးပွားရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ ကြီးပွားရေး နည်းစဉ်ဟာ
“ အစပိုင်းမှာ ကိုယ့်အသံကိုယ် ရှက်သလို ရွံသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ထပ်တလဲလဲရွတ်ရင်
မင်းဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာမယ်၊ အရင်တုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကြီးပွားမချမ်းသာနိုင်ဘူးလို့
ဆိုရင်းကျင့်သားရလာမယ်၊ နားယဉ်လာမယ်၊ အစပထမ စက္ကူပေါ်ချရေးစဉ်က သိပ်ကြီးကျယ်လွန်းတယ်
ထင်ရတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ ရွတ်ဖန်ဆိုဖန်များတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း အလှမ်းမဝေးတဲ့ အရာတစ်ခု
ဖြစ်လာတယ်၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာ ရနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်၊ ဟာ လွယ်လွယ်လေးပါလို့ မြင်လာမယ်၊ ကြာလေ
ယုံကြည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကြီးပွားရေးလမ်းပေါ် တကယ်ရောက်လာမယ်၊ လူဟာ ကိုယ့်ဘဝကံကြမ္မာကို
ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ယုံကြည်စိတ် တိုးတက်လာလေပဲ”
သွားပြီဟု သူ့ဘာသာ သိမှတ်လိုက်မိသည်။ သူ့အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အတွေးအခေါ်တွေ အကြံပေး ငါအမြဲတမ်းမင်းနဲ့
နည်းနည်းတော့ ကြောင်သလိုရှိသည်။ သို့သော် တကယ်တမ်း အလုပ်ဖြစ်မည်ဆိုက ဘာကို ဂရုစိုက်စရာ
စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေမင်းဆီမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်တင်းလာလိမ့်မယ်လုိ့ ယုံကြည်ထား၊ ငါလုပ်နေတာတွေ
လူငယ်အားတက်သွားသည်။ ပါမောက္ခကြီး၏ စကားကို အတော်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီး သဘောပေါက်
“ အဲဒီလိုအခါမျိုးကျတော့ ပိုပြီးတောင် အကြမ်များများထပ်ရွတ်ပစ်ရမယ်၊ ကိယု့်ကိုကိုယ် မလှောင်နဲ့ မင်းစိတ်ထဲမှာ
ထွန်းကားတောက်ပြောင်စေဘို့ မင်းဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းလိုက်ပြီလို့သာ အခိုင်အမာမှတ်ယူပေတော့ ”
mmcybermedia.com “........ ဒီလူတွေက ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့.... ချမ်းသာချင်ပါတယ် ယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ချမ်းသာချင်တာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ ဒါပေမယ့် သူ့ခေါင်းထဲမှာ ငွေအကြောင်းပဲ တွေးနေ ငွေအတွက်ပဲ
စိုးရိပ်ပူပန်နေတယ်။ ငါ့ကို ဘယ်သူ့တွေကလိမ်မလဲ၊ ငါခိုင်းထားတဲ့ ဘယ်သူတွေက သစ္စာဖောက်သွားမလဲ၊
ဘယ်လောက်ချမ်းသာချင်ရမှန်း မသိတဲ့လူလည်း ဘာမှမချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့။.........”
သူ့ကိုပိုင်ပြီး သူ့အရှင်သခင် ဖြစ်သွားတယ်၊ သူ့မှာငွေတွေကုန်သွားမှာ စိးပွားပျက်သွားမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ နှိပ်စက်တဲ့အတွက် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဆိုတာလိုဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါဘယတွေ ဝင်လာတယ်၊
ဘဝနှင့် ချမ်းသာသုခအကြောင်း သိနားလည်ရခြင်း အထောက်အကူပြုဖို့အတွက်
အစာအိမ်က ခံနိုင်ရည်မရှိဖြစ်လာတယ်၊ နို့နဲ့ပေါင်မုန့်ကလွဲလို့ ဘာမှမစားနိုင်ဘူး၊ သူခိုင်းထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံး
အဆင့် စာရေးကမှ သူ့ထက်စားနိုင်သောက်နိုင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်သေးတယ်၊ သူနဲ့ဒီစားရေးကလေး
မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံး အလွန်ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးမယ့် ဖော်မြူလာပါ၊ မင်းကို အတွင်ရော အပြင်ပါ
“ဆရာကြီးက ကျွန်တော့်မျက်စိရှေ့ရွှေတွေငွေတွေလဲ စုပုံပြတယ်၊ တစ်ဖက်ကလည်း ချောက်လှန့်
ချမ်းသာသုခကိုပါ ဖန်တီးပေးလ်ိမ့်မယ်၊ သူက ဓနငွေကြေးဆိုင်ရာ နည်းစဉ်တွေလောက်တော့ တိတိကျကျကြီး
မဟုတ်ဘူး၊ ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားအမြင်တစ်ခုလို့ပဲ ဆိုရလိမ့်မယ်” ပါမောက္ခကြီးက စကားပလ္လင်
အမြဲတကြောင့်ကြကြဖြစ်နေတော့ သူကပိုက်ဆံရှိပေမယ့် စည်းစိမ်မခံနိုင်ဘူး၊ သူကငွေကိုမပိုင် ငွေကသာ
တော့အမှန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတစ်နှစ်မှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် လိုချင်တာလဲ ရုတ်တရက် ကောက် မယ်ဆိုရင်
ငွေနောက်ကိုလိုက်ပြီး ငွေကိုပဲ တစွဲတည်းစွဲတဲ့အခါ ဘဝရဲ့ ချမ်းသာသုခတွေကို မခံစားနိုင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်၊
ပိုပိုရှာတော့ ပိုပိုရလာတယ်၊ ကိုယ့်လက်ထဲများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီဟာတွေဆုံးရှုံးမှာ ကြောက်တဲ့
စိတ်က စဝင်လာရော၊ ငွေရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်တော့တာပဲ။
“ ဒီဟာကို ကာကွယ်ဖို့ ငါကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နည်းက သိပ်လွယ်တယ်၊ သိပ်ရှင်းတယ်၊ ဆေးပညာကြီး
အေမိးလ်ကူအေးရဲ့ ကျန်မာရေး နည်းစဉ်ကို ယူထားတာ၊ သမားတော်ကြီး ကူအေးက သူ့လူနာတွေကို
သိပ်ကောင်းပြီး သခင်အဖြစ်တော့ သိပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအမှန်ပါ”
ရွတ်ခိုင်တဲ့စကားရှိတယ်၊ “တစ် တစ်နေ့တစ်ခြား ငါဟာအဘက်ဘက်က ပိုပြီးကောင်းသထက်ကောင်းလာတယ်”
“ငွေနဲ့ ချမ်းသာသုခ အတူတွဲမရှိနိုင်ဘူးလို့ ဆိုချင်တာလား ဆရာကြီး” Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
ဆိုတဲ့စကား၊ ဒီစကားကို ဂါထာရွတ်သလို အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ကြည့်၊ မနက်အကြိမ်ငါးဆယ်၊ ညအကြိမ်ငါးဆယ်၊ - 37 -
“ချမ် ချမ်းသာသုခဆိုတာကို လူအမျိုးမျိုးက ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့
များများရွတ်နိုင်ရင် များများအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိတာ မင်းတွေ့လာရမယ်၊” ပါမောက္ခကြီး၏
ကြတယ်၊ ငါကတော့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မနေချင်ဘူး၊ ချမ်းသာသုခရရှိရေးအတွက် သော့ချက်ကိုပဲပေးချင်တယ်၊ စကားများကို
ဘယ်တော့မှ သူတို့မလုပ်ကြရဘူး၊ အဲဒီတော့ ချမ်းသာသုခနဲ့လည်း မုချကင်းဝေးကြရတယ်၊ စိတ်ချမ်းသာမှု မရှိတဲ့ လူတွေဟာသေဖို့လည်း အဆင့်သင့်မရှိတတ်ကြဘူးကွ၊”
များများလုပ်လာတာနဲ့အမျှ အမှားအယွင်တွေ ကင်းစင်လာမယ်စသဖြင့် သူတွေးတောနေမိသည်။ Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad
ဟူ၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်လိုက်မိသည်။ အင်းငါကိုယ်က အချိန်လေးနည်းနည်းပါးပါးယူပြီး စဉ်းစားတွေး ငါနောင်ကိုအခုထက်အများကြီး
လုပ်နေကြသတွေဟာ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြဘူး၊ သူတို့ဟာ ငါဘာလုပ်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ပဲ
သိပ်ကိုရှင်နေတာပဲဟု သူသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ငါဘာကြောင့်အရင်က ဒီလိုမျိုးမတွေးမိခဲ့ဖူး ရတာလဲ နည်းပါးတာ၊
ကျွတ်ကျွတ် ထွက်သွားနိုင်တာပဲကွ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်၊ မင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ လုပ်သင့်တဲ့
ချမ်းသာနိုင်ဘူးပေ့ါ။ ငွေကြေးချမ်းသာမှုကိစ္စနည်းတူ စိတ်ချမ်းသာမှုကိစ္စမှာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းဖြစ်တာပဲ။ ” လူငယ်ခေါင်းထဲ
ဟာတွေအားလုံးကို မင်းလုပ်ကိ ကုင်ိနိုင်ခဲ့ပြီးပြီ
ရမှန်မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဘယ်မှ မရောက်နိုင်သလို ဘယ်လောက်ချမ်းသာချင်ရမှန်မသိတဲ့လူလည်း ဘာမှ
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲပြီလို့ပြောနိုင်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း၊”
ရုတ်တရက်ကောက် မေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြောင်နေမယ်၊ ဘာဖြေရမှန်းမသိဘူး၊ ဘယ်သိမလဲ ဘယ်သွား
သေရမယ်ဆိုရင် သေကာနီးအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါဒီကနေ့လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ အားလုံး
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ချမ်းသာသုခအပြည့်အဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါတကားဟု သူလေးစားကြည်ညိုလာမိသည်။ “
ကိုယ့်အတွက် ချမ်းသာသုခကို ဖြစ်စေသလား မဖြစ်စေဘူးလား ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့နည်း၊ ဒီနည်းကို
လူ့ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး နေထိုင်နည်းတစ်ရပ်ကို တွေ့ရှိထားသူတစ်ဦးပါတကားဟု သူမြင်လာသည်။ သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်
အကြောင်းတွေ ပြောနေလိုကတ်ာ သေခြင်းတရားက ကျွန်တော်နဲ့ လက်တစ်ကမ်းလောက်ရောက်နေတဲ့
အချိန်လေးမှာ ဒါကိုပဲလုပ်မှာပေါ့၊ ဥပမာ ဂီတဆရာကြီး ဘတ်(ခ)ဆိုရင် ဒီဒုတိယ အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်၊
အတိုင်းပဲဗျာ” လူငယ်က စိတ်မသက်သာဟန်ဖြင့်မေးသည်။
ဥပမာစဆိုကြပါစို့၊ မင်းအိမ်မှ မှာ ဧည့်ခံပွားတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် အိမ်ကို သန့်ရှင်းပြင်ဆင်နေတယ်၊ အဲဒီမှာ မင်းသိပ်ခင်မင်တဲ့
၂၀ပဲ ကျန်ကျန် အဲဒီကျန်တဲ့ အချိန်ကလေးကျမှ ကမန်တမ်း အဲဒါလေးကျွန်တော်မလုပ်ရသေးလို့ပါဗျာဆိုပြီး စွဲလန်းနှစ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပျော်တဲ့
အဖြေတစ်မျိုးပေးမယ့် လူတစ်စုရှိတယ်၊ အဲဒါကလူနည်းစု၊ ဒီလူတွေက နောက်ထပ် ၂၄နာရီကျန်ကျန်၊ နာရီ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊
တစ်သက်လုံး စိတ်မပါတာဘဲ လုပ်နေခဲ့ရတဲ့ အလုပ်တွေကို ဘယ်ဆက်လုပ်တော့မှာလဲ၊ ...နောက်ထပ်
လက်ရှိအလုပ်နဲ့ လုံးဝခြားနားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ချင်ကြောင်း ဖြေလိမ့်ယ်၊ ဒါအမှန်ပဲ၊ လူ့ဘဝမှာ (သို့မဟုတ)်
“ဘဝအာမခံ ဘဝအာမခံချက်ဆိုတာကိုရှာရင်းနဲ့ ရေလိုက်လွဲကြတယ်လို့ ဆိုချင်တာလားဆရာကြီး” လူငယ်က
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမရှိတဲ့ သူတို့ဘဝကို သူတို့မကျေနပ်နိုင်ကြတဲ့ လူတွေက သူတို့
အဲဒါလည်း ကြောက်တယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် လုံခြုံမှုပေ့ါ၊ ဘဝအာမခံချက်ဆိုတာပေ့ါ၊”
၂၃နာရီမှာ ဘာလုပ်မလဲ၊ ဒီမေးခွန်းကို မင်းနဲ့သိတဲ့လူတိုင်းကို စမ်းပြီးမေးကြည့်၊ အဖြေနှစ်မျိုးထွက်တာ တွေ့ရလိမ့်မယ်၊
ကြောက်တယ်၊ မင်းက လုပ်တတ်လို့လား၊ အဲဒအီလုပ်မျိုးနဲ့ ထမင်းစားရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီကောင် သူ့ကိုယ်သူ
“သေမယ်ဆိုတာ သိတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် လိုအပ်တဲ့ကစ္စိဝိစ္စတွေ အရေးတကြီး ထစီစဉ်ချင်စီစဉ်မှာပေ့ါ၊ ဒီကစ္စတွေအားလုံး
လုပ်သွားသူမျိုးကိုခေါ်တာ၊ သူလိုငါလို သူတွေဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို မလုပ်ရဲကြဘူးကွ၊ သူများဝေဖန်မှာကို
ဘတ်(ခ)တိ (ု့လို
ပါရမီရှင်ဆိုတာ တခြားအကြောင်းတွေအားလုံး ဘေးချိတ်ထားပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကိုပဲ သဲသဲမဲမဲဇွဲနဲ့
ဆိုပါတော့ ဒီနေ့လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကို မင်ပြောင်းလဲ ပစ်မလား မပြောင်းလဲဘူးလား၊”
ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ် ပါရမီရှင်တစ်ယောက်လို ထက်ထက်သန်သန်စွဲစွဲမြဲမြဲလပ်ုနေလို့ရပါတယ်၊ တကယ်တော့
အလုပ်တွေကို လုံးဝလုပ်ခွင့်မရကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အသက်ရှင်လျက် သေနေသူတွေပဲကွ၊ ဒီကစ္စကို သဘောပေါက်အောင်
ဒါပေမယ့် အဲဒီဒုတိယအမျိုးအစားထဲမှာပါဘို့ ကိုယ့်လုပ်လက်စအလုပ်ကို သေကာနီးအထိ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး
ထင်စရာအကြောင်းရှိတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ ရှင်သန်မှုအတွေးအခေါ်ပါ၊ ရှင်သန်းမှု ဘက်က
ဒါနိမ့်ကျတဲ့အလုပ်ပဲ၊ - 39 -
mmcybermedia.com အဲဒီတော့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေကိုတောင် နိမ့်ကျတဲ့အလုပ်၊ စိတ်ညှိုးငယ်စေမယ့်အလုပ် မကျေမနပ်ဖြစ်ရာအလုပ်မျိုး
တစ်နေ့မုချသေရမှာပဲ၊ ဘယ်နေ့လဲကိုယ်မသိဘူး သေချင်တဲ့အချိန်ကောက်သေမှာ ဒါပေမယ့် လူအတော်
မလုပ်စေချင်ရင် ကိုယ့်ကိုရော ဘာကြောင့် ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေခိုင်းရမှာလဲ။ လုံးဝစိတ်မချမ်းသာ
များများ နေကြထိုင်ကြပုံက တစ်နေ့ မသေတော့မယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်၊ ငါဘယ်တော့မှ မသေဘူးဆိုတာမျိုး
နိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ နှစ်မြုပ်ခိုင်းစေထားတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရန်သူလိုသဘောထား နှိပ်ဆက်ရာ
ရောက်မနေဘူးလား၊ ဘာကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်အောင် မပြုပြင်မပြောင်းလဲနိုင်
ထို့နောက် အတန်ကြာမျှ တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှာ ပါမောက္ခကြီးက ဆက်၍ပြောသည်။
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးရှိဘို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်က နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကို ဒီနေ့ဟာငါ့ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံး နေ့လို့ သဘောထားပြီး နေထိုင်သွားဘို့ပဲ၊ ငါကဒီအလုပ်ကိုသိပ်လုပ်ချင်တယ်၊ ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာ ဒါလေး
“အဲဒီတော့ လောလောဆယ် မင်းစိတ်မချမ်သာဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေ့ါ၊ ကဲ ငါတစ်ခုမေးဦးမယ်၊ မင်းကိုယ်မင်း
ငါလုပ်သွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကိုပဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်သွားဖို့ပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ
“ဒီလိုနဲ့ အိုသွားတဲ့အခါကျတော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး” လူငယ်က ဝင်ထောက်သည်။
“ကဲ မနက်ဖြန် သေမယ်ဆိုရင် မင်းဘာလုပ်မလဲ၊ လက်ရှိအလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေမှာလား၊”
ကိုယစ့်ိတ်ထဲမှာ
“ငါလုပ်ချင်တာတွေလုပ်မှာပဲ။ ငါမသေနိုင်ဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ဟိုဟာအရေးကြီးတယ်၊ ဒီဟာအရေးကြီးတယ်
သည်အဘိုးကြီးမှာသူ့အနာဂတ်ကို ထိုးဖောက်မြင်နိုင်သည့် စွမ်းအင်တချို့ရှိတာ သူသိထားရသည်။ ယခုလည်း
ဟိုဟာလေးလုပ်လိုက်ဦး၊ ဒီနားကမထနဲ့ဦးလို့ ခိုင်းတိုင်းစေတိုင်း လိုက်လုပ်ရင်၊ င့ါစိတ်ကူ အကြံအစည်တွေ
မိမိမကြာခင် ကွယ်လွန်တော့မယ်ဟု ကြေငြာနေခြင်းလော။ စကားကတော့ သွယ်ဝိုက်ပြောသောစကား၊
လုပ်ဖြစ်ဖို့ သတ္တိလိုတယ်ကွ၊ လုပ်ရဲရတယ်၊”
“ဆရာကြီးပြောတဲ့ သဘောတရားကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်၊ သိပ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျှော်တယ်
ယေဘုယျလို့ သဘောထား၊ မင်းတစ်ယောက်တည်း ကိစ္စလို့မယူဆနဲ့၊ မင်းစိတ်ထဲ သိပ်အနှောင့်အယှက်
ဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို
ဖြစ်နေမယ်၊ ကဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ လူဆိုတာ မွေးလာတယ်ကွာ၊ ပြီးတော့ သေရတယ်၊ ဒါသဘာဝပဲ၊
ရာနှုန်းပြည့်ကြိုက်တယ်လဲမဟုတ်ဘူး၊ လုံးဝမကြိုက်ဘူးလဲမဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဘယ်လို
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်တာ ငါလုပ်ရင်အောင်မြင်ရမယ်ကွလို့ ယုံကြည်ပြီး လုပ်ချင်နေတာတွေကို တကယ်
ကြောက်ပြီး တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားမယ့် အလုပ်တွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မင်းဘဝ အလဟဿပေ့ါ၊
လူငယ်နေမထိထိုင်မသာတာ ပါမောက္ခကြီးသတိပြုမိသည်။ သူက လူငယ်၏ အတွေးများအားလုံးကို “မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွ”
mmcybermedia.com ဆုံးဖြတ်ရမလဲ၊ ဘယ်အလုပ်အကိုင်မဆိုပြဿနာတွေ စိတ်ညစ်စရာတွေတော့ အနည်းနဲ့ အများ ရှိတတ်စမြဲ
သူတို့ဘဝတွေကို အလဟဿကုန်ဆုံးခံသွားကြတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ “ဓနဆိုတာ အထူးပုဂ္ဂိုလ်တချို့
“မင်းပြောတာမှန်တယ်၊ မကြိုက်ချင်စရာ ကျေနပ်မှုရှိမရှိ
လူဟာပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားအောက်မှာ ပြောင်းလဲမသွားဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားဆိုတာတွေ
“ ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကော ဘဝတစ်လျှောက်အမြဲစိတ်သတ္တိပြည့်ဝစွာနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့
ဒါပေမယ့် ငါသိသမျှ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေကတော့ အနားယူလေ့မရှိကြဘူးကွ၊ သေတဲ့အထိ ဒါမှမဟုတ်
သလား၊ ဆရာကြီးဘဝမှာ အမြဲတမ်းချမ်းသာသုခနဲ့ ပြည့်ဝနေခဲသလားခင်ဗျား၊” လူငယ်ကမေးသည်။
အတော်ကြီး အိုမင်းတဲ့အထိ အလုပ်လုပ်သွားကြတာပဲ၊ မိဘအမွေရပြီး ချမ်းသာတဲ့လူတို့၊ သူဌေးမနဲ့ညားပြီး
ချမ်းသာတဲ့ကလွဲရင် သန်းကြွယ် သူဌေးတိုင်းဟာ သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ သိပ်နှစ်သက်ပျော်ပိုက်ကြတယ်လို့
နဂိုကတည်းက တစ်သန်းမက ချမ်းသာပြီးသား လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သူတို့က လက်ရှိအလုပ်ကို လုပ်ချင်လို့ မလုပ်ချင်ရင်အနားယူသွားမှာပေ့ါ၊
နည်းပါးလို့ပဲ၊ သူတို့ဟာ အမှန်ကို မပြင်နိုင်ကြဘူး၊ အမှန်ကိုကြည့်လဲမကြည့်ရဲဘူး၊
လုပ်အုံးမှာပဲလို့ ဖြေတဲ့လူသိပ်နည်းလိမ့်မယ်။ အဲဒီနည်းတဲ့လူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်မယ် ထင်သလဲ၊ လုပ်နေကြတာ၊
အယူအဆမျိုးတွေကို သူတို့လက်ခံကြသလဲဆိုတာ စီစစ်လိုက်တော့ အဓိကသတ္တိနည်းလို့၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု
ဆိုတဲ့မေးခွန်း။ ဟာ မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီအလုပ်မင်းတကယ် မကြိုက်လို့ပေ့ါကွ၊ ဒီမေးခွန်းကို မင်းလူတွေ လျှောက်မေးကြည့်၊
မေးတဲ့နည်းပဲ၊ မနက်ဖြန်မှာငွေတစ်သန်း ရုတ်တရက်ရလာမယ် ဆိုရင် ဒီအလုပ်ကို မင်းဆက်လုပ် နေဦးမလား” အများကြီး
ခပ်ကြောင်ကြောင်ထင်ရတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်နဲ့ သွားတွေ့တယ်၊ သူကငါအခု မင်းကိုပြောပြနေတဲ့ ငါပြောတဲ့စကားကိုချုပ်ရရင်
ဟာတွေအားလုံး ငါ့ကို ပြောပြခဲ့တာပေ့ါ၊ အစကတော့ ငါမယုံဘူးကွ၊ လက်ခံလို့မရဘူး ၊သူ့သဘောထားတွေ
မဟုတ်တောင် အတော်အသင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုရင် မင်းဟာ မင်းအလုပ်ကို ကျေနပ်နှစ်ခြိုက်မှုရှိရလိမ့်မယ်၊
ကိုယ်မပျော်ပိုက်တဲ့ အလုပ်ထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်သူတွေကတော့ နှစ်ထပ်ကွမ်းအပြစ် ဒဏ်ခံနေရတဲ့လူတွေပဲ၊
မမှန်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းကျတော့ ငါစဉ်းစားတယ်၊ ငါအသက် ၃၀ရှိနေပြီ၊ လုပ်ခဲ့သမျှ
ဒီလူတွေဟာ ဒီတစ်သက် စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူး၊ ဓနဥစ္စာလည်း ဘယ်သောအခါမှ ကြွယ်ဝမလာနိုင်ကြဘူး၊
အယူအဆတွေ လက်ခံပြီး လုပ်ကြည့်လို့ အကျိုးမယုတ်နိုင်ဘူး ငါ့မှာဆုံးရှုံးစရာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှ မရှိတာလို့
ဆုံးရှုံးမှာကြောက်တဲ့အတွက် ကိုယ်တကယ်တမ်း မနှစ်ခြိုက်တဲ့ အလုပ်တွေကို ဖက်တွယ်ထားရင်းကြီးပွား
တွေးပြီး သူ့အကြံဉာဏ်တွေကို နာခံခဲ့တယ်၊”
နှစ်အချက် အကြောက်ကြီးကြလို့၊ သူတို့ဟာ ထမင်းနပ်မှန်ရုံ အလွန်ဆုံး သူလိုငါလိုနေနိုင်ရုံအနေအထားမျိုးကို
mmcybermedia.com “ အဲ့ဒီခပ်ကြောင်ကြောင် သူဌေးကြီးရဲ့ အကြံအတိုင်းလိုက်နာခဲ့လို့ ဒီကနေ့ ဒီဘဝကို ဆရာကြီး
ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့၊ ” “
သတ္တိဝင်လာလိမ့်မယ်၊ ဆရာကြီးကတော့ သူငါ့ကိုပေးခဲ့သမျှထဲမှာ ဒီလက်ဆောင်ဟာ အဖိုးအထိုက်ဆုံးပဲလို့
ကံကြမ္မာအားလုံး မင်းဘဝမှာ တွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်ရမယ့်အရာအားလုံးကို မင်းထိန်းချုပ်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ
နှုတ်မရဲသလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ငါလည်း ထိုနည်း၎င်း ဖြစ်ခဲ့တာပဲ၊ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းရွတ်ရင်းနဲ့
ထပ်တလဲလဲပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါမယုံဘူး၊ ယုံလို့မရဘူး၊ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်လွန်းနေတယ်၊ ဒါပေမယ့်
ငါ့မှာအတွင်းစွမ်းအားတွေ တိုးပွားလာတယ်၊ ဒီစွမ်းအားဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကာလအတွင်း လျော့ပါးမသွား၊
သူပြောတာမှန်ချင်မှန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်လာတယ်၊ ဘဝဆိုတာ ငါထင်သလို ကံကြမ္မာသက်သက်ရဲ့
သူ့အလို အလျှောက်ဖြစ်တာလို့ချည်း ယုံကြည်ထားလို့မဖြစ်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ငါလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့
အောင်အောင်မြင်မြင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အခုမင်းလည်း ငါ့နည်းတူ ဆောင်ရွက်ပါလို့ ငါတိုက်တွန်း
စသဖြင့် စဉ်းစားနားလည်လာတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့ အယူအဆတွေကို ငါတဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်
လက်ခံလာမိတယ်၊ သူတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်း “ တစ်နေ့တစ်ခြား ငါဟာ အဘက်ဘက်က ပိုပြီးကောင်းသထက်
“ ငါးနှစ်အတွင်း ဖြစ်မြောက်ရမည့် `ငွေကြေး´ ရည်မှန်းချက်များ မြို့ပေါ်တွင် ဒေါ်လာ ၆သိန်းတန် အိမ်တစ်လုံး
ကောင်းလာတယ် ” ဆိုတဲ့ဂါထာကို မှန်မှန်ရွတ်ဖတ်မိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ငါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ
ဝယ်ရန်၊ နယ်၌ ၃ သိန်းတန် ခြံတစ်ခြံ ဝယ်ရန်၊
လုံးဝတော်လှန် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။
ဒေါ်လာ ၆ သောင်းတန် ဘီအမ်ဒဗလျူကားသစ်
“ ငါ့ကိုလမ်းပြသွန်သင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရတော့ ပထမဟာထက်ကို ပိုတန်ခိုးကြီးတဲ့ ဂါထာတစ်ခုလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်၊
အခန်း [ ၁၃ ]
ဒါကိုမင်းလည်း သုံးစွဲကြည့်ဖို့ ငါအလေးအနက်တိုက်တွန်းချင်တယ်၊ နည်းနည်းတော့ ဘာသာရေးဆန်သလို
တစ်သက်တာ လိုအင်ဆန္ဒများကို ဖွင့်ဟခြင်း
ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာ၊ တစ်ချို့လူတွေက ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်စွမ်းအား ထက်မြက်စေဖို့တော့ အကြီးအကျယ်
“ အခုဆိုရင် မင်းအတွက် လုပ်ငန်းပထမအဆင့် ပြီးသွားပြီ ” ပါမောက္ခကြီးကရှင်းပြသည်။
စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ လျော့ပါးခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးေ တွေခံစားရတယ်၊ အင်မတန်အကြံရ ကြပ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း
ပြတယ်၊ ငွေကြေးပမာဏရော နေ့ရက်သတ်မှတ်ချက်ပါ အပြည့်အစုံပါပြီ၊ အဲဒီနောက် အခုဒုတိယအဆင့်၊
တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ငါ့ဆရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပေးတဲ့ဂါထာ။ါထာ။” စိတ်ကိုတည်ကြည်
ဒုတိယအဆင့်မှာ အဲဒီထက်ပိုပြီးတိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုပ်ရမယ်၊ ဒီဘဝမှာ မင်းဘာတွေ အလိုရှိသလဲ
“ ကြီးပွားရေး အစီအစဉ်ချတယ်၊ ရည်မှန်းချက်ကို ကိန်းဂဏန်းနဲ့တကွ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဖော်
mmcybermedia.com အိပ်မက်တစ်ခုကို ခေါင်းထဲမှာ ဝိုးတိုးဝါးတားမထားဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိတိကျကျ စာနဲ့ချရေးတဲ့အခါ
ငါ့စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကို အခုလိုချရေးခဲ့တယ်၊ ဟောဒီမှာကြည့်
မွှားမွှားပဲ စဉ်းစားလာတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကြောင့်ပဲ၊ ကြီးပွားချမ်းသာအောင် လုပ်ပါတော့မယ် ဆိုတဲ့ကြားထဲ
“ ငါးနှစ်အတွင်း ဖြစ်မြောက်ရမည့် ‘ ငွေကြေး ’ ရည်မှန်းချက်များ မြို့ပေါ်တွင် ဒေါ်လာ ၆ သိန်းတန်
က တောင် နောက်တွန့်ချင်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းစဉ်းစားကြည့်၊ ကိုယ်ကအဲသည်လောက် အတိုင်းအတာ
အိမ်တစ်လုံးဝယ်ရန်၊ နယ်၌ ၃ သိန်းတန် ခြံတစ်ခြံဝယ်ရန်၊ ပြန်သထားသည့် မာစီဒီးကားဟောင်းတစ်စီးဝယ်ရန်
မရှိသေးလို့သာ ဒါတွေကို ကြီးကျယ်တယ် ထင်နေတာ၊ ချမ်းသာပြီးသားလူတွေကို အဲဒီစာရင်း သွားပြကြည့်
( တန်ဘိုးဒေါ်လာ ၄ သောင်းခန့် ) ၊ ဒေါ်လာ ၆ သောင်းတန် ဘီအမ်ဒဗလျူ ကားသစ်တစ်စီးဝယ်ရန်၊
ငွေသားနှင့် ထုခွဲရောင်းချရန် လွယ်ကူသော ပစ္စည်းစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄ သိန်းတန်ဘိုး စုဆောင်းမိရန်၊
စတော့ဈေးကွက်နှင့် အခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများထဲတွင် ဒေါ်လာ ၄ သိန်းတန်ဘိုးထည့်ဝင်ပြီးဖြစ်ရန်၊
ငွေကြေးကိစ္စနှင့် မပတ်သက်သည့် အခြားရည်မှန်းချက်များမှာ-
သူတိ တု့နိဲ့တန်းတူချမ်းသာတဲ့လူတွေ (စောစောက
သူတို့စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ဒီလောက်အမြင့်ကြီးရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့ဘူး၊
ပြန်မပြောနိုင် ဖြစ်နေသည်။ မြင်နေသလား”
ပါမောက္ခကြီးကမေးသည်။ “ငါကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ချရေးလိုက်တာတွေဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယလ်န့်သွား
ဘယ်တုန်းကမှ မေအောက်မေ့ကြဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အထဲက တစ်ချို့ကျတော့ မွေးရာပါ
မရနိုင် င်ေတာ့ဘူးဆိုရင်
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက် အများကြီးပိုကဲနေတဲ)့ သူတို့ လက်ရှိဘဝအနေအထားကို ရနိုင်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းတဲ့ဘဝလို့
ရုပ်ရည်ချောမော၍ ချစ်စရာကောင်းသော ဇနီးနှင့် လိမ္မာယဉ်ကျေးသော သားသမီးများ ရရှိရန်၊
လက်ညှိုးထိုးမလွဲဘူး၊ တချို့ကျတော့ သူတို့ထက်ကို အဆမတန်ချမ်းသာနေပြန်တာ၊ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုယ်
စီးပွားရေးလောကနှင့် အနုပညာလေကမှဉာဏ်ရည်ထက်မြက်၍ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်၍ တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၃၀ထက်ပို လုပ်စရာမလိုရန်၊
တစ်နှစ်လျှင် ၃ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်သတ္တနှစ်ပတ် အပန်းဖြေအနားယူရန်၊
အတတ်နိုင်ဆုံး လမ်းဖွင့်ပေးထား....၊ အဲဒီလိုရေးချလိုက်တဲ့အခါ မင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက် ဘယ်လောက်
ဒီအထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် အသေးစိတ်တွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဖို့လိုတယ်၊ တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ မင်းအိမ် တိတိကျကျသွားမလုပ်နဲ့၊
ရှေ့ကပြောခဲတဲ့
ကြီးပွားရေးနည်းစဉ်ကို ထပ်တလဲလဲရွတ်ဖတ်တဲ့နည်း ၊အဲဒီထပ်တလဲလဲရွတ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မသိစိတ်ထဲ ယုံကြည်စိတ်တွေ စွဲမြဲပြင်းထန်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ချောက်ကနဲ ခလုပ်နှိပ်လိုက်သလို ပွင်လင်းသွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ မင်းဟာ မင်းဘဝရဲ့အရှင်သခင်အစစ် ဖြစ်လာမယ်၊ ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဖန်တီးနိုင်လာမယ်၊ တော်ရုံလူမရနိုင်တဲ့ အမြင်စွမ်းအား ဖန်တီးမှုစွမ်းအားတွေ မင်းရရှိလာလိမ့်မယ်၊”
အဲဒီအတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့သူတွေ တောင်အများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့နဲ့စာရင် မင်းအိမ်ကလေးတစ်လုံးဟာ အသေး
သည်စကားတွေနားထောင်ရင်း လူငယ့်ခေါင်းထဲတွင် မူးဝေသလိုဖြစ်လာသည်။ သူခဏနားချင်ပြီ။
ဖြစ်ရတာ၊ ဒါပေမယ့် ဒီအပိုင်းဟာလုံးဝသုံးမရ ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဖြည့်ပေးဖို့ပဲ
ချမ်းသာဖို့ ရည်မှန်းထားတာ ဟုတ်ဘူး၊ သမ္မတဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းထားတာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါတွေ ရည်မှန်းပြီး
ဆို့ခံထားရသလို မမြင်နိုင်မပြောနိ ပြောုင်ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒါကလည်း သင်ယူမှုတွေမှတ်သားနာယူမှု တွေမှားခဲ့လို့
အိမ်ဆိုပါစို့၊ ဒေါ်လာ ၆ သိန်းတန်အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ယူနိုင်ရေး၊ ဒါဘာကြီးကျယ်သလဲ၊ သန်းတစ်ထောင်
အပိုင်း ရှိနေသေးတယ်၊ ဒီအစိတ်အပိုင်းက မျက်နှာကို အဝတ်နဲ့ စည်းခံထားရသလို၊ ပါးစပ်ကို လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့
အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်၊ မင်းရည်မှန်းချက်ကလေးတွေ ဥပမာ
တစိတ်တပိုင်းကတော့ မြင်နေပြီ၊ ယုံကြည်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် မယုံကြည်နိုင်သေးတဲ့အပိုင်း အမှန်မမြင်နိုင်သေးတဲ့
မပြတ်ထပ်ထပ်ရေးပေးဖို့လိုတယ်၊ ခိုင်မာစွဲမြဲတဲ့ စိတ်ဟာ တန်ခိုးသတ္တိတစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ သူ့မှာ အခက်အခဲ
“မှန်တာပေ့ါ၊ စဉ်းစားရမယ်၊ ငါအခုပြောတာတွေအားလုံး သေသေချာချာပြန်စဉ်းစား၊ မင်းဦးနှောက်
ရေရာတိကျလေ တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ဘို့ နီးစပ်လေပဲ၊ ဒီဆန္ဒတွေ မသိစိတ်ထဲစွဲမြဲခိုင်မာအောင်သာ ကိုယ်က
“ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ အချိန်ယူစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်” လူငယ်ကပြောသည်။
တစ်နေ့မှာ တကယ့်လက်တွေ့ ဖြစ်လာရမှာ၊ အဲဒါကြောင့်မို့တိတိကျကျရေးချဖို့ပြောတာ၊ အလိုဆန္ဒဆိုတာ
ဟာတွေ လောက်တော့ ဖြစ်ရမှာပေ့ါ၊” ၊
သူတပါးနဲ့ငြိစွန်းပတ်သက် သွားနိုင်လို့ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်ပျက်စီးအောင် လုပ်ရာရောက် ချင်ရောက်သွား ဒါမျိုးကျတော့
ကိယ်ုတိုင်ရေးပါ၊ သူများတွေတောင် ဧရာမအဆင့် ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ကြရင်မင်းလည်း အဲဒီစာရင်းထဲက
ပြဿနာတွေ တက်လာနိုင်တယ်၊ ရည်မှန်းချက် မအောင်မမြင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့လ်ဲဆိုတော့ ဒါမျိုးက နိုင်လို့၊
တစ်ဆောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအိမ်မျိုး ဘယ်လောက်တန်တဲ့ အိမ်မျိုးဆိုတာပဲစဉ်းစား၊ ဘယ်အိမ်ကို အိမ်နံပါတ်လမ်းနံပါတ်နဲ့တော့
ယုံကြည်စိတ်ပြင်ပြရင် တောင်တွေကိုရွှေ့ပစ်နိုင်တယ်၊ မြစ်ချောင်တွေကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပစ်နိုင်တယ်။”
ရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ အကန့်အသတ် သို့မဟုတ် မင်းရဲ့ နယ်နိမိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ပါမောက္ခကြီးကလည်း သူ့အခြေအနေကို ရ်ိပ်မိသည်။
ဒီနေရာလေးမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့အတူ နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်သွားချင်တယ်၊” - 44 -
mmcybermedia.com သည်စကားကြားတော့ လူငယ် ဝမ်းနည်းသွားသည်။ ပါမောက္ခကြီးက သူ့ကိုယ်သူ ကွယ်လွန်ချိန်နီးပြီ
ဆိုတာ သိနေလေသည်လား။ သူသွားတော့မည်ဆိုသော သဘောမျိုးပြောတာ တစ်ကြိမ်မကတော့ပြီ။ လူတွေက
“အာရုံစူးစိုက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရဖို့ကတော့ သိပ်မခဲယဉ်းဘူးထင်တယ်၊”
တွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းပါးခြင်းပဲ၊”
အာရုံစူးစိုက်မှုဟာ လူ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်း ဘယ်ကဏ္ဍမျိုးအတွက်မဆို အော အောင်မြင်မှုရစေမယ့် အခြေခံအချက် တစ်ခုဖြစ်တယ်၊
ရောက်နေတဲ့ တောင်ယာဆိုတာ အတိတ်တွေ အနာဂတ်တွေ၊ အတိတ်ကမှားခဲ့တာ မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ
တိုင်းမှာ ပန်းရနံ့တွေက ငါ့အတွက်ထူးခြားနေဆဲပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲသိလား၊ ငါကရှိတဲ့အချိန် ရှိတဲ့နေရာမှာ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့
ရှိပေမယ့် စိတ်ကတောင်ယာမှာ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သူတို့စိတ်တွေက လူနဲ့ အတူမရှိကြဘူး၊ သူတို့စိတ်တွေ
“နှင်းဆီပန်းရနံ့တွေ ငါရှုရှိုက်လာခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်းထောင်သောင်းချီရော့မယ်၊ ဒါပေမယ့် အကြိမ်
မသိမှတ်မိဘူး၊ သူတို့ဟာပစ္စုပ္ပန်မှာမနေဘူး၊ ရောက်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူး၊ အများပြောတတ်ကြတဲ့ “လူ လူကဒီမှာ
ပါမောက္ခကြီးက ပန်းပွင့်များကို ကြည့်ရင် အတွေးနက်နေဟန်ဖြင့် ငြိမ်သက်၍နေသည်။
လွှမ်းမိုးဖုံးကွယ်လျက်ပဲမြင်တယ်၊ ဒီလူတွေက အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲ ရောက်နေတဲ့လူ တွေနဲ့တူတယ်၊ အိပ်ရင်း
နှင်းဆီပန်းရုံတစ်ခုရှေ့မှာရပ်သည်။ ပန်းရုံတစ်ခုလုံးပင် လှပသောနှင်းဆီပန်းပွင်ကြီးတွေ ဝေဆာလျက်ရှိသည်။
နားဖျားကြားဘူးတာလေးတွေက ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက် လူကိုယ်တိုင်ကိုတွေရသော်လည်း ပကတိအတိုင်း
နှင်းဆီဥယျာဉ်၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို တွေ့ရှိရခြင်း
အစစ်အမှန်ကိုမြင်တယ်၊ အရှိပကတိအတိုင်းမြင်တယ်၊ လူအများစုကျတော့ အစွဲအလန်းလေးတွေ နားစွန်
တန်ဘိုးရှိတာနဲသ့ာမန်ဟာ၊
အကဲဖြတ်နိုင်တယ်၊ အာရုံစူးစိုက်တဲ့အလေ့အကျင့်က ပေးထားတဲ့ စွမ်းအားကြောင့် ဒီလူဟာ “ဘာ”ဆိ ဆိုတာ
တတ်တဲ့ ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ မြင်တာ၊ လူတစ်ယောက်နဲ့ ခဏပဲတွေ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလူကို မှန်မှန်ကန်ကန်
နဖူးကချွေး ခြေမကျအောင်သာ ကျုံးရုန်းလုပ်နေရမယ်၊ ဘယ်တော့မှ ကြီးပွားချမ်းသာလာမှာ မဟုတ်ဘူး၊
“ဒါပေ့ါ၊ အာရုံစူးစိုက်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကြောင့် သူတို့ဟာ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုမြင်ကြတယ်၊
ငွေတစ်ဆယ်ရရင် ငွေနှစ်ဆယ်ရအောင် နှစ်နာရီအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမျိုးနဲ့ သွားနေ လို့ကတော့
“အောင် အောင်မြင်ကြီးပွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်တွေကို ဂရုစိုက်တတ်ကြသလား”
သူများမမြင်တဲ့ အသေးစိတ်ကလေးတွေကို မြင်တတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံလာရလိမ့်မယ်၊”
အမူမဲအမှတ်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်၊ လစ်ဟင်ပေ့ါဆသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ သိသိသာသာလျှော့ပါးသွားလိမ့်မယ်၊ - 45 -
“နှင်းဆီပန်းဟာ လူ့ဘဝရဲ့ သင်္ကေတပဲကွ၊ ဆူးလေးတွေဟာ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ ဒုက္ခတွေ
အခက်အခဲတွေ၊ ဆူးတွေပြည့်နေတဲ့ ဟောဒီအရိုးတန်ကိုဖြတ်သန်းပြီးမှ ပွင်ချပ်ပွင်ဖတ်တွေနဲ့ လှပမွှေးကြိုင်တဲ့
လုပ်တာတွေနဲ့ အင်အားကိုအပြုန်းတီးမခံဘဲ စိတ်အင်အား လူအင်အား အားလုံးကို ပြဿနာဖြေရှင်းရေးမှာ
နှင်းဆီပန်းပွင့်ဆီကိုရောက် က်တယ်၊ လူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရ ဘဝအောင်မြင်မှု ဘဝရဲ့ချမ်းသာသုခတွေဟာလည်း
စုစည်းသုံးစွဲတတ်သူဖြစ်လာမယ်၊ တချို့လူတွေက အစိုးရိမ်ကြီးတာနဲ့ အလုပ်ကိုဂရုစိုက်တာ မကွဲပြားကြဘူး၊
အတွေ့အကြုံတွေ အခက်အခဲတွေကို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီးဖြတ်သန်းနိုင်မှ ခံစားရရှိနိုင်တဲ့အရာတွေပဲ၊”
အစိုးရိမ်ကြီးတဲ့အတွက် ဘယ်အလုပ်မှ ပြေလည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အစာအိမ်အနာဖြစ်တာ နှလုံးရောဂါ
ရတာတို့ပဲ အဖတ်တင်မယ်၊ အာရုံစူးစိုက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိလာတဲ့အခါ အဲဒီအပိုဆာဒါးအတွေးတွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှုမြင်သ သုံးသပ်ပုံဟာလည်း ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်၊
အကုန်လုံးအထူးအဆန်းတွေဖြစ်နေမှာ၊ လောလောဆယ် မြင်လာမှာ၊
ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ လာဘ်ကောင်း ကံကောင်းတွေ ခေါ်လာပေးလိမ့်မယ်၊ ကံကြမ္မာစောင့် နတ်သမီးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့
တကယ်ရှိတာ၊ သူ့ကိုအာရုံပြု သူ့ဆီကတောင်းဆိုရင် သူတကယ်တုန့်ပြန်လိမ့်မယ်၊ အောင် အာင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့
နှင် င်း ဆီအမှတ်တံဆိပ်ဂိုဏ်ဝင်
ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေ အမှားအယွင်းတွေ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရမှုတွေဟာ နှင်းဆီရိုးတံပေါ်က တစ်ချောင်း
ချင်းသောဆူးတွေပဲ၊ ဒါတွေကိုအောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါ လှပတဲ့ပွင့်ချပ် ပွင့်ဖတ်တွေဆီရောက်မယ်၊
ဒုက္ခဆိုတဲ့ ဆူးတွေဟာ မင်းရဲ့အသိဉာဏ်တွေ နိုးကြားထက်မြက်စေလိမ့်မယ်၊ ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ် အနှစ်သာရ တွေကို တွေ့မြင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာသုခကို ခံစားရစေလိမ့်မယ်၊ ဒါကိုစွဲမြဲ ယုံကြည်ထားပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ နှင်းဆီနှလုံးသား၊ နှင်းဆီဒဿနကို အချိန်နည်းနည်းစီ အာရုံပြုပေးရင် ပိုပြီးအကျိုးထူးလိမ့်မယ်၊ အကယ်၍
အားတက်သရော ပြောဆိုပြီးသည့်နောက် ပါမောက္ခကြီးက နှင်းဆီပန်းတွေဘက် လှည့်သွားပြန်သည်။
နှင်းဆီပန်းရနံ့ကို အသစ်အဆန်းပမာ ရှူရှိုက်ကြည့်နေသည်။
အတွက်တော့ ခံစရာရှိသမျှ ကောင်းကျိုးဆိုကျိုးခံရမယ်၊ နောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ အကောင်းအဆိုးကို ကိုယ့်ဘာသာစီမံလို့ရပြီ၊
ဖြစ်သွားပြီလို့ မှတ်ထားလိုက်ပေတော့၊ မင်းမှာ အားကိုးအားထားလိုတိုင်း ဒီနှင်းဆီပန်းကိုကြည့်ပါ၊ မင်းကို
အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားနေရင်ပြောတာ၊ ရောက်ရာအရပ်ကနေ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိအချိန်ကစပြီး ဒီလမ်းကြောင်းကို
အယူသည်းတယ်ထင်မှာပေ့ါ၊ ဒါပေမယ့် ဒါကိုယုံကြည်ပြီး သူတို့တကယ် အကျိုးခံစားကြရတာတော့အမှန်ပဲ၊”
ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ရောက်မယ့် ပန်းတိုင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် ကံကြမ္မာနဲ့ကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ
“ဒီနှင်းဆီပန်းကို တစ်သက်လုံး အမှတ်တရသိမ်းထား၊ သူဟာမင်းအတွက် အဆောင်ကောင်းတစ်ခု
ညှပ်လိုက်ပြီး လူငယ်အား ပေးသည်။
mmcybermedia.com အနက်ဝိုင်းတစ်ခုခုကို စူးစိုက်ပြီး နှင်းဆီဒဿနကို အာရုံပြုနိုင်တယ်၊ တစ်ဆက်တည်းမှာ အဲဒီနှင်းဆီပန်း သို့မဟုတ်
မော့ကြည့်သည်။ လူငယ်က သူ့အနီးမှာ။ “မင်းမှတ်ထားကွ အတော်လေးမြင့်တဲ့ တစ်နေရာရောက်ရင် ဒီတိမ်တိုက်တွေမရှိတော့ဘူး၊ သူတို့က
မင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားတွေ သိပ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့ဘဝဟာ လုံးဝပြောင်းလဲ လာလိမ့်မယ်။”
စကားကို အာရုံစိုက်နားထောင်နေမိသည်။ အဓိကအချက်ဟာ
ကိစ္စမရှိဘူး၊ နောက်ပိုင်းကျတော့ တာ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ဆင်ခြင်ပြီး မင်းတဖြည်းဖြည်း မြင်လာပါလိမ့်မယ်၊” သူတို့နှစ်ဦး ညစာစားပွဲမှာ ထိုင်ကြသည်။ စာဖိုမှူးကပေါင်မုန့်နှင့် ဝိုင်ကိုယူလာပြီး တည်ခင်းပေးသည်။
မနက်က နေရောင်ခြည်တောက်ပနေခဲ့သည့် ကောင်းကင်သည် ရုတ်တရက် မိုးသားတိမ်တိုက်တွေ မှိုင်းမှုံ၍လာသည်။
“ငါပြောတဲ ငါပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးတော့လည်း မင်းသဘောပေါက်ချင်မှ ပေါက်ဦးမှာပေ့ါကွာ၊ ဒါပေမယ့်
စကားပြောရင်းပင် လူငယ်နှင့်ပါမောက္ခကြီးတို့ အိမ်ဆီသို့ ပြန်လျှောက်လာကြသည်။
ထို့နောက်ပါမောက္ခကြီးက လူငယ်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကာ မှတ်ချက်စကား တစ်ခွန်းဆိုသည်။
ပြဿနာကို အကြီးကြီးလို့ မြင်ပြီး ကြောက်တယ်၊ စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းလာတာနဲ့အမျှ ပြဿနာဆိုတာ တွေဟာ
အရေးကြီးတယ် ထင်သလောက်ပဲ အရေးကြီးတယ်၊ ပြဿနာဆိုတာကလည်း ကိုယ်က ဒါပြဿနာဘဲလို့ ယူဆမှပြဿနာဖြစ်တယ်၊
အားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြဿနာတွေထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရောက်အောင် မြှင့်တင်ထားနိုင်တော့မှ
စိတ်ချယုံကြည်မှုတွေ ပြည့်ဝလာပြီဆိုတဲ့အခါ ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ မင်းကို ဘယ်လိုမှ မင်းတွေရလာလိမ့်မယ်၊
မဟုတ်ဘူး၊ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ အာရုံစူးစိုက်တဲ့နည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်းအားတိုးအောင် လေ့ကျင့်တဲ့နည်းတွေ
အလေ့အကျင့်တွေကြောင့် မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ ကြံ့ခိုင်လာပြီး အားကောင်းလာပြီ မင်းမှာကိုယ့်ကိုကိုယ် ချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာ
အခါမျိုးကြုံတိုင်း င့ါစိတ် င့ါဝိညာဉ်ဟာ အနိမ့်ပိုင်းမှာပဲရှိနေသေးလို့ အခုလိုဖြစ်ရတာ၊ အမြင့ င့်ကိုတက်နိုင်မှ
လူငယ်က လက်ထဲရှိ နှင်းဆီပန်းပွင့်၏ ရနံ့ကိုပင်သေသေချာချာမွှေးကြူမကြည့်နိုင်ပဲ ပါမောက္ခကြီး၏
စင်စစ်သည်ကိစ္စက မနေ့ကတည်းကပင် သူ့ဦးနှောက်ကို ဒုက္ခပေးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဆရာကြီ ဆရာကြီးပြောသမျှတွေ ကျွန်တော် စဉ်းစား နားထောင်ပါတယ်၊ အားလုံးလည်း ကျွန်တော်လက်ခံ
မီးထွန်းညှိသည်။ ပြီးလျှင် ပြတင်းပေါက်နားသွားရပ်ကာ လေဝှေ့နေသော ခန်းဆီးစကိုဖယ်၍ ကောင်းကင်ဆီသို့
ပါတယ်၊ ဆရာကြီးပြောတဲ့နည်းစဉ်တွေအတိုင်းလုပ်ရင် ကျွန်တော်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ် ငွေချမ်းသာသလို
mmcybermedia.com စိတ်ရဲ့ ချမ်းသာသုခနဲ့လည်း ပြည့်ဝမယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်နေပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှာ
ခက်နေတာက ဘယ်ကစမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ ဘာလုပ်ငန်းနဲ့စမလဲ၊ ဘယ်နယ်ပယ်ထဲကိုဝင်ပြီး ချမ်းသာအောင်
လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ မရနိုင်သေးဘူး ဆရာကြီး၊”
“လုပ်ငန်းကိုတော့ ဆရာကြီးပြောတဲ့နည်းအတိုင်း ကျွန်တော်
လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ အရင်းအနှီးလိတုယ်၊ ကျွန်တော့်မှာက ခြူးတစ်ပြားမှမရှိဘူး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်၊” “မင်းအရင်းအနှီးက ဘယ်လောက်လိုမှာမို့လဲ၊” “မပြောတတ် မပြောတတ်ဘူးဆရာကြီး၊ အနည်းဆုံး တစ်သောင်းလောက်တော့ လိုမယ်ထင်တာပဲ၊ ဆရာကြီးတုန်း
သူမြင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်း အလွန်အကင်းပါးသည်။ လူငယ့်စိတ်ထဲဘာရှိသည်ကို သူချက်ချင်းသိသည်။
ကလည်း တစ်သောင်းနဲ့ စခဲ့တယ်မဟုတ်လား၊”ား၊
လူငယ်အား အကြင်နာစွာပင် သူဆက်၍ပြောသည်။
“အေး အဲဒါတော့ မင်းရအောင်ရှာပေ့ါကွာ၊ နည်းနည်းလျှောက်ကြည့်ပေါ့၊ ဘယ်နေရာက ရနိုင်မလဲ၊
“ ဒီလိုကွ မင်းဘယ်လုပ်ငန်းနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘာမှစမလုပ်ခင်တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ
ဘယ်လိုရနိုင်လဲ၊ နည်းလမ်းရှာရင်တွေ့မှာပေ့ါ။” ။
မသိနိုင်ဘူး၊ ဒီအတွက် ပူစရာမလိုဘူး၊ လောလောဆယ် မင်းလုပ်သင့်တာက ဘယ်အလုပ်မျိုးဟာ မင်းရဲ့စရိုက်
သဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီသလဲ၊ အဲဒီအလုပ်မှာသာဆိုရင် မင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါ မြှုပ်နှံပြီး ပျော်ပျော်ကြီးလုပ်နိုင်မလား၊ မငြီးမငွေသလို
မရှိတော့ ဘယ်ဘဏ်ကမှ ချေးမှာမဟုတ်ဘူး၊” ၊
“မင်းတကယ်ကော ကြိုးစားကြညြ့် ပီးပြီလား။”
အဲသလိုစဉ်းစား၊ စဉ်းစားရင်း ပထမပေါ်လာတဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာမှ ဘယ်အလုပ်သည် ကြီးပွားချမ်းသာဖို့
ပါမောက္ခကြီးကပေးသော အဖြေကိုလူငယ်အားမရ။ သူ့အား သည့်ထက်တိတိကျကျြေကျပြောသင့်သည်ဟု
ပါမောက္ခကြီးက ဝိုင်ခွက်ကိုကောက်ကိုင်ပြီး တစ်ငုံလေးငုံသည်။ သောက်တာနှင့်မတူ အရသာကို
အာရုံစူးစိုက်ကြည့်ရင်းက လင်းကနဲ့ ရှင်းကနဲမြင်လာလိမ့်မယ်၊ ဒါဟာ အခွင့်အရေးပဲ။ ဒါကိုစလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိစိတ်က
ဒါတွေလည်း မင်းကိုပေးခဲ့ပါ့မယ်၊ အတွေ့အကြုံရယ် လုပ်ငန်းဗဟုသုတရယ်၊ လုပ်ကိုင်ပုံ နည်းနာတွေရယ်၊
တခြားအရည်အသွေးတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ အရေးကြီးတာ အလိုဆန္ဒပဲ၊
အရေးမကြီးပါဘူး၊ လုပ်ငန်းလောကထဲမှာ လှုပ်ရှားရင်းကပဲကြီးပွားမယ့် လမ်းစသစ်တွေ တွေ့လာပါလိါလိမ့်မယ်၊
ကျေနပ် သွားသည့်ဟန်မျိုး။ “မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ”
mmcybermedia.com “ဘယ်မှတော့သွားမကြည့်ရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာာသေချာ….၊”
“အေး ဟုတ်ပြီ၊ တစ်နည်းနည်းဖြစ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းမှာ အချိန်သိပ်မရဘူး၊ ဘယ်နည်းနဲ့ လုပ်မလဲ၊ စိတ်အေးလက်အေး တွေးမနေနိုင်ဘူး၊ အချိန်တစ်နာရီအတွင်း ငွေတစ်သောင်းကို ရကိုရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ
“မဟုတ်ဘူးကွ အဲဒါမင်းမှားတယ်၊ ကြိုးစားမကြည့်သေးဘဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေတာ နောက်အဲဒါမျိုး
မလုပ်မိအောင်သတိထားကွ၊ အဲဒါဟာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်တဲ့ လူတွေလုပ်လေ့လုပ်ထရှတိဲ့ပုံစံပဲ၊ တစ်ချို့က လုပ်ကြည့်ခင် လက်မြှောက်တယ်၊ အချို့ကလုပ်တော့လုပ်တယ် ဒါပေမယ့် အစကတည်းကကို
“အင်း ကျွန်တော်……” ……”
အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်စ်ိတ်ချတာ မဟုတ်တော့ စိတ်ကမပါဘူး၊ ဝတ္တရားကျေလုပ်တယ်၊ အဲဒီတော့
“ဟေ့ ဒီမှာကွာ ငွေလိုချင်ရင် မင်းဘယ်သွားရမလဲ၊”
မအောင်မြင်ဘူး၊ လူနဲ့ဆက်ဆံပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမှာ ကိုယ်က ယုံကြည်စိတ် ပြည့်ဝနေ အားတက်
“ငွေရှိတဲ့ တစ်နေရာရာ…” နရာရာ
ထက်သန်နေမှ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ဘက်ကိုပါမှာပေ့ါ၊ ကိုယ်လိုရာရမှာပေါ့၊ အာရုံစိတ်ကြီး ခေါင်းထဲထည့် ထားတဲ့ လူတွေဟာ အမြဲရှုံးတယ်၊ အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမွေး၊ အဲဒီစိတ်နဲ့လှုပ်ရှား၊း၊”
“နီ နီးရာလူဆီပြေးရမှာပေ့ါ၊” ၊
အဲဒီတော့သံသယစိတ်ခေါင်းထဲ ဝင်မယ်ကြံတာနဲ့ ချက်ချင်းမောင် မာင်းထုတ်ပစ်၊ သူ့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အရာက မသိသေးဘူး၊
မင်းကိုကြီးပွား ချမ်းသာရေးလျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလာံုးး သွန်းပြီးပြောပြနေတာ၊ ဒီလူနဲ့တွေ့တုန်း မင်းဘာလုပ်ရ
မလဲ မသိသေးဘူးလား၊” ရုတ်တရက်တော့ သူ့နှုတ်က မရဲသေး။ ခဏကြာမှအားတင်းပြီး သူပြောလိုက်သည်။
“ဟုတ်ကဲ၊့ ဒီကိစ္စမဖြစ်မနေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နည်းနည်းဖြစ်ရမှာပေ့ါ။။”
“အေးပေါ့ကွ၊ ဘာဝေးဝေးသွားစရာလိုမလဲ၊ မင်းရှေ့မှာ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်လုံး ရပ်နေတာ၊
ရိုးတိုးရိပ်တိတ် သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ချက်ချင်းမြင်သည်။
ငွေတစ်သောင်း တစ်နာရီအတွင်း မရမနေရှာရမယ်၊ အသည်းအသန် လိုနေပြီဆိုပါတော့ ဘာလုပ်မလဲ၊”
အဖျက်စွမ်းအားဟာ သိပ်ကြီးမားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူလည်းပဲ၊ “အတွေး”ပဲကိုး၊ ခေါင်းထဲမှာ
လောက်ကတော့ ထုတ်ချေးမယ့်လူတွေပေါပါသကွာ၊ ဒါကလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကိုပြောတာ၊ အခုမင်းမှာ
တကယ်အောင်မြင်လာရလိမ့်မယ်၊ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယမျိုးနည်းနည်းမှ အဝင်မခံနဲ့၊ အဲဒီကောင်ရဲ့
တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ဆီမှာ “စွံ”မှာပေ့ါ၊ အကျိုးအမြတ်ရှိဖို့ အလားအလာမြင်ရင် ငွေတစ်သောင်း
ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်၊ ငါအောင်မြင်ရမယ်လို့ အတွင်းစိတ်ထဲက ပြင်းပြင်းပြပြ ယုံကြည်ထား၊
သူ့အတွက်ဘယ်လို၊ မင်းအတွက် ဘယ်လို၊ မင်းအစီအစဉ်က စနစ်တကျ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့
ပြည့်ဝသူဟာ ဘယ်ပြဿနာမျိုး ကြုံသည်ဖြစ်စေ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ သူ့အလိုလို ပေါ်လာအောင်
ဘယ်လိုပုံစံစီစဉ်ထားတယ်၊ ငွေဘယ်လောက်ရင်းပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်တယ်၊
“ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ့မယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စမှာတော့ခက်နေတာအမှန်ပဲ၊” “ပြဿနာမှန်ရင်
mmcybermedia.com “ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကို ဆရာကြီးကပဲ ထုတ်ချေးပေးပါ
မခဲယဉ်းဘူး၊ အလွယ်တကူအလျှင်အမြန်ရနိုင်တယ် ဆိုပြီး စွဲမြဲယုံကြည်ထား။ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ သံသယ
တောင်းရုံပါပဲ၊ လူတွေက မတောင်းရဲကြဘူး၊ တောင်းရဲရင်ရတယ်ကွ၊”
ပြောပြောဆိုဆိုသူက လူငယ်နှင့် တွေ့စကတည်းက သူ့အိတ်ထဲတွင် ရှိနှင့်နေသော ငွေတစ်သောင်းကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
ကမ်းပေးသည်။ လူငယ်က စိတ်လှုပ်ရှားစွာပင် လက်ခံယူသည်။ သူ့တစ်သက်လုံးသည်မျှ များပြားသောငွေကို
“ယံ ယုံကြည်စိတ်လျော့ပါးတဲ့အခါမျိုး၊ ငါလုပ်တာတွေအောင်မြင်နိုင်ပါမလားလို့ သံသယဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာ
“ဒီပိုက်ဆံအရလွယ်လိုက်တာ မင်းအောက်မေ့မယ်၊ ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့သာ အချောင်ရတာလို့မင်း
ကိုယ့်ကကိုယ်
ထင်ချင်ထင်နေမယ်။ မဟုတ်ဘူးကွ၊ မင်းသေသေချာချာမှတ်ထား၊ နောက်လည်းပဲဒီထက်ဘာမှ မခက်ခဲတဲ့
အရှုံးစိတ်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အောင်စိတ် အောင်အတွေးတွေကို ဂါထာရွတ်သလိုရွတ်ဆိုတဲ့နည်းပဲ၊
တည်ကြည်လေးနက်စွာနဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မင်းရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာအခိုင်အမာပြဌာန်းကြေညာ
ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှ နည်းနည်းပါးပါးရနိုင်တယ် အောက်မေ့ကြတယ်၊ အယူအဆမှားနေကြတာကွ၊
စကားလုံးတွေနဲ့ လက်တွေ့ဘဝ မင်းကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တသားတည်း ထပ်တူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊
အယူအဆမျိုးနဲ့ သွားနေလို့ကတော့ နဖူးကချွေး ခြေမ ကျအောင်သာ ကျုံးရုန်းလုပ်နေရမယ်၊ ဘယ်တော့မှ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုက်တွန်းစေ့ဆော်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရင့်သန်လာတာနဲ့အမျှ ခေါင်းထဲကို စကားလုံးများအားဖြင့်
ပြဌာန်းထည့်သွင် င်း ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်တွေအတိုင်း အပြင်မျာတကယ် လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာ လျင်မြန်သထက်
လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ လုပ်ပေးနိင်ုခြင်းပဲ၊
တိုးတက်အောင် မင်းလုပ်နိုင်ရမယ်၊ တစ်နာရီ တစ်ဆယ်မို့လို့ နှစ်နာရီနှစ်ဆယ်ဆိုတာဟာ စက်ရုပ်တွေမှာ
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ့်ပါလာတဲ့သဘော၊ ဒီအခါမျိုးမှာအထူးသတိထားရမှာက သူတစ်ပါးကို အနှောင့်အယှက်
မှန်တယ်၊ လူကတော့ ဒီနေ့တစ်နာရီတစ်ဆယ်ပေမယ့် နောက်နေ့မှာ တစ်နာရီနှစ်ဆယ် သုံးဆယ်ဖြစ်ရမယ်၊
ဖြစ်စေမယ့် အတွေးမျိုးတွေ ခေါင်းထဲထည့်မပေးမိဖို့ပဲ၊ သူတစ်ပါးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်လာတဲ့ အခါမျိူးမှာ
မင်းခေါင်းထဲကို ထည့်သွင်းပြဌာန်းလိုက်တဲ့ အတွေးဟာ အပြုသဘောအတွေး သူတစ်ပါး
တိုးတက်သွား နိုင်ရမယ်၊ အဲဒီလိုကျော် လွားတိုးတက်နိုင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်က ဖြစ်နိုင်တယ် ဖြစ်ရမယ်
ဆောင်တဲ့ အတွေးမျိုးပဲဖြစ်စေရမယ်။ သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဆောင် င်ရွက်ချက်တွေဟာ
အာနိသင်တူစွာ အာနိသင်တူစွာ တုံ့ပြန်လာတတ်စမြဲပဲ။”
ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် နည်းလမ်းရှာဖွေမယ် လက်ငင်းအကောင်အထည် ဖော်မယ်ဆိုပြီး ထက်သန်ပြင်းပြနေတဲ့ စိတ်ဇွဲ၊ အဲဒါတွေ ပြည့်စုံနေဖို့ပဲ၊ အဲဒီတော့ မင်းခေါင်းထဲမျာစွဲထား ငွေဆိုတာ ကိုယ်တကယ်လိုချင်ရင် Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
mmcybermedia.com သည်လိုပြောရင်းနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွားဟန်တူသည်။ လူငယ့်ထံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်
လူငယ်ပဲလို့ ငါသိသလို အဲဒီလူငယ်လာတဲ့အခါလည်း မင်းသိလိမ့်မယ်။ ဒီကနေ့ မင်းကိုငါပေးတဲ့အတိုင်း
ငွေစက္ကူထပ်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး သူဆိုသည်။
သူ့ကိုမင်းပေးပါ၊ အရေးကြီးတာက အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီငွေသည် မင်းအတွက်ကြီးလေးသော ငွေမဖြစ်စေဖို့၊ အလွယ်တကူပေးနိုင် ကမ်းနိုင်အောင် အိတ်ထဲ အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ငွေကြေးမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲ၊ ဒီကနေ့ငါက
“ဒီငွေတွေကို ငါမင်းကိုမချေးဘူး” ဆိုပြီး သင့်တော့မည့်စကားလုံးရှာနေသည့်ဟန် ခဏရပ်နေသည်။
လူငယ့်ရင်ထဲတထိတ်ထိတ်၊ အဘိုးကြီးစိတ်များပြောင်းသွားပြီလား။ “ငါမချေးဘူး
တန်ဖိုးချင်း ညီမျှတဲ့ ငွေကို သူရင်းနှီးနိုင်အောင် မင်းပေးရလိမ့်မယ်။”
ငွေပါ၊ ငါ့ကိုကနဦး လမ်းညွှန်သွန်သင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက လုပ်ငန်းရင်နှီးဖို့ ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေ၊ မင်းလည်းပဲ ဒါကို
“အဲဒီငွေကို လက်ခံတဲ့အချိန်မှာ သူလည်းပဲ နောင်တစ်နေ့ကျရင် အခုငါမင်းကိုပေးတဲ့ အသိပညာနဲ့
လုပ်ငန်းရှင်းနှီးဖို့အတွက်ကလွဲပြီး တစ်ခြားဘာမှမသုံးနဲ့၊ မပျောက်ပျက်ရအောင် အိုးထဲထည့် တွင်းတူးပြီး
အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ ကိုယ့်အလှည့်မှာ ချိန်ဆက်မပြတ်စေနဲ့၊ ပေးရန်တာဝန် ပျက်ကွက်သူဟာ ကံကြမ္မာ
လုပ်တတ်တယ်၊ ကြောက်စိတ်ရဲ့စေ့ဆော်မှုနဲ့လုပ်ကြတာ၊ ကြောက်စိတ်ဆိုတာ လူအတွက် အဆိုးဝါးဆုံး
ဖြောင့်တည်ကြည်တဲ့ လူပဲ၊ ဒါကြောင့်မို့ ငါ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မင်းကိုစိတ်ချလက်ချ လွှဲအပ်ခဲ့တာ။”
မြှုပ်တဲ့လူဟာ ငွေနဲ့ထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး၊ သူ့မှာ ချမ်းသာဖို့ လမ်းမရှိဘူး၊ သူဟာကြွယ်ဝချမ်းသာရေးဆိုရာ
နည်းစဉ်တွေဟာ ငွေရှာဖို့အတွက်မှာသာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းချမှန်တဲ့ ဘယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မျိုးကိုမဆို အရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့နည်းစဉ်တွေပဲ၊ ငါအခုငွေတွေ အမြောက်အမြားစုဆောင်းခဲ့တာက ငွေကိုခင်တွယ်လို့
လူငယ်က ငွေထုပ်ကလေးကိုပွတ်သပ်ထွေးပိုက်ရင်း သူ့အပေါ် ရက်ရောသဘောကောင်းလှသော
မဟုတ်ဘူး၊ စိတ် တဓ်ာတ်စွမ်းအားကြီးမားအောင် လေ့ကျင့်ထားသူများ ထူကဲတဲ့တန်ခိုး သတ္တိတွေရှိတယ်ဆိုတာ
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ သြဝါဒစကားများကို နားစိုက်ထောင်နေသည်။ ပေးတယ်လို့
လူအများ သိမြင်ကြအောင်လို့ သူတို့က်မောတဲ့ငွေကြေးဘက်မှာ ငါလုပ်ကိုင်ပြခဲ့တာ။” ဒါပေမယ့်
သူကအမောဖြေသည့်ဟန် ခေတ္တနားနေသည်။ လူငယ်က ဘာမှဝင်မမေးရဲ။ သူဘာဆက်ပြောမလဲ
တောင်းဆိုမယ်၊ တစ်နေ့သောအခါမှာ မင်းလည်းပဲငါ့နည်းတူ နောက်လူတစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ထပ်ဆင့် နောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်သုံးဆယ်
ရောက်လာသလိုပဲ လူငယ်တစ်ယောက် မင်းဆီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ မင်းလာတဲ့အခါ မင်းဟာငါပေးရမယ့် Proof Reading- ကိုညီစေမင်း , PDF - berhad (mmcybermedia.com)
လှမ်းမျှော်ကြည့်သည်။ သူ့မျက်နှာညှိုးလျသည့်အသွင်ပေါ်လာသည်။ သည်အချိန်မိုးကရွာချသည်။
အကြီးမားဆုံး ဥပဒေသကြီးတစ်ခုကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်။ ငွေဆိုတာလည်ပတ်လှုပ်ရှားရင်းသာ
လိုတယ်၊ ပျောက်ပျက်လျော့နည်းမသွားအောင်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ ကြောက်စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး ငွေကိုမြေကြီးမှာ
ကကောလို့ မင်းမေးမယ်၊ ငွေကြေးဟာလည်း တန်ဘိုရှိတာအမှန်ပါပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငွေကြေးဟာ
လူအတွက် လွတ်လပ်မှုများစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ပဲ၊ ငွေကြေးဟာ လူအတွက် အနှောင့်အဖွဲ့အတားအဆီး အများအပြားကို ဖြတ်တောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေထက်ပိုပြီး လွတ်လပ်မှု ပေးနိုင်တဲ့အရာဟာ တွယ်တာကပ်ငြိမှုကင်းမဲ့ခြင်းပဲကွ၊
အခန်းထဲမှာ လူငယ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး များမကြာမီပင် ဘဏ္ဍာစိုးကြီးရောက်လာသည်။
နေတယ်။ မလွတ်လပ်နိုင်ဘူး၊ လက်ချည်းဗလာထွက်သွားနိုင်တဲ့လူဟာ တကယ့်စစ်မန်ှတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို
“ဆရာကြီးပေးခိုင်းလိုက်တာပါ၊ ဆရာ့အခန်းထဲသွားပြီး ဒီစာကို အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပါတဲ့၊ ပြီးတော့ဒီမှာ
နောက်တစ်ရက် ဆက်နေချင်ရင် နေနိုင်တယ်လို့ ဆရာကြီးက မှာပါတယ်။”
ငါကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့ နှင်းဆီခြံရဲ့ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက် အဖြစ်ကိုသာကျောကျေနပ်နှစ်သက်တယ်၊ငါ့ဘဝမှာ
သူသိချင်လှပြီ။ အခန်းရောက်တော့ တံခါးကိုပိတ်မည်ပြုပြီးမှ သတိရကာ ခပ်ဟဟလေးပဲ ထားလိုက်သည်။
ခုတင်အစွန်းမှာထိုင်ကာ စာအိတ်ကို ဖွင့်သည်။ အတွင်းမှာစာတစ်စောင်၊ ထို့နောက် နောက်ထပ် စာအိတ်
ဒါတွေကိုစွဲလန်း တွယ်တာမနေဘူး၊ ဘယ်တုန်းကမှ ငါဟာငွေရဲ့ ကျေးကျွန်မဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ မင်းလည်း အဲဒါကို
တစ်အိတ်။ စာကို အလျင်စလို သူဆွဲထုတ်သည်။ စာက စက္ကူအဖြူပေါ်တွင် အနက်ရောင်မင်ဖြင့်ရေးထားပြီး
ကတိပေးပါ။ ကိုယ်ရှာတဲ့ငွေရဲ့ကျေးကျွန်ဘဝကို ဘယ်တော့မှ မရောက်စေနဲ့။”
လက်ရေးက ရှင်းလင်းသပ်ရပ်လှသည်။ စာမှနှင်းဆီနံ့ သဲ့သဲ့လွင့်ပျံ့လာသည်။
“မင် မင်းအတွက်နောက်ဆုံးအမှာစကားတွေပါ။ …..ငါ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်တွေအားလုံး
ပြန်လည်တောက်ပလာသည်။ အခန်းထဲမှာလင်းလာသည်။ ဖယောင်းတိုင်မိးတွေမလိုတော့။ ပါမောက္ခကြီးက
အထောက်အကူပေးမယ့် ပစ္စည်းတွေပဲ၊ ဒါတွေကို အားကိုးပါ၊ ယုံကြည်ပါ၊ အသုံးချပါ၊ စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး
စာအုပ်ထဲမှာပါတာတွေကို အလကားစာတွေ့တွေပါကွာလို့ သဘောထားတတ်ကြတယ်၊ ဘေးဘိုးစဉ်ဆက်ရဲ့ သဘောထားအမှားနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ အလကားစာတွေ့
အကြုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာ သူတို့မသိဘူး၊ သူတစ်ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေက သင်ခန်းစာ
တတ်ကြတယ်။…… နောက် လူတစ်မျိုးကျတော့ စာထဲပါတာမှန်သမျှလုံးဝဥဿုံ ယုံကြည် တတ်ကြတယ်။
အဲဒီအတိုင်းတသွေမတိန်း လိုက်နာလုပ် ဆောင်တတ်ကြတယ်၊…..”
တစ်ပန်းသာမယ်ဆိုတာတွေ သူတို့မသိကြဘူး၊ နောက်လူတစ်မျိုးကျတော့ စာထဲပါတာမှန်သမျှ လုံးဝဥဿုံ ယုံကြည်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီအတိုင်းတသွေမတိမ်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ စာအုပ်စာတမ်းပြုစုတဲ့ လူတွေဆိုတာ
မင်းတို့ငါတို့ လျှောက်ရမယ့် ခရီးလမ်းက သူတို့ခရီးလမ်းတွေနဲ့ ထပ်တူကျချင်မှကျမယ်၊ တူတဲ့နေရာတူပြီး
ခြေကျင်းဝတ်နားအထိ ဖုံးနေသည်။ လက်နှစ်ဖက်က ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်တင်လျှက်။ ညာဘက်လက်ထဲမှာ
အခါမှာတော့ သူထိတ်လန့်သွားသည်။ ပါမောက္ခကြီးလုံးဝငြိမ်သက်လျက်ရှိနေသည်။ အဖြူရောင်ဝတ်ရုံရှည်က
အသက်ရှုသံ လုံးဝမကြားရ။ ထူးဆန်းသော ပါမောက္ခကြီးထူးဆန်းစွာပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ၊ မိမိနှင့်တွေ့စဉ်
တလျှောက်လုံး ပါမောက္ခကြီးပြောဆိုသည့် စကားများထဲတွင် သူသွားတော့မည်ဆိုသည့် အရိပ်အယောင်
ဆိုတာ ရဲဝံ့ယုံကြည်စွဲနဲ့ မင်းဆက်လက်ဖြန့်ချီပေ့ါ၊
“ကဲ ငါလည်း သွားရဦးမယ်၊ င့ါနှင်းဆီပန်းတွေစောင့်နေရတာ ကြာလှပါပြီး။။”
ပါမောက္ခကြီးက အနေအထိုင်အပြုအမူ ထူးဆန်းသူတစ်ယောက်မဟုတ်လား။ သို့သော်အနားရောက် အနားရောက်လာသည့်
မင်းအရင်ဆုံးလက်တွေ့စမ်းသပ် သုံးစွဲကြည့်ပါ၊ ငါ့နည်းစဉ်တွေအတိုင်း လက်တွေ့ကျင့်ကြံလို့ ခြောက်နှစ်ကြာတဲ့
တစ်တိုင်တည်းသာ တောက်လောင်နေဆဲ။ ပန်းရုံနံဘေးမှာ တရေးအိပ်နေတာလား၊ လူငယ်တွေးမိသည်။
ငါဆီက အသိပညာတွေ မင်းရရှိခဲ့ပုံကိုပါ ပြန်ပြောင်းပြောပြစေချင်တယ်၊ ဒါကတော့ ငါဆန္ဒပေ့ါ၊ ဒါပေမယ့်
နောင်အခါ မင်းတတ်နိုင်သမျှ လူအများဆီကို လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဖြူးစေချင်တယ်၊ မင်းနဲ့ ငါတွေဆုံကြပုံနဲ့
ပိုပြီးတိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ငါရေးပေးထားတယ်၊ ဒါမင်းအတွက် ငါရဲ့ဦးနှောက်အမွေပါပဲ၊ ဒီအမွေကို
မင်းကိုပေးဘို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်နဲ့ပြောတော့ မပြည့်စုံတာ လစ်ဟင်းတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်၊
ထုတလ်ိုက်သည်။
ပါမောက္ခကြီးနှင်းဆီပင်တွေနားရှိမှာပဲဟု သတိရပြီး သူထွက်လိုက်လာသည်။
“မင်းနဲ့ငါ စတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး၊ ငါ့ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး စုဆောင်းသိုမှီးလာခဲ့တဲ့ အသိတရားတွေ အခုပူးတွဲပါတဲ့
သူထွက်လာသည်။ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးကိုခေါ်ကြည့်သည်၊ မရှိ။ အပြင်ဘက်လှမ်ကြည့်တော့ နေသာနေသည် နသည်။
ရတနာသိုက်အညွှန်းတစ်ခုပမာ အဖိုးတန်လှသည့်စာရွက်စာတမ်းများကို သဲသဲမဲမဲဖတ်ရှုရင်း လူငယ်စိတ်အား ထက်ကြွ
အတော်များသည်။ စောစောက စာအတိုင်းပင် လက်ရေးလှလှနှင့် ရေးသားထားသည်။ သူပြောပြခံသည့်
ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ ဒါဟာသူများဦးနှောက်ဆီမှာ ကျေးကျွန်ခံတဲ့သဘောပဲ၊ မင်းဦးနှောက်ဟာ ဦးနှောက်ဖြစ်ပါစေ၊
mmcybermedia.com သည်ကနေ့သည် သေရမည့်ဘေးအတွက်
ပင် မဆန့်။ သည်စာအုပ်တွေလက်ခံမည်ဆိုလျှင် သူ့မှာမူလရှိသည့် ပရိဘောဂများက နေရာဖယ်ပေးရမည်
လျောင်းနေချိန်မှာပင် သူ့မျက်နှာက ပကတိ ငြိမ်းအေးကြည်လင်နေသည်။ သူသွားလိုရာ တစ်နေရာသို့
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွင်စွာ ထွက်ခွာသွားသည့်နှယ်ပင်။ ပါမောက္ခကြီး
စာအုပ်တွေက သူ့အားပါမောက္ခကြီးကိုယ်စား လမ်းညွှန်မည့်အရာများဖြစ်သည်မဟုတ်လား။ ရှေ့မှာသူ့အတွက်
ဘဝသစ်စတော့မည်။ ရည်မှန်းချက်သစ် လမ်းစဉ်သစ် အနေအထိုင်သစ်ဖြင့် ခရီးသစ်ကို သူနှင်တော့မည်။
ပါမောက္ခကြီး လက်ထဲမှ နှင်းဆီပန်းလေးကိုသူအမှတ်တရ ယူဆောင်သွားမည်ဟု စိတ်ကူးကာ လက်လှမ်း
လိုက်မိသည်။ ရိုးတံလေးကိုထိပြီးမှ သူလက်တွန့်သွားသည်။ နှင်းဆီကို မြတ်နိုးလှသော ပါမောက္ခကြီးထံမှ
သည်ပန်းလေးကို သူမယူရက်။ သည်ပန်းပွင့်လေးသည် ဆရာကြီး၏ နောက်ဆုံးအဖော်မွန် မဟုတ်လား။ သူမျက်လုံးအစုံမှာ မျက်ရည်များရစ်ဝဲလာသည်။ ဆရာကြီးနှင့် သိကျွမ်းခဲ့ရသည်မှာ ဘာမျှမကြာသေး။
သို့သော် သူ့ရင်ထဲတွင် ဖခင်တစ်ဦးအလား တွယ်တာမိခဲ့ပြီ။ ပါမောက္ခကြီး၏ သြဝါဒတွေကို သူတသွေမတိမ်း
ပထမဆုံးငွေတစ်သန်းကို အောင်မြင်စွာ စုစည်းရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်ကားကု ကုဋေကုဋာသန်းပေါင်းများစွာ
လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် ဆန္ဒပြုလိုက်သည်။ ဆရာကြီး၏ နည်းစဉ်များ ဘဝဒဿနများကို
လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ချီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ ကတိသစ္စာပြုလိုက်သည်။ ထူးဆန်းစွာပင် အဲသည်အခိုက်တွင်မှ
နည်းစဉ်များ ဘဝဒဿန များကို ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးသည့်အနေဖြင့် ဆရာကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခံပုံ ဇာတ်လမ်းစုံကို မချွင်းမချန် ဖွင့်ဟရေးသားပေးဝေခဲ့ပေသည်။
ယခုမှပင်ပါမောက္ခကြီး တကယ့်စိတ်ချလက်ချ ထွက်ခွာသွားဖြစ်လေသည်လားဟု လူငယ် တွေးတော လိုက်မိသည်။ ပါမောက္ခကြီးပေးသည့် အမွေအနှစ်တွေကိုပိုက်ကာ သည်အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှ သူထွက်လာ
ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ပါမောက္ခကြီး၏ နေအိမ်စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်စာတမ်းများကို ပစ္စည်းရွေ့ပြောင်း သူများ သူ့အိမ်သို့ လာရောက်ပို့ဆောင်ကြသည်။ စာအုပ်တွေကအမြောက်အများ။ သူ့အိမ်မှာ ထားစရာနေရာ
ပါမောက္ခကြီးနံဘေးရှိ ဖယောင်းတိုင်စင်မှ နောက်ဆုံးဖယောင်းတိုင် မီးတောက်ကလေးက ဟုတ်ကနဲငြိမ်း
။ထူးဆန်းသောဥယျာဉ်မှူး အခွင့်အရေးနှင့်စွန့်စားမှု မမျှော်လင့်ဘဲအကျဉ်းသားဖြစ်သွားခြင်း - 1 - မာတိကာ Crystal Clear (mmcybermedia.com) မှ စာရိုက်...